संकष्टकालको अघि येशूको फिर्ती | Apg29
उहाँले कष्ट को अन्त मा आएको जब र्याप्चर मा य&
चर्च पावलले प्रकट भएको थियो कि एक गोप्य थियो जसरी, त्यसैले पनि र्याप्चर, हामीलाई प्रकट भएको एक गोप्य छ। लागि गोप्य ग्रीक शब्द जहाँ huvudbetydningen छ "Mysterion" छ "पूर्णतया नयाँ छ र अघि भएको छैन भन्ने कुरा।"
पूर्व-trib लागि रक्षा
ई विश्वासीहरूको र्याप्चर हुनेछ जब N प्रश्न धेरै मानिसहरू येशूको फिर्ती को सम्बन्ध मा आफूलाई यस्तो प्रश्न छ? पूर्व-trib सिद्धान्त, मध्य-trib सिद्धान्त र पोस्ट-trib सिद्धान्त: हामी तीन फरक फिक्स मुद्दा कुरा। यो पूर्व-trib सिद्धान्त लागि एक रक्षा हुनेछ। त्यो विश्वासीहरूको र्याप्चर संकष्टकालको सुरु गर्नु अघि हुन्छ भन्ने छ।
प्रभुको आउँदै लागि हामी अलग हुनुपर्छ तीन कुराहरू छन्। यो चर्च, इजरायल र अन्यजातिहरूको लागि परमेश्वरको योजना छ। हामी अक्सर बनाउन त्रुटि हामी मण्डलीको लागि, इजरायल लागि परमेश्वरको प्रतिज्ञा र योजना मिश्रण छ। मण्डलीको इस्राएलका ठाउँ लिन्छ कहिले र conversely यसलाई गलत हुनेछ। परमेश्वरको इस्राएल बोल्नुहुन्छ र परमेश्वरको मण्डलीलाई बताइएको जब जब हामी भेद पर्छ।
पी व्यवस्था समय मा इस्राएलका मानिसहरूलाई परमेश्वरको मुक्तिको योजना को विशेष वाहक। GT गरेको मुख्य विषय ख्रीष्ट आउँदै र उसको राज्य हो - प्यारा, राज्य प्रतिज्ञा, जहाँ इस्राएलका मानिसहरू को केन्द्र र जहाँ इस्राएल र यरूशलेमका भूमि पृथ्वी, भौगोलिक राजनीतिक र आध्यात्मिक केन्द्र को केन्द्र हुनेछ।
प्रभुको व्यवस्था यरूशलेमबाट सियोन, र आफ्नो शब्द निस्कनेछ, र राष्ट्रका यो स्ट्रीम हुनेछ। धार्मिकता, शान्ति र मुक्तिको पनि सहस्राब्दी छ शान्ति को यो राज्य, मा, यो पृथ्वीमा विजयी हुनेछ।
विधर्मीहरूलाई र सभा
एक मसीही राज्य redress एक परिणाम यसैले GT को कुनै गोप्य थियो TT राष्ट्र, सुरक्षित हुनेछ। तर प्रभु चर्च छ जो अनुग्रहको परमेश्वरको सुसमाचार को स्वर्गीय मान्छे चयन गर्न, पवित्र आत्मा पृथ्वीमा पठाएर, अन्यजातिहरूको को एक विशेष व्यवस्थापन तयार थियो, समय मा एक गोप्य थियो। त्यसैले, यो पुरानो नियममा उल्लेख मण्डलीको पनि छैन, र पनि धेरै येशूको शिक्षामा सीमित।
यो अचम्मको गोप्य हामी अन्यजातिहरू परमेश्वरको प्रतिज्ञा सँगी राजकुमार भएका छन् कि, पहिलो आफूलाई प्रभुको एक प्रकाश मा पायो जसले प्रेरित पावलले द्वारा पारित भएको थियो। (Efe 3: 3-6, कलस्सी 1: 25-27)। पवित्र आत्मा र चर्च यो अर्थव्यवस्था मा सधैं सँगसँगै छन्। पवित्र आत्मा विश्वासी, मण्डलीको हृदयको स्थायी bolig छ, र हाम्रो सम्पदा को धरौटीको अर्को दिन uppryckelsens छ।
सम्मेलन समय हामी पवित्र आत्मा, मात्र मन्दिरमा परमेश्वरको आज संसारमा थाह छ कि मन्दिर हो। पवित्र आत्मा पृथ्वीमा आफ्नो Abode लिएको छ कि, साँच्चै खडा गर्न सक्नुहुन्छ एटिक्राईष्ट रोक्न जो अन्त छ।
येशू ख्रीष्ट प्रकाश - यो चाँडै अगाडी हिड हुनेछ
1:19 अप - हिड कर हुनेछ के तपाईंले देख्नुभएको छ र के छ र के तल शब्दहरू लेख्नुहोस्।
हे Rdet "हिड कर" ग्रीक शब्द हो मेटा tauta, जसको अर्थ "यी कुराहरू पछि" ।
यो प्रकाश लेखिएको थियो कि सम्पूर्ण विभाजन को एक प्रमुख पद छ। भनी येशूको स्वर्गीय दृष्टि हेर अनुमति गरिएको छ पछि, उहाँले लेख्न पर्छ भनेर सिकेका:
1 उहाँले देखेको छ त्यो। 2. के हिड कर हुनुपर्छ 3. के छ। अर्को शब्दमा प्रकाश को एक तीन साझा विभाजन।
1 उहाँले के देखेको छ
मा अध्याय 1: 12-16 देख्नुहुन्छ यूहन्नाले महिमित येशू आफ्नो हात मा सात तारा (7 पेरिशेस स्वर्गदूतहरू) संग, सुनको सातवटा दीप (7 पेरिशेस) को बीचमा खडा देखे। उहाँले पनि कलवारी को बौरिउठ्नुभएको प्रभु विजय हो जो महिमा येशू, देख्नुहुन्छ। उहाँले तिनलाई मानिसको महिमा छोराको रूपमा, थुमा रूपमा, यहूदा कुलका, जसलाई महान न्यायाधीश र राजाहरूको राजा र प्रभु प्रभुहरूका को सिंह देख्नुहुन्छ।
2. के हो
डी टी सबै येशूको फिर्ती गर्न मण्डलीको जन्म मा, भविष्यसूचक र ऐतिहासिक समय आधारमा सभा urskillnings समय एक सिंहावलोकन छ।7पत्र मण्डलीको र उमेर मार्फत आफ्नो आध्यात्मिक विकास र अर्को र्याप्चर प्रतिनिधित्व।
मण्डलीको पहिलो पटक को प्रतिनिधित्व पहिलो अक्षर एफिससका मण्डलीलाई पठाएको, अर्थात् प्रेषितहरूको जस्तै उमेर। सात र अन्तिम पत्र लाओडिसियाका मसीहीहरूलाई मण्डलीको पठाइयो। कि पत्रमा उल्लिखित आध्यात्मिक अन्धकार येशूले लाभ अघि धेरै पछिल्लो समय मा एक विवरण छ। त्यो लाओडिसियाका मण्डलीको अन्त-समय चर्च।
3. अनि खोल अगाडी हिड हुन
हे Rdet "हिड कर" ग्रीक शब्द हो मेटा tauta, जसको अर्थ "यी कुराहरू पछि" । चर्च उमेर,7पत्र मार्फत प्रस्तुत गरिएको छ, जो पछि अर्थात् क्रमिक।
Rev 4: 1 - तब (अर्थात्, पृथ्वीको सभा समय छ, र यो पूर्ण बल भएको हुँदा), म देखे, र हेर, यो मर स्वर्ग खोलिएको थियो, र म थियो आवाज पहिलो सुने , मलाई बोल्ने एक बिगुल जस्तै यसो भन्नुभयो: " माथि hither आउन (, अर्थात् चर्च उमेर पछि)।, र म के हिड कर हुनुपर्छ तिमीलाई देखाउने" एक पटक म आत्मा आउनुभयो, र हेर, एक सिंहासन स्वर्गमा उभिरहेको थियो, र एक सिंहासनमा बसे।
यहाँ यूहन्ना प्राप्त प्रकाश जस्तै 1 थिस्सलोनिकी 4:16 बाट सभा र्याप्चर, छ। बलियो आवाज, परमेश्वरको र र्याप्चर को ट्रम्प। एक राम्रो समानान्तर! जन आत्मा मा सिंहासनमा वरिपरि 24 प्राचीनहरूले प्रतिनिधित्व छ कि raptured चर्च हेर्न हुन्छ।
हामी जुन र्याप्चर पछि, तर पृथ्वीमा संकष्टकालको अघि स्वर्गीय अध्याय4र5मा "screanshot" प्राप्त। अध्याय6देखि हामी धरती मा फिर्ता छौं, र यूहन्ना चरा आँखा दृश्य कष्ट अध्याय 6-19 मा धरती मा बाहिर प्ले देख्नुहुन्छ।
सिंहासन वरिपरि 24 एल्डरहरूले
टी reviously चर्च को 24 एल्डरहरूले कष्ट अघि र्याप्चर द्वारा आकाश मा प्रतिनिधित्व छ मलाई दावी। हामी सभा गर्न 24 प्राचीन तथा प्रतिज्ञा गर्दै नै जानकारी नकल गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ:
को संन्यासी प्रतिज्ञा गर्नुभएको
thrones बसिरहेका (प्रका 4: 4.11: 6
छ सेतो राज बस्त्र (प्रका 4: 4)
उनको टाउको मा मुकुट (प्रका 4: 4,10)
राजा छ (प्रकाश 5:10
पुजारी (प्रका 5:10)
Thrones (मत्ती 19:28, प्रकाश 3:21
सेतो लुगा (प्रकाश 3: 4-5)
क्राउन (1 गाई 9:25, लेन 4: 1.2)
हुनेछ राजा (प्रका 1: 6, 2:26, ​​20: 6)
हुनेछ पूजाहारीहरू (प्रका 20: 6)
प्रकाश 5: 9, त्यसैले ख्रीष्ट र बलिदानको पाठो एक नयाँ गीत 24 एल्डरहरूले गाउन:
पद9अनि तिनीहरूले एउटा नयाँ गीत गाए: "तपाईंले पुस्तक लिन र तपाईं slain थिए लागि, आफ्नो छाप खोल्ने योग्यको हुनुहुन्छ, र आफ्नो रगतले तपाईं परमेश्वरको लागि खरिद मान्छे हरेक कुलको देखि र भाषा र मान्छे र राष्ट्र। V.10 तपाईंले गर्नुभएको तिनीहरूलाई हाम्रो परमेश्वरको एक राज्य, र पूजाहारीहरूले हुन, र तिनीहरूले पृथ्वीमा शासन गर्नेछ। "
एस धेरै पटक अघि, त्यहाँ त्रुटिहरू अनुवाद मा मूल ग्रीक बाइबल पदहरूबाट छ। अन्य कुराहरु, ग्रीक पाठ को बहुमत आधारमा KJV यो सट्टा जस्तै अनुवाद:
पद9अनि तिनीहरूले एउटा नयाँ गीत गाए: "तपाईंले पुस्तक लिन र तपाईं slain थिए लागि, आफ्नो छाप खोल्ने योग्यको हुनुहुन्छ, र आफ्नो रगतले तपाईं हरेक कुलको र भाषा र मान्छे र राष्ट्र परमेश्वरको लागि हाम्रो लागि खरिद। V10 हाम्रो परमेश्वरको राजा र पुजारीहरू हामीलाई बनाउनुभयो, र पृथ्वीमा हामी शासन गर्नेछ। "
डी ई 24 एल्डरहरूले विश्वासीहरूसित आफूलाई पहिचान, र यसैले पृथ्वीमा येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेर सुरक्षित गरिएको छ जो सबै उद्धार मान्छे छ। तिनीहरूले पहिले छाप सुरु गर्दा पहिले नै सुरु संकष्टकालको देखि आकाश छन्।
र्याप्चर रहस्य थियो
1 कोरिन्थी 15:51 - हेर, म एक रहस्य बताउन: हामी सबै निद्रामा छैन, तर हामी सबै, परिवर्तन गर्नेछ हुन, एक क्षण मा एक आँखा को झिम्काइ मा, पछिल्लो बिगुल मा।
पी चर्च पावलले प्रकट भएको थियो कि एक गोप्य थियो कि recis, त्यसैले पनि र्याप्चर, हामीलाई प्रकट भएको एक गोप्य छ। लागि गोप्य ग्रीक शब्द जहाँ huvudbetydningen छ "Mysterion" छ "पूर्णतया नयाँ छ र अघि भएको छैन भन्ने कुरा।"
हामी OT मा र्याप्चर कुनै häntydningar पाउन, र यो येशूले र्याप्चर सिकाउन थिएन भन्ने हो, तर इस्राएलका आउन मात्र आफ्नो देखिने। पावलले परमेश्वरको उहाँलाई सुम्पनुभएको छ कि प्रकाश थप conveys अर्को र्याप्चर रहस्य थियो। र्याप्चर दोस्रो 1 मा वर्णन कोरिन्थी 15 र 2Thes
वर्ष को 70th हप्ता
पी दानियलको rofetian गर्न ख्रीष्टको दोस्रो इस्राएलका मसीहको रूपमा आउँदै बेबिलोनी दासत्वबाट पूर्ण विस्तार जो इस्राएलका ऐतिहासिक र भविष्यसूचक समय, एक betydningsfull स्केच छ जो 70 सप्ताह समेट्छ।
दान 9:24 - सत्तरी हप्ता को उल्लंघन अन्त्य गर्न पाप मुहर, अपराध लागि atone, अनन्त धार्मिकता निस्कने ल्याउन, दर्शनले र भविष्यवाणी पूरा, र सबै भन्दा पवित्र अभिषेक तपाईंको जनहरूमाथि र तपाईंको पवित्र शहर मा निर्धारित छन्।
वर्ष को 70th र अन्तिम हप्ता इजरायल संग छ र यहूदी मानिसहरूले मण्डलीलाई के र गर्न। दान 9:24 मा हामी वर्ष को सबै 70 सप्ताह गर्न यहूदी मानिसहरू र यरूशलेममा संग छ कि देख्न सक्छौं। बस जस्तै पहिलो 69 हप्ता गर्न मण्डलीसित केहि छैन त्यसैले गर्न मण्डलीसित वर्ष को अन्तिम हप्ता भएको छ।
इजरायल र विश्व
डी वर्ष को अन्तिम हप्ता अध्याय माथि 6-19 मा वर्णन पनि कष्ट छ, र इस्राएल र यो पाहुना परमेश्वरको कार्य हो। चर्च पद 26 मा वर्णन गरिएको छ जो वर्ष को 69th र 70th हप्ता, बीच मा स्थित छ जो कोष्ठ छ - तर अन्त एक जलप्रलयको रूपमा आउँछ। अन्त गर्न त्यहाँ युद्धको हुनेछ। को devastation निर्धारण गरिन्छ।
उहाँले तिनीहरूलाई यूनियन प्रावधान पूरा गरेको छ परमेश्वरको मण्डली र इजरायल आफ्नो कार्यक्रम समाप्त गर्न सक्दैन।
चर्च उमेर समाप्त
एक lltså परमेश्वर, हामी चर्च उमेर, पेन्तिकोसमा थाले, र 2,000 वर्षसम्म जारी छ जो कल के पूरा, वर्ष को अन्तिम हप्ता जान अघि। परमेश्वरको साथै चर्च उमेर समाप्त जब परमेश्वरले तिनीहरूको "इस्राएलका संग कार्यक्रम।" जारी राख्न सक्नुहुन्छ
इजरायल संग आफ्नो करार मात्र दानियलको भविष्यवाणी अन्तिम सात वर्ष पूरा गर्न सकिन्छ। जब इस्राएल परमेश्वरको प्रतिज्ञा तपाईंको र्शतहीन, यो तिनीहरूलाई पूरा गर्ने मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। रोमी अध्याय 11 मा पावलले परमेश्वरको चर्च यसको कार्यक्रम समाप्त उहाँले इस्राएलका आफ्ना योजना जारी गर्नु अघि पर्छ भनेर बताउँछन्।
प्रेरित 15:14 -16 - परमेश्वरले पहिलो उहाँले राष्ट्रहरूले (NT-सभा) बीच आफ्नो नामको लागि मानिसहरू जित्यो निश्चित गरे कसरी शिमोन वर्णन गरेको छ। : यो भन्छन् जो अगमवक्ताहरूको शब्दहरू, अनुरूप छ कि गरिसकेपछि सुन्दर म फर्केर दाऊदको Fallen पाल पुनर्निर्माण हुनेछ।
वी याकूबको मा क्रमिक मध्यस्थता देखेर। पहिलो चर्च उमेर आए, र त्यसपछि, उहाँले दाऊदको Fallen पाल पुनर्निर्माण छौँ।
कष्ट मिलेनियम अघि इस्राएलका लागि एक तयारी छ। इजरायल एटिक्राईष्ट र ख्रीष्टको बीच चयन गर्न सक्षम हुनेछ। संकष्टकालको न्यायाधीश समयमा परमेश्वरले इस्राएलका गर्दा मसीही राज्यमा यहूदी मान्छे आमन्त्रित। परमेश्वरको क्रोध आफूलाई र पश्चात्ताप गर्न इजरायल र राष्ट्रका ल्याउनेछ।
आज प्रभुको दिन र येशू ख्रीष्टको
यहाँ हामी NT चर्च हेर्न, र विशेष गरी सभा गरेको र्याप्चर को समयमा हामी मा आज प्रभु र येशू ख्रीष्टको दिन फरक थाहा ठूलो betydning छ। पहिलो धारणा मा, यो जस्तै यो दिन कुरा गर्नुपर्छ लाग्न सक्छ, तर वास्तवमा यी "दुई" दिन पूर्ण बिभिन्न चरित्र हो र अन्त समय को लागि पूर्ण बिभिन्न सामग्री छ।
Zeph 1: 14-16 - यहोवाको ठूलो दिन नजिकै, नजिकै छ, र यो चाँड़ैनै हुनेछ। यो परमप्रभुको दिन छ, सुन्न! त्यसपछि फिक्री को नायक कराउछ। क्रोधको एक दिन त्यो दिन, वेदनामा र दुःखको एक दिन, devastation र उजाड एक दिन छ, बादल र तुवाँलो, एक दिन को एक दिन जब सुदृढ murtornen विरुद्ध सीङ को ध्वनि र shouting विरोध ...
2 थिस्सलोनिकी 2:2- यो हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्ट र गर्न आउँदा हाम्रो उहाँलाई जम्मा भइरहेको, हामी तपाईंलाई, अचानक आफ्नो स्थिति गुमाउन छैन सोध्न, भाइ र न कुनै आत्मा वा शब्द वा पत्र द्वारा डराउने हुन्छन्, हामीलाई बाट हुन र प्रभुको दिन आएको छ कि आधारित छ गर्न purporting।
एन प्रभुको दिन हो त्यसैले यदि यो छ, क्रोध र domstid र्याप्चर (संकष्टकालको सुरु) र सहस्राब्दी देखि लिएर एक समय अवधि मा पृथ्वीमा बाहिर जाने भनेर। यो NT चर्च को सत्य, के गर्न अर्थात् वास्तविक गोप्य, र महिमा को र्याप्चर संग छ रूपमा आज येशू ख्रीष्ट पुरानो नियममा उल्लेख छैन।
आज येशू ख्रीष्टले मात्र एक NT प्रकाश छ। प्रभुको दिन बस एक OT प्रकाश छैन, तर dommens राष्ट्रका समय NT मा विस्तृत र विशेष गरी प्रकाश अध्याय 6-19 मा वर्णन गरिएको छ। "प्रभुको दिन" पृथ्वी र आज येशू ख्रीष्टले NT सभा र्याप्चर र स्वर्गमा पिताको अघि तयारी सम्बन्धमा गर्दा पृथ्वीमा मानिसहरूलाई विषयमा।
फिलिप्पी 1:6- म तपाईंलाई राम्रो काम गर्न थाले जसले पनि येशू ख्रीष्टको दिन सम्म यो पूरा गर्नुपर्छ भनेर निश्चित छु।
बी यस पदको etydningen पेन्तिकोसमा पवित्र आत्मा, पूर्ण लिन र यस मान्छे पूर्ण येशू ख्रीष्टको अर्को आज बल गर्नेछ, येशूको कि अर्को घर स्वर्गीय गर्न आफ्नो मण्डलीको ल्याउन स्वर्गीय मान्छे चयन गरेर आफ्नो काम गर्न थाले छ dwellings - जो यसरी प्रभुको दिन अघि ठाउँ लिन्छ।
2 थिस्सलोनिकी 2: 1-12 - थिस्सलोनिकीका चर्च डराउने यो क्रोध र कष्ट implies कि प्रभुको दिन, सबै संग पहिले नै थालेका थिए सिकाउने गरिएको थियो झूटा शिक्षकहरू द्वारा भएका थिए। यसलाई कसैले नक्कली पत्र अख्तियारको पत्र दिन पावलले आफूलाई पठाएको र दिनुभयो थियो जस्तै पनि देखिन्छ। पावलले यस झूटा शिक्षा विरुद्ध कडा चेतावनी, र यो "प्रभुको दिन" को बारेमा सत्य सिकाउन सुरु हुन्छ।
पहिलो, पावलले 1 थिस्सलोनिकी 1:10 मा येशूले तिनीहरूलाई क्रोधबाट आउन किन यति धेरै ठूलो आफ्नो आतंक थियो तिनीहरूले अचानक तिनीहरूले बीचमा थिए लाग्यो जब सुरक्षित भनेर मण्डलीमा प्रतिज्ञा गर्नुभयो। पावलले तिनीहरूलाई यस्तो आश्वासन दिन्छ र प्रभुको दिन, पापको मानिस अघि सुरु गर्न एटिक्राईष्ट पहिलो देखा गरेको गर्न सक्ने मण्डलीको conveys, र यो "रोकिराखेको" पहिलो बाटो बाहिर खाली गरिएको छ पहिला गर्न सकिँदैन भन्ने underlines। (पहिलो हटाउने), डेनिस अनुवाद)
कसले वा कुन रोकिराखेको छ?
वी ERS 4-8 एटिक्राईष्ट, र उहाँलाई फिर्ता धारण जसले अगाडी आउनु सकून् एक खुलासा। आज हामी 2013 लेख्न, र हामी यो / जो फिर्ता धारण उहाँले एटिक्राईष्ट अझै अगाडि आउनु भएको छ जब अझै पनि यहाँ छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं। के फेरि राख्छ दुवै "यो" र "उहाँले" को रूपमा वर्णन गरिएको हुन्छ। पवित्र आत्मा शब्द आत्मा शब्द ग्रीक मा "pneuma" छ। त्यहाँ intetkön मा एक शब्द छ।
एकै समयमा पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने तथ्यलाई उहाँले पनि "उहाँले" को रूपमा वर्णन गरिएको छ। त्यहाँ रोकिराखेको के एटिक्राईष्ट मा धेरै guesses भएको, तर दुवै पुरुष पवित्र आत्मा भन्दा कुनै अन्य हुन सक्छ गर्दा तटस्थ छन् कि छ। पवित्र आत्मा राम्ररी चर्च जोडिएको छ, र GT मा प्रेरित 2nd मा पेन्तिकोसको दिन पृथ्वी पनि पवित्र आत्मा देखिन्थ्यो देखि गरिएको छ, तर यसको सट्टा माथि बाट। बस उहाँले कष्ट मा के हुनेछ रूपमा।
डी पवित्र आत्मा मानिसहरूलाई तर माथिबाट uppryckelsens क्षण देखि सञ्चालन जारी हुनेछ संकष्टकालको मा आउँछ। त्यसैले हामी पुस्तक प्रकाश अध्याय3प्रतिनिधित्व पवित्र आत्मा देख्नुहुन्न। सात चर्च गर्न पत्र मा, हामी यी शब्दहरू सुन्न: कान छ जसले, उहाँलाई सुन्न गरौं आत्माले के भन्छ मण्डलीलाई।3अध्याय, विधानसभा गरेको र्याप्चर छ अब बोल्छ जसले पवित्र आत्मा छ पछि। प्रकाश 13:9- जसले कान छ, उहाँलाई सुन्न गरौं । न त भन्ने कष्ट मानिसहरूलाई विभिन्न मुक्तिको र न्यायको सन्देश आउँछ पवित्र आत्मा छ, यो स्वर्गदूतहरूले हुनेछ। ( प्रका 14: 6-7 )।
सम्मेलन पवित्र आत्मा समातिए हुँदा थप देखि काम गर्न सभा आज परमेश्वरको थाह छ कि मात्र मन्दिर छ त कुनै ठाउँ छ। (1 3:16)। संकष्टकालको मा प्रतिनिधित्व छ कि मात्र चर्च skökoförsamlingen छ, र पवित्र आत्मा देखि काम गर्छ सक्छ।
फोहोर वा प्रस्थान?
22थिस्सलोनिकी:3- ..Ty पहिलो, आउन पर्छ फोहोर र अराजकता को मानिस, perdition छोरा, खुल्लमखुल्ला अगाडि आउन
डी ग्रीक मा एट शब्द फोहोर, शब्द "apostasia" अनुवाद गरिएको छ। को संज्ञा "apostasia" जसको huvudbetydning "सार्दा" छ वा क्रिया "afistemi" आउँछ "अर्को एक ठाउँ बाट केहि सार्न।" शब्द विशेष एक ठाउँमा अर्को कुनै पनि सार्ने जडानमा प्रयोग गरिन्छ, वा यसलाई दूर जान्छ वा कसैले फरक छ भने।
शब्द पनि 1 मा वर्णन टिम4धार्मिक प्रलोभन वा फोहोर जडानमा प्रयोग गर्न सकिन्छ: 1। पहिलो प्रोटेस्टेन्ट बाइबल अनुवादकहरू केही जो टाढा जाने वा गायब गर्न मतलब अंग्रेजी शब्द "प्रस्थान", अनुवाद छनौट गरे।
अनुवाद गर्ने शब्दहरू गायब अधिक चिरपरिचित बाइबल अनुवादक केही / टाढा जाने समावेश केनेथ Wuest, Genovabibelen, जन डसन, Coverdale, Crammer आदि तपाईं शब्द "प्रस्थान" प्रयोग अनुवादक बर्बाद सट्टा स्पष्ट भएको र्याप्चर र कष्ट को सम्बन्ध मा धेरै ठूलो स्पष्टता प्रदान हुनेछ चाहन्छु। यो पनि दुवै 1 थिस्सलोनिकी2थिस्सलोनिकी देखि teksten को समझ को सम्बन्ध मा धेरै अधिक अर्थमा दिन चाहन्थे।
विधानसभा संकष्टकालको प्रवेश गर्नेछैनन् वा परमेश्वरको क्रोध ग्रस्त
माथि 6: 16-17 - अनि भन्नुभयो हिमालहरूमा र चट्टानहरू, गर्न "हामीलाई गिर र सिंहासनमा र थुमा क्रोध गर्न बस्छन भनेर आफ्नो अनुहार हामीलाई लुकाउनुहोस्। बडा दिन आफ्नो क्रोध लागि आएको छ, र जो खडा गर्न सक्नुहुन्छ?
Rev 15: 1 - अनि म स्वर्गमा अर्को ठूलो र अद्भुत साइन देखे: सात महामारीहरु अन्तिम सात स्वर्गदूतहरू; तिनीहरूलाई परमेश्वरको क्रोध यसको पूरा पुग्छ लागि।
वी प्रयास निम्ति परमेश्वरको क्रोध जस्तै हो जो प्रभुको दिन, जस्तै हो। सम्पूर्ण संकष्टमा परमेश्वरको क्रोध छ, र den.Vi को बस छैन अन्तिम भाग पहिले नै मा6छाप त थुमा क्रोध आएको छ कि देख्न सक्छौं। अध्याय 15 मा, हामी परमेश्वरको क्रोध गरिने हेर्न पूरा सात पछिल्लो विपत्तिहरूका संग। यो परमेश्वरको क्रोध सात विपत्तिहरूका आफ्नो सुरु छैनन्, कि तर पहिले सुरु हुनेछ हो।
सात पछिल्लो विपत्तिहरूका संग कष्ट र परमेश्वरको क्रोध समाप्त हुन्छ। थिस्सलोनिकी 1 मा: 9-10 हामी येशूको लागि, स्वर्ग (को र्याप्चर) बाट आउने क्रोधबाट हामीलाई बुझाइएको छ कि एउटै प्रतीक्षा प्रतिज्ञा गरिएको छ।
1 थिस्सलोनिकी 1: 9-10 - र आउन क्रोध हामीलाई बुझाइएको छ जो परमेश्वरले मृत्युबाट ब्यूँताइनुभएको जसलाई आफ्नो पुत्रलाई स्वर्गबाट, येशूले लागि प्रतीक्षा गर्नुहोस्।
1 थिस्सलोनिकी 5: 1-9 - V.2 तपाईं जान्दछन् धेरै राम्रो कि प्रभु (क्रोध / कष्ट) को दिन रात चोर रूपमा आउनेछ। V.9 - परमेश्वरले हामीलाई क्रोध पीडित तर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमार्फत उद्धारको प्राप्त गर्न नियुक्त गरेन लागि।
डी हामी बस पढेको एक खण्ड धेरै रोचक छ। 1 थिस्सलोनिकी अध्याय 4:13 onwards सभा र्याप्चर र ठाउँ येशूसित मुठभेड बारेमा छ। 1-3: पावलले फिर्ता अध्याय5मा वर्णन गरिने कष्ट को सम्बन्ध मा र्याप्चर राख्छ।
उहाँले हामी ज्योति हौं किनभने प्रभुको दिन चोर जस्तै हामीलाई चकित सक्दैन, त्यो दिन वर्णन गर्न मा जान्छ। उहाँले येशूमार्फत उहाँले सिकाउनुभएको छ संकष्टकालको छ भनी पुष्टि गरेर सबै समाप्त हुन्छ, र हामी क्रोध खोल छैन भन्ने सुनिश्चित, तर मुक्ति।
फा दुई अन्त-समय चर्च को एक प्रतिनिधित्व गर्ने वार्ड फिलाडेल्फिया, सारा संसार मा आउन पर्छ जो परीक्षाको घडी देखि राखिनेछ प्रतिज्ञा गरेका थिए। यो प्रतिज्ञा चर्च वर्ष को अन्तिम हप्ता आयोजित raptured गरिने बलियो प्रतिज्ञाहरूको छ।
प्रकाश 3:10 - तपाईं धीरज बारेमा मेरो वचन पालन गरेका छन् किनभने, म राख्न र सारा संसार मा आउन र परीक्षण गर्न आफ्नो मान्छे ल्याउन पर्छ जो परीक्षाको घडी, तपाईंले सुरक्षित हुनेछ ।
लागि ग्रीक शब्द संरक्षण (स्टेरियो गर्न) ग्रीक शब्द। यो क्रिया यो पद मा दुई पटक प्रयोग गरिएको छ। पहिलो पटक यो अनुवाद गरिनेछ संरक्षण , तर दोस्रो पटक देखि तपाईं सुरक्षित गर्न स्वीडिश अनुवाद। को KJV मा एक पूर्ण बिभिन्न betydning दिने संरक्षण द्वारा अनुवादित दुवै शब्दहरू छ:
10 किनभने तपाईंले मेरो धैर्य को शब्द राखिएको, म पनि तिमीलाई सबै दुनिया मा आउनेछन् कुन परीक्षाको घडी देखि, तिनीहरूलाई प्रयास गर्न त्यो पृथ्वीमा बास राख्नेछ। (राजा जेम्स संस्करण)
Thayer ", एउटा कुरा दह्रो" "एक" ग्रीक शब्द प्रयोग यो शब्द, यो अर्थ कहिले कि तर्क छ तर यो "ओक" प्रयोग गर्दा यो सिर्फ जस्तै राजा जेम्स अनुवाद "बाट संरक्षित" छ हो। त्यसै गरी, प्रयोग "ओक" यसलाई 1 थिस्सलोनिकी 1:10 मा अनुवाद भएको हुँदा छ - .. हामीलाई बुझाइएको छ जो देखि आउन क्रोध। जन उहाँले यस्तो लेखे "एक चिया वेश्या" ", परीक्षाको घडी" थियो भनेर देखाउन चाहन्थे। "भर्खर मतलब जो" ek tes horas "लेख्न जन लागि रोज्न भन्दा पनि देखि परीक्षण को घण्टा"
कसको लागि संकष्टकालको छ?
प्रकाश 3:10 - परीक्षाको घण्टा, सारा संसार मा आउन र परीक्षण गर्न आफ्नो मान्छे ल्याउन पर्छ जो ।
एक परीक्षण को TT घण्टा परमेश्वरको क्रोध र के को अभिव्यक्ति मान आउनेछ छ, सबै भन्दा सहमत हुनुहुन्छ। तर किन यसले? यो प्रयास र मण्डलीको सफा छ? होइन, यसलाई त्यहाँका बासिन्दाहरूले परीक्षण गर्न, विश्व भर, राख्न हो। यो र्याप्चर पछि पृथ्वीमा बाँकी छन् जो मानिसहरू उद्देश्य छ, र कसले एटिक्राईष्ट सामेल भएका छन्।
यहाँ प्रयोग गरिन्छ जो शब्द "त्यहाँका बासिन्दाहरूले" (katoikeo), बलियो शब्द हो। शब्द चिरस्थायी र स्थिर कुरा बारे छ। यो आफ्नो साँचो घर पृथ्वी गरेका छन् गर्नेहरूका लागि भनेर न्याय अर्थ, र अर्थ वाणिज्य र धर्म संग चिनाउँछ। तिनीहरूले सम्मेलन गर्न संभवतः उल्लेख गर्न सक्छन् जो, आफ्नो स्थायी घर पृथ्वी गरेका छन्।
साँचो चर्च यस पृथ्वीमा अपरिचित र sojourners बनेको छ। (1 पत्रु 2:11), र सबै भन्दा उच्च (स्तम्भ 3: 1-2) खोजिरहेका आकाश (Efe 2:19) आफ्नो राष्ट्रियता भइरहेको र आकाश मा आफ्नो घर भएको (यूहन्ना 14: 2) ।
हामी को लागि कसले पर्खिरहेका छन्?
जस्तालाई 2:13 - जबकि हामी हाम्रो ठूलो परमेश्वर र Fräsare येशू ख्रीष्टको अनमोल आशा महिमा देखा पर्छ प्रतीक्षा गर्नुहोस्।
डी टी पक्कै भन्ने हाम्रो आशाले छ र हाम्रो आनन्द येशूको आउँदै छ। एटिक्राईष्ट, परमेश्वरको कष्ट र क्रोध लागि हामी प्रतीक्षा गर्नु हुँदैन। प्रभु मनमा थियो भने आफ्नो मान्छे कष्ट र एटिक्राईष्ट घर मार्फत जाँदै थिए, त्यो पनि चेतावनी दिए र यसलाई आफ्नो मण्डलीको तयार गरेका थिए। रैप्चरको हुन सक्छ अघि किनभने मामला मा, एटिक्राईष्ट अगाडि आउन।
डी एट न त कष्ट प्रचार गरिने अनुग्रहको सुसमाचार, बरु राज्यको सुसमाचार छ। यो सुसमाचार 1,44,000 चुन्नु यहूदीहरूले प्रचार छ मसीही राज्यको मसीह बहाली घोषणा हुनेछ। अनुग्रहको सुसमाचार हामी थाहा रूपमा भन्ने चर्च उमेर मा सम्पन्न गरिनेछ समाप्त भयो।
को शहीदको पनि परमेश्वरको आफूलाई आफ्नो शत्रुहरू मा बदला गर्न अनुरोध। यो पनि छैन सभा सत्रमा विश्वासीले गरेको बयान छ। हामी हाम्रो शत्रु को बदला लिन परमेश्वरले सोध्न छैन, हामी सबै मान्छे सुरक्षित गर्न परमेश्वरले सोध्नुहोस्। (रोमी 12:19) दुई साक्षी पनि आफूलाई बदला र आफ्नो शत्रुलाई सजाय शक्ति प्राप्त।
फा örsamlingens र्याप्चर पावलले पायो गर्न सभा गर्न मा पारित अर्को एक गोप्य थियो। तसर्थ, हामी येशूले र्याप्चर बारेमा सिकाउन सुनिन। येशूले अन्तिम दिन मा पुनरुत्थानको प्रचार, र आफ्नो देखिने इस्राएलका आउँछन्।
दान9स्पष्ट वर्ष को 70 हप्ता इस्राएलका लागि छ र यरूशलेम मण्डलीको लागि छैन भनेर देखाउँछ।
इजरायल र चर्च लागि भ्रममा परमेश्वरको कार्यक्रम द्वारा गलत हुनेछ। धेरै पदहरू मार्फत, प्रभु चर्च मापनयोग्य क्रोध छैन, तर यो देखि सुरक्षित गर्न भनेर हामीलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। क्रोध वा प्रभुको दिन सारा सात वर्षको अवधिमा छ। यसैले सभा वर्ष को अन्तिम हप्ता सुरु गर्नु अघि raptured पर्छ। बस Filadelfia मण्डलीको जस्तै परीक्षण को घण्टा देखि राखिएको थियो।
प्रकाश को किताबको अध्याय3पछि, हामी अध्याय 6-19 सात वर्ष को कष्ट पनि छ जो मण्डलीका अब पाउन। हामी हेर्न न त पवित्र आत्मा, चर्च गर्न नजिकबाट जोडिएको छ जो। सुरक्षित बास गर्ने पवित्र आत्मा पृथ्वीबाट गएको छ, यो एटिक्राईष्ट र आफ्नो घर लागि निःशुल्क छ। फिर्ता गरिएको छ कि मात्र चर्च वेश्याले छ।
हामी सभा संकष्टकालको मार्फत, तर त्यसको विपरीत, यो देखि राख्नुपर्छ भन्ने कुनै प्रमाण फेला पार्न। हामी येशू ख्रीष्ट आज हाम्रो हृदयमा बस्न हुन पर्खिरहेका खोल। कष्ट वा याकूबको समस्या पृथ्वीमा बस्ने लागि हो। तिनीहरूले मसीह वा येशू पहिचान गर्न चाहनुहुन्छ भने इजरायल र यहूदीहरू एक विशेष तरिकामा प्रयास गरिनेछ। आफ्नो समय मा एटिक्राईष्ट पनि Township छ जो परमेश्वरको बासस्थान। यस इलाकाका पनि 24 प्राचीनहरूले संकष्टकालको सुरु मा आकाश मा प्रतिनिधित्व छ। जब प्रभु सँगै स्वर्गदूतहरू संग, प्रकाश 20 विधानसभा रूपमा पृथ्वीमा फर्काउँछ।
डी एट यो त्यसै गरी जो विश्वासीहरूको र्याप्चर संकष्टकालको पहिले हुन्छ भन्ने हो पूर्व-tribläran लागि एक रक्षा छ जो पहिलो पोस्ट "संकष्टकालको अघि येशूको फिर्ती," को एक निरंतरता छ। हामी र्याप्चर, संकष्टकालको र हामी बस्ने समय मा भूमिका मोडेल हो भन्ने OT मा समाधान। म देखाउन केही entitles GT देखि समाधान हेर्न र कष्ट अघि र्याप्चर पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ चाहनुहुन्छ ठूलो entitles धेरै पाउन।
एन हामी संसारको (gr.thlipsis) मा सामना सामान्य दुःख बीच विशिष्ठ द्वारा सुरु हुनु पर्छ दुःख र हामी येशूको मत्ती 24 मा बताइएको छ कि ठूलो कष्ट (gr.Thlipsis Megas) मा सामना दुःख र दानियल कुरा छ यो संसारमा अध्याय 12 मा साँचो विश्वासीहरूलाई र अधिकारीहरू, आफ्नै शरीर विरुद्ध आध्यात्मिक युद्धमा अनुभव र सुसमाचार लागि पीडित हुनेछ। दुःख को त्यो प्रकारको येशूले हामी मुक्त हुनेछ भनेर हामीलाई प्रतिज्ञा कहिल्यै। हामी कष्ट मा सामना गर्ने रिस केही फरक र शब्द हामी अनुभव कि पर्दैन वा मार्फत जाने हामीलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ भन्ने कुरा हो।
हाल थप समयमा परमेश्वरको क्रोध फरक betydningar मान्छे छ सुरु भएको छ। यो थुमा, मानिसको क्रोध, सैतानको रिस र परमेश्वरको क्रोध र यो confuses को क्रोध उल्लेख गरिएको छ। त्यहाँ मा दुवै कहिले र कसरी परमेश्वरको क्रोध हुन्छ मतभेद पनि छ।
मा प्रकाश, हामी कष्ट पहिलो छ छाप थुमा द्वारा भङ्ग को अध्याय6मा सुरु र अध्याय 16-18 मा क्रोधको परमेश्वरको सात vials समाप्त हुन्छ कि देख्न सक्छौं। पहिले नै पहिलो छ छाप समयमा हामी धरती मा जीवन मा एक विनाशकारी प्रभाव हेर्नुहोस्। पहिलो छ छाप संसारको जनसंख्याको एक चौथाई लागि युद्ध, अनिकाल, महामारीहरु र मृत्यु को कारण ल्याउन। अर्को शब्दमा, को बारे 1.7 अर्ब मान्छे पहिलो छ छाप समयमा मर्नेछन्। यो सँगसँगै त्यहाँ कष्ट समयमा विश्वासीहरूलाई बन्ने मान्छे शहीदको हुनेछ।
स्वर्गदूतहरू सात को तुरही मा उड्ने बेला त यो पृथ्वी को स्वचालित नयाँ आपराधिक अभियुक्तहरुलाई दोषी ट्रिगर। यी न्यायाधीशहरूले अलौकिक विपत्तिहरूका संग शक्तिशाली प्राकृतिक प्रकोप जोडती। सात को तुरही आफ्नो दुखाइ साथ तयार हुँदा त नाश पानी को तेस्रो छ, समुद्र सबै जीवन को तेस्रो मृत्यु, र पृथ्वी को तेस्रो अप जलाए हुनेछ, र जसले पहिलो छ बाँचे मान्छे को तेस्रो को छाप मर्नेछन्। अर्को शब्दमा, संसारको जनसंख्याको एक अतिरिक्त लगभग 1.7 अरब मानिसहरू।
रिस कटोरे परमेश्वरको न्याय अन्त पूरा
वी मा भाँडा को रिस जीवन ल्याउन अनुमति कसरी धेरै मानिसहरू कुनै बोली छ, तर हामी अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ। येशू आफैले अवधि छोटो छ, जबसम्म कुनै मानव सुरक्षित (मत्ती 24:22) गर्न भनेर भन्छन्। यी क्रोध सबै decription बाहिर छ, र यो नतिजा वा तिनीहरूलाई को betydningen बुझ्न गाह्रो छ।
क्रोध यी vials परमेश्वरको न्याय अन्त को पूरा हुन्छ। Rev 16: 16-21 त्यहाँ कहिल्यै यो जस्तै केहि कहिल्यै अघि भएको छ कि यस्तो ठूलो भूकम्प बताइएको छ। यो को नतिजा त सबै द्वीप भागिरहेका गर्नेछ, र हिमालहरू हुनेछैन। म कुनै एक समय मा पृथ्वीमा हुन चाहन्छ भनेर भन्न मलाई विश्वास गर्छन्।
कष्ट आउन क्रोध अन्तर्गत छ
एम N अर्को शब्दमा, यो परमेश्वरको क्रोध प्रकट र सबै पृथ्वीमा विदेश बगाएको छ जब कष्ट अवधि छ। क्रोध प्रभुको दिन छैन यो त छ जस्तै सजिलो दिन छैन। परमेश्वरको क्रोध, रिस, प्रभुको दिन, क्रोध र यति मा। पहिलो छाप भङ्ग छ सुरु र इजरायल र विश्व, जहाँ परमेश्वरको क्रोध पनि प्रकट हुनेछ आउन येशूले देखिने मा culminates एक अवधि छ।
पावलले यो स्पष्ट सम्मेलन कष्ट छ कि समाप्त sentencing यस समयमा पृथ्वीमा हुने छैन भनेर गरे। 1 मा थिस्सलोनिकी 1:10 पावलले प्रभु आउन क्रोध हामीलाई सुरक्षित हुनेछ भनेर बताइएको छ। शब्द देखि आधारभूत पाठ हामी जब यो हुन्छ अर्को शब्दमा, वर्तमान हुनेछ भनेर छैन खातामा, समय र स्थान दुवै लिएर हो। परमेश्वरले हामीलाई क्रोध पीडित तर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमार्फत उद्धारको प्राप्त गर्न नियुक्त गर्न को लागि थिएन।
परमेश्वरको क्रोध सम्पूर्ण कष्ट रहन्छ
एन यसलाई परमेश्वरको क्रोध बारेमा छ यो ठूलो कष्ट जस्तै छैन त अक्सर मानिसहरू कुरा, र तिनीहरूले बिल्कुल सही हो। महासङ्कष्टको परमेश्वरको उजाड को abomination र क्रोध सुरू 3.5 वर्ष छ वा क्रोध सात वर्ष को कष्ट भर रहन्छ।
माथि 6: 16-17 - "हामीलाई गिर र सिंहासनमा र थुमा क्रोध गर्न बस्छन भनेर आफ्नो अनुहार हामीलाई लुकाउनुहोस्। बडा दिन आफ्नो क्रोध लागि आएको छ, र जो खडा गर्न सक्नुहुन्छ?
Rev 15: 1 - अनि म स्वर्गमा अर्को ठूलो र अद्भुत साइन देखे: सात महामारीहरु अन्तिम; तिनीहरूलाई परमेश्वरको क्रोध यसको पूरा पुग्छ लागि।
यहाँ हामी छैटौं छाप त छ पनि मा जो परमेश्वरको क्रोध, थुमा र पिता एउटै व्यक्ति हुँदा जस्तै हो, थुमा क्रोध आउने हेर्नुहोस्। परमेश्वरको क्रोध छ जो परमेश्वरको क्रोध छ - अक्सर, जस्तै सात पछिल्लो विपत्तिहरूका कि औंल्याए छ। तर अध्याय 15 मा: 1 हामी परमेश्वरको क्रोध यसको पुग्छ कि हेर्न सक्नुहुन्छ Consummation कि यसको शुरुवात छैन, यी अन्तिम विपत्तिहरूका संग। त्यसैले यो अन्तिम सात विपत्तिहरूका संग समाप्त परमेश्वरको क्रोध अवधिको बस परिष्करण छ।
समय र स्थान बाट सुरक्षित
एक Braham प्रभु संग दुष्ट (1 प्रस्थान 18:23) संग धार्मिक नष्ट गर्न आफ्नो प्रकृति विपरीत हुनेछ सदोम र गमोराको आफ्ना तर्क को सम्झना।
पत्रुस प्रभु अंग्रेजी अनुवाद "परीक्षाको बाहिर ईश्वरीय बचाउँछ" भनेर, लट अस्थायी उदाहरणका, तर परमेश्वरको पक्ष बाट एक सामान्य सिद्धान्त थियो भनेर देखाउन हामीलाई लट को उदाहरण दिएर हामीलाई सिकाउँछ: प्रभु ईश्वरीय तर देखि परीक्षा कसरी उद्धार गर्न थाह "। बाट (बाहिर) शब्द यो घटना समय र ठाउँ हो।
मण्डली गर्न चेतावनी
एफ Ragan हामी प्रभुको दुलही सान्त्वना वा चेतावनी बताइएको जो शब्दहरू आउन क्रोध सामना पाउन सक्नुहुन्छ कि छ? हामी उहाँले सुरक्षा र कष्ट यस भयानक समय हामीलाई संरक्षण गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ जो शब्दहरू पाउन सक्नुहुन्छ? हामी संभवतः कष्ट समयमा सभा अस्तित्व देख्न सक्थे?
होइन, हामी गर्न सक्छन्! उहाँले हामी प्राप्त आउन क्रोध प्रभावित हुँदैन भनेर हामीलाई प्रतिज्ञा गर्दा उहाँले इस्राएललाई hänvänder बस, किनभने मण्डलीमा गएको छ, र इस्राएलका यसको कार्यक्रम राख्न सक्नुहुन्छ वर्ष को अन्तिम हप्ताको समयमा जब।
नूहको दिन रूपमा
मत्ती 24:37 - नूहको दिन थिए लागि, त्यसैले पनि मानिसको पुत्र आउँदै पर्छ।
एच Erren हामीलाई नूह अध्ययन र समापन को खण्ड संग तुलना गर्न चाहन्छ। मत्ती 24:37 मा हामी बस्ने यो प्रभुको फिर्ती मा हुनेछ यो नूहको दिनमा जस्तै पढ्न नै तरिकामा। के हामी नूहको दिन सिक्न सक्छौं जलप्रलय, को जलप्रलयको र प्रभुको सुरक्षा हात नूह भन्दा र तिनको परिवार अघि समयको बारेमा छ।
येशूले कष्ट बाँच्न गर्ने मान्छे तुरुन्तै 1000 साल राज्य अघि न्याय गरिनेछ भनेर व्याख्या गर्न जारी छ। केही न्याय मा raptured र मसीही राज्यमा जान अनुमति हुनेछ। बाढी मा जस्तै तरिका मा, मान्छे न्याय मा raptured गरिनेछ। नूहको दिनको मान्छे किनभने बाढी को अन्तर्गत भयो, र नै बाटो मा, मान्छे कष्ट मा नष्ट हुनेछ, र येशूको न्याय पछि straks।
मान्छे को तीन प्रकार
डी एट बाढी आउनुअघि नूहको दिनमा बस्ने मान्छे को तीन अलग अलग प्रकार थिए। यसलाई प्रभुको वचन अस्वीकार गर्ने बेग्लै विश्वास थियो, र सबै बाढी मा perished। यो नूह र जलप्रलय मार्फत संरक्षित थिए जो आफ्नो परिवार थियो, र यो बाढी आए अघि प्रभुको निम्ति समात्नु थियो हनोक थियो। आफ्नै तरिकामा प्रत्येक ती मानिसहरू आज हामी हाम्रो समय तुलना गर्न सक्ने तीन अलग अलग विभाग प्रतिनिधित्व गर्छ। बस नै तरिकामा हामी दिन मानिसहरू हामी कष्ट तिर सार्दा र समय समाप्त हुँदा तीन प्रकारका हेर्नुहोस्:
· नूहको दिनको बाढी मा perished गर्ने मानिसहरू येशु मा छैन लिएका छन् जसले बेग्लै विश्वास, प्रतिनिधित्व गर्दछ। ती मानिसहरू कष्ट जानेछ, र परमेश्वरको क्रोध उजागर गर्न। संकष्टकालको पश्चाताप नगर्ने ती येशूले न्याय गरिनेछ अनि आगोको आगोको कुण्डमा फालिनेछ।
· नूह प्रभु 1000 वर्ष रैह आफ्नो भाकल पूरा हुनेछ इस्राएलका शेष प्रतिनिधित्व गर्दछ। नूह यसरी इस्राएलका, एक निश्चित तरिका मा कष्ट समयमा सुरक्षित गरिने को चुनिएको छ। संकष्टकालको मा 3.5 वर्ष यहूदीहरूले जहाँ प्रभु एटिक्राईष्ट र सताउन लागि तिनीहरूलाई सुरक्षा हुनेछ मरुभूमि मा भाग्न विश्वास हुनेछ। नूह बाढी मार्फत संरक्षित थियो र त्यहाँ पनि हुन यहूदी मान्छे को एक भाग हुनेछ।
· हनोक उहाँले समातिए र बाढी आउनुअघि परमेश्वरको लगियो हुन्छ जब जलप्रलय र परमेश्वरको न्यायको भाग थिए मण्डलीको चित्र छ।
हनोक / हनोक सम्मेलन को एक प्रकार छ
1 उत्पत्ति 5:24 - अनि हनोक यस प्रकारले परमेश्वरले उहाँलाई लगे, उहाँले थिएन, परमेश्वरको हिंडे।
एच Änok धेरै मोडेल विरोधी-मसीही कष्ट लागि समय बनाम सभा र्याप्चर बताउनुभयो छ। हनोक आदम देखि7चरण बस्थे र अर्थात् बाढी अघि अवधिमा एक विशेष समय बसे। वचन त्यतिबेला त पृथ्वीमा ठूलो मानिसहरूको हृदय र मनसाय मानिस र दुष्ट निरन्तर सम्पूर्ण दुष्ट थिए भनेर भन्छन्।
यो पापी मानव hubbub बीचमा, त्यहाँ परमेश्वरको विश्वास र उसलाई हिंडे मानिस, हनोक थियो। (1MOS 5:24) हनोक गवाहीलाई उहाँले परमेश्वरको अनुग्रह फेला छ। (हिब्रू 11: 5)
हनोक समात्नु थियो
हिब्रू 11:5- द्वारा विश्वास हनोक लगिएको थियो मृत्यु सामना बिना । र तिनीहरूले परमेश्वरको थिए किनभने, उसलाई भेटिएन फेला आफूलाई उसलाई लिएको ।
एच Änok परमेश्वरले आफूलाई उसलाई लिएका थिए लागि मृत्यु टेस्टिङ बिना पक्रेको थियो। आफ्नो र्याप्चर अघि समयमा आउँदै अग्निपरीक्षाहरू र पाप र godlessness को सजाय बारेमा, आफ्नो समय को मान्छे को, को रूप घोषणा Hanoch। पाप गरेको लक्ष्य पनि पुग्यो थियो नूहको दिनमा पाप मा परमेश्वरको न्याय आए र उहाँले जलप्रलयको पठाइएको, तर त्यसपछि हनोक पहिले नै प्रभु गर्न समात्नु थियो।
बाढी छ परमेश्वरको क्रोध को तस्वीर पृथ्वीमा पठाउने र अन्त समयमा दुष्ट मान्छे - आउन क्रोध (1 थिस्सलोनिकी 1:10)
अर्को ठाउँमा ओसारपसार
डी एट ग्रीक शब्द को लागि "आफूलाई उसलाई लिएको" metatithemi छ, र KVJ अर्थात् यस हस्तान्तरण, अर्को ठाउँमा ओसारपसार, "transportet" अनुवाद छ। हनोक, अर्को शब्दमा थियो ओसारपसार वा उहाँले मृत्यु स्वाद हुनेछ किनभने स्वर्गमा मा सारियो। 1 कोरिन्थी 15 सबैले सुत्न गर्नुपर्छ भनेर बताउँछ, तर सबै परिवर्तन गरिनेछ। यसलाई जहाँ सबैले मृत्यु सामना गर्नेछ Township को र्याप्चर, तर परमप्रभुले आफ्नो घर हामीलाई लाग्छ कि अनुभव वर्णन गर्ने पावलले छ।
बस जस्तै हनोक संकष्टकालको अघि विधानसभा र्याप्चर प्रतिनिधित्व गर्दछ, नूह र तिनको परिवार प्रतिनिधित्व, यो कष्ट मार्फत संरक्षित हुनेछ जो गर्न, र मसीही राज्य आशिष्हरू अनुभव गर्न इस्राएलका शेष, प्रतिज्ञा गर्नुभयो।
आदमबाट सातौं bloodline
डी यहाँ उल्लेख रोचक हुन सक्छ कि एट हनोक आदमबाट सातौं bloodline थियो भन्ने छ। विधानसभा सातौं विधानसभा प्रकाश अध्याय तेस्रो मा विशेष गर्न नै तरिका हो
हामी पनि र्याप्चर अघि विधानसभा को अन्तिम खण्डमा एक ऐतिहासिक र Township लागि भविष्यसूचक समय आधारित जो, लाओडिसिया समय, बाँचिरहेका छौं। हामी पनि कहाँ हनोक अप आदम पछि släktsled सातौं रूपमा समातियो सिर्जना गरेपछि sjutusende वर्ष, को सुरुमा बाँचिरहेका छौं।
आर नाम हनोक देखि अतिरिक्त हामीलाई मण्डलीलाई येशूको मिशन आदेश विचार बनाउँछ जो प्रशिक्षण र शिक्षा, अर्थ। - " यसकारण गएर सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाउन" (मत्ती 28:19 )
हिब्रू परम्परा अनुसार, हनोक पेन्तिकोसको, दिन जन्म भएको थियो छ रूपमा पनि जन्म भएको थियो मण्डलीको दिन छ। Hanoks जीवन र बाढी अघि आफ्नो र्याप्चर मण्डलीको र्याप्चर को स्पष्ट उदाहरण हो।
धेरै सुरक्षित थियो परमेश्वरको क्रोध उम्कन
1 प्रस्थान 19:22 - "म को कुरा शहर ढलाउनु छैन। तर म तपाईं सम्म केहि गर्न सक्दैन, त्यहाँ भाग्न हतार त्यहाँ "
जी UD सदोम र गमोराका कराउँदै सुने, र कि शहर मा शासन गर्ने गंभीर पाप देखे। अब्राहाम एकदम शहर मा दस तल धार्मिक थिए त्यहाँ प्रभु bargained को शहर नाश गर्न। लट - अब त्यहाँ दस को शहर मा धार्मिक तर सिर्फ एक सरल थिए।
कि बाबजुद यो प्रभु, त्यो नष्ट गर्न होइन र उहाँलाई तिनीहरूलाई को एक को किनभने शहर निन्दा प्रतिबद्ध थियो भन्ने कुरा थियो। सदोम र गमोराको परमेश्वरको न्याय र क्रोध गर्न subjected थिए, र परमेश्वरको यो शहर माथि आगो र brimstone वर्षा गरौं। कि लट शहर छोडेर Zoar छिमेकी सहरमा सुरक्षित थिए थियो सम्म तर परमप्रभुले आफ्नो क्रोध सुरु गर्न सकिएन।
लूका 17: 28-29 - त्यसै तरिका यो लट को दिन थियो: तिनीहरूले खाए, तिनीहरूले पिए, तिनीहरूले किनेको, तिनीहरूले बेचेको, तिनीहरूले लगाए, तर लट सदोम बाहिर गए भन्ने दिन स्वर्गबाट ​​आगो र brimstone rained र नष्ट ती सबै।
एल OT परमेश्वरको न्याय पिडामा हुनेछ जहाँ समय र ठाउँ हटाइयो। लट उद्धार गर्न पठाएको थिए स्वर्गदूतहरू तिनीहरूले परमेश्वरको न्याय सुरु गर्न लट सुरक्षित गर्नु अघि सक्ने घोषणा। धेरै बाट उद्धार गरिएको छ जो मण्डलीको चित्र छ समय र ठाउँ आउन क्रोध को।
2 पत्रुस 2: 7-9 - तर उहाँले दुष्ट dissolute जीवन द्वारा सास्ती थियो धार्मिक लट, सुरक्षित गरियो।
पी etrus सबै iniquity असर गर्छ, र परमेश्वरले दुष्ट साथ धार्मिक न्याय गर्दैन हामीलाई देखाउँछ कि न्याय बारेमा सिकाउँछ।
दानियल र आगोको भट्टीमा मा तीन पुरुष
एच दानियल बारेमा istorien र आगोको भट्टीमा मा तीन मानिसहरू कष्ट र भविष्यमा पूरा को स्पष्ट चित्र देखाउँछ कि पुरानो नियमका को कथाहरू मध्ये एक हो।
एटिक्राईष्ट को स्पष्ट उदाहरण हो जो राजा नबूकदनेसरले, माथि बाबेलको Dura को सादा मा सुनको मूर्ति धारण थियो। मुर्ति साठी हात उच्च र छ हात चौडा, जो एटिक्राईष्ट भाषण गर्न तुलना गर्न सकिन्छ छ भनेर याद 666. नबूकदनेसरले तल गिर र आज्ञा उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई लागि परिणाम आगोको भट्टीमा हालियो गरिने थियो जहाँ यो स्तर मुर्ति, उपासना गर्न सबैलाई जबरजस्ती छ । बलिरहेको आगोको भट्टी परमेश्वरको क्रोध को तस्वीर र कष्ट मा ठूलो दुःख छ। (मलाकी 4:। 1 - हेर, दिन यो दन्किरहेको रूपमा बल्छ, आउँछ)
एस adrak, Meshach र Abednego नबूकदनेसरको मुर्ति दण्डवत इन्कार गरे र तिनीहरूले आगोको भट्टीमा हालियो। राजा आगोको भट्टी सात पटक तपाईं कहिल्यै यो हुन देखेका छौँ भन्दा hotter गरम पर्छ भनेर आज्ञा, र त्यहाँ पूर्णता बोली को तस्वीर छ। प्रभु आगोको भट्टीमा मा Shadrach, Meshach र Abednego सुरक्षित गर्ने आफ्ना दूत पठाउनुभयो, र तिनीहरूले कुनै पनि क्षति वा आगो को प्रभाव बिना बाहिर आए।
तर यो कहाँ दानियल कहीं छ यो कथा को प्रश्न हो जन्म देती। उहाँले मुर्ति गर्न गोडा झुके गर्नेहरूलाई थियो? उहाँले किन उपस्थित थियो र किन उहाँले पनि आगोको भट्टीमा हालियो थिएन। हामी दानियल नबूकदनेसरको मुर्ति गर्न गोडा झुके छैन भनेर एकदम निश्चित हुन सक्छ। जहाँ सबैलाई मुर्ति उपासना थियो दानियल बस प्रस्तुत गरिएको थिएन, वा दुःख को बलिरहेको आगोको भट्टी मा। परमेश्वरले "उहाँलाई लगिएको।" थियो
राजा आगोको भट्टीमा यी मानिसहरू थिए कि विवरण तीन यहूदी पुरुषहरूले (दान 3:12) थिए थियो। तीन यहूदी मानिसहरूले चुन्नु इस्राएलका संरक्षित गरिने को तस्वीर छ मार्फत संकष्टकालको र दानियल, प्रिय (दानियल 10:11) संरक्षित गरिनेछ जो मण्डलीको चित्र छ देखि संकष्टकालको।
को र्याप्चर बारेमा पावलले सिकाउनुभयो
पी aulus को र्याप्चर, लगभग 20 वर्ष पार गरेपछि को शिक्षा र प्रकाश प्रस्तुत गर्ने पृथ्वीमा पहिलो व्यक्ति थियो। किनभने येशूले आफ्ना समयमा आफ्ना चेलाहरूलाई गर्न र्याप्चर सिकाउन थिएन कि समय सम्म यो अज्ञात थियो। चर्च को र्याप्चर मुख्य रूप 1 थिस्सलोनिकी 4:16 र 1 कोरिन्थी 15:52 मा वर्णन गरिएको छ।
एक GT देखि clearest पद यशैया 26 देखि छ हामी मण्डलीलाई बताउन सक्नुहुन्छ भन्ने: 19-21। म हामी यशैया अध्याय 26 मा के हेर्न तुलना गर्न प्रयास गर्न चाहनुहुन्छ, र पावलको 1 थिस्सलोनिकी4मा र्याप्चर बारेमा शिक्षा: 16-17 र 5: 9।
रातो मा कालो पाठ र पावलले संग यशैयाको शब्द।
जे ES 26:19 - तर आफ्नो मरेको बस्नेछन्; आफ्नो शरीर उठ्नेछ। (पहिलो ख्रीष्टमा मरेका उठ्नेछ) आफ्नो शीत प्रकाश को एक शीत छ लागि, उठ्नुस् र गाउन, कि धूलो बस्ने तिमीहरू र पृथ्वी मृत बाहिर दिनेछु। मेरो मान्छे आउछन् र तपाईंको Chambers जान, तपाईं पछाडि ढोका बन्द। (त्यसपछि जीवित छन् र रहनेछन् जो हामी प्रभुको हावा मा भेट्न सँगै तिनीहरूलाई बादल मा पुगियो गरिनेछ) सम्म क्रोध द्वारा पारित गरेको छ, एक सानो क्षण आफैलाई लुकाउनुहोस्। हेर लागि प्रभु आफ्नो iniquity लागि पृथ्वीको बासिन्दाहरू दण्ड आफ्नो ठाउँबाट निस्कने आउँछ। (परमेश्वरले हामीलाई नियुक्त गरेन लागि क्रोध पीडित तर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमार्फत उद्धारको प्राप्त गर्न)
यो पनि यूहन्ना 14 उल्लेख आसन्न छ: जहाँ आफ्ना पिताको घरमा येशूले वार्ता धेरै कोठा छन् 2-3, र उहाँले हाम्रो लागि ठाउँ तयार पार्न जानेवाला थियो। ", Hither आउनुहोस् अप" र हामी प्रभु हाम्रो लागि तयार छ ठाँउ को भाग हुनेछ -: विधानसभा यूहन्ना प्रकाश मा सुनेको नै आवाज सुन्न हुनेछ। हामी आफ्नो Chambers मा जाने, र हामीलाई पछि ढोका बन्द हुनेछ। परमेश्वरको क्रोध छ जो - यो भयो जब आफ्नो ठाउँबाट परमप्रभुले आफ्नो iniquity लागि पृथ्वीको बासिन्दाहरू सजाय।
प्रभु जहाँ तिनीहरू हुन इस्राएललाई आउँछ जहाँ यो प्रतिज्ञा उहाँको देखिने फिर्ती बारे छैन। उहाँले त्यहाँ हाम्रो लागि ठाउँ तयार पार्न बुबालाई घर भएको छ कि चर्च एउटा प्रतिज्ञा छ।
मा प्रकाश अध्याय4को पुस्तकको सुरुमा हामीले बाइबल पहिले सामना छैन भनेर एउटा समूह पूरा। यसलाई पहिले अन्य तीन अगमवक्ताहरू छ यूहन्ना दर्शन परमेश्वरको सिंहासन देखेको छ लगे, तर पहिले को कुनै पनि यो भीड भविष्यवाणी भन्दा। यशैया छैन इजकिएल अध्याय 1 र 10 मा उनलाई हेर्न गर्नुभयो यशैया अध्याय6इजकिएल तिनीहरूलाई देखे, र दानियल यो म प्रकाश4परमेश्वरको सिंहासन वरिपरि बसिरहेका विचार 24 एल्डरहरूले छ छैन अध्याय7मा पनि तिनीहरूलाई देखे: 4th
यो भीड यसरी त्यहाँ पहिले अब, एक ऐतिहासिक र भविष्यसूचक दृष्टिकोणबाट मण्डलीको प्रतिनिधित्व गर्ने सात चर्च, हामी तिनीहरूलाई स्वर्गमा हेर्न पछि भएको छैन, तर। तिनीहरूले परमेश्वरको सिंहासन वरिपरि ठाउँमा छन् अघि संकष्टकालको प्रकाश अध्याय6मा आफ्नो सुरु हुनेछ, र यसैले, म 24 एल्डरहरूले संकष्टमा यसको सुरु हुन्छ अघि ठाउँमा कि छ raptured चर्च प्रतिनिधित्व गर्ने विश्वास गर्छन्।
शासन रूपमा 24 एल्डरहरूले thrones बसिरहेका। तिनीहरूले परमेश्वरको सिंहासन वरिपरि बस्न, त्यसैले तिनीहरू मदत र प्रभु सहयोग। तिनीहरूले काम गरेको छ त तल बस्न। तिनीहरूले rättfärdigjorda छन् तिनीहरूले सेतो वस्त्र लगाएका छन्। आफ्नो लुगा को वार्ड र येशूको लुगा जस्तै हो जो Himation छन्। तिनीहरूले crowns (Stephanos) लगाउने त्यसैले तिनीहरू राजा हो। तिनीहरूले मण्डलीमा तयार allusion छन् एल्डरहरूले पनि भनिन्छ।
9-10: जब sjungar तिनीहरूले प्रकाश5मा गीत förlöstas गाउन रूपमा:
" तपाईं पुस्तक लिन र तपाईं slain थिए लागि, आफ्नो छाप खोल्ने योग्यको हुनुहुन्छ, र आफ्नो रगतले तपाईं हरेक कुलको र भाषा र मान्छे र राष्ट्र परमेश्वरको (हामीलाई) को लागि मानिसहरू खरिद। तपाईं हाम्रा परमेश्वर एक शाही भित्री (राजा) र पुजारीहरूलाई तिनीहरूलाई (हामीलाई) गरेका छन्, र तिनीहरूले (हामी) पृथ्वीको शासन हुनेछ।
एस यदि धेरै पटक, पाठ राम्ररी मूल पाठ देखि अनुवाद भएको छैन। राजा जेम्स अन्य अनुवाद सट्टा पहिलो व्यक्ति बहुसंख्यक बसे बीच, छ। 24 एल्डरहरूले आफूलाई उद्धार चर्च, तिनीहरूलाई जस्तै लुगा छ जो संग, पुजारीहरू र राजा तिनीहरूलाई जस्तै ठाउँमा संकष्टकालको सुरु गर्नु अघि पहिचान हो, र छन्।
वी यसरी बाइबल धेरै उदाहरण र भूमिका मोडेल प्रभु यसलाई अन्त-समय न्याय पृथ्वी उत्प्रेरित गर्नेछ भनेर आउँदा एक समय र ठाउँ दुवै देखि आफ्नो मण्डलीको उत्प्रेरित गर्नेछ भनेर देखाउने भर हेर्नुहोस्।
उहाँले हामीलाई uproot र आफ्नो क्रोध द्वारा पारित गरेको छ अर्को आफ्नो पिताको घरमा हामीलाई लुकाउन हुनेछ। उद्देश्य र कष्ट को विषय देखि यस संसारमा पारित गर्नेछ जो कि मण्डलीको लागि छैन देखि संरक्षित गर्न हामी प्रतिज्ञा। एटिक्राईष्ट लागि हामी पर्खिरहेका छन् तर हाम्रो ठूलो परमेश्वर र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको अनमोल आशा लागि महिमा देखा पर्छ। (तीतस 3: 4) जसले हामीलाई आउन क्रोध देखि बचाउँछ। (1 बिहिबार 1:10)
डी एट यो, अर्थात् येशू, पूर्व वर्ष को 70th र अन्तिम हप्ता मा जा गर्न आफ्नो मण्डलीको ल्याउन हुनेछ म पूर्व-trib सिद्धान्त लागि एक रक्षा रूपमा लेख्न तेस्रो पोस्ट छ र कष्ट इन्साफ बाहिर भन्दा जान्छ कि पृथ्वी।
यू येशूको फिर्ती को प्रदर्शन सधैं मलाई मोहित छ जडान, र मानव इतिहासको चुनिएको पुस्ता को विचार मृत्यु स्वाद छैन, तर यसको सट्टा हुन्छ यसलाई परिवर्तन गर्न अनुभव हुनेछ येशूले उहाँको मण्डलीको भेला आउँदा तिनीहरूलाई स्वर्ग जीवित uproot गर्न।
दिन छुटकारा नजिकिंदै को
डी एट कि विषय त रोचक र विवादास्पद बनाउँछ, को संकेत हामी यो भविष्यमा पूरा तिर येशूको फिर्ती शीर्षक छन्, र यसरी धेरै कडा बोल्न छ।
आज धेरै मानिसहरू हामी दुवै हेर्न र अनुभव गर्न सक्छन् संकेत बढ्तै छन्, र पवित्र आत्मा तयार प्राप्त गर्न परमेश्वर र मान्छे को हृदय चर्च स्पष्ट बताइएको छ। कि जडान मा, त्यसपछि मानिसहरू छुटकारा दिन आउँदै छ हेर्न सुरु, अर्को प्रश्न हो हामी साँच्चै क्षण हुन्छ uppryckelsens आशा गर्न सक्छौं जब?
प्रश्न धेरै सोध्न
ई N धेरै मानिसहरू हामी र्याप्चर हुन्छ आशा गर्न सक्छौं जब येशूको फिर्ती छ जडानमा आफूलाई यस्तो प्रश्न कि प्रश्नहरू केही? सम्मेलन संकष्टकालको मार्फत जान हुनेछ? बिल्कुल कष्ट उद्देश्य के हो, र यो वास्तवमा एटिक्राईष्ट वा येशू, हामी लागि प्रतिक्षा गर्नुपर्छ छ? येशूको फिर्ती र एउटै वा दुई फरक घटनाहरूको र्याप्चर छ?
म यो पोस्ट र अन्तिम दुवै म जवाफ प्रश्नहरूको केही छन् लिखित छ भन्ने आशा।
मेरो व्यक्तिगत विश्वस्तता
टी reviously म पहिलो येशू कष्ट र र्याप्चर र येशूको देखिने फिर्ती नै घटना पछि आफ्नो इलाकाका पुन: प्राप्त गर्नेछ भन्ने राम्रो विश्वस्त थियो। येशूले केवल एक फिर्ती बताइएको र इस्राएल र यस संसारमा दुवै पीडित हुँदा कष्ट किन मण्डलीको बचत गर्नु पर्दछ? को बर्बाद हामी आज धेरै ठाउँमा देख्न किनभने म ख्रीष्टको शरीर को एक आवश्यक सफाई प्रक्रिया रूपमा कष्ट देखे।
तर म सुरुमा म बाइबलमा पढ्न सकिएन के संग भ्रमित प्राप्त गर्न सकेन भनेर केही अनुत्तरित प्रश्न थियो जब, म ठीक प्रश्नहरूको मा आफैलाई राख्न खोजे। यी प्रस्तुतिहरु म संग आए के को परिणाम हो।
यो मण्डलीको र्याप्चर लागि समय बिन्दु आउँदा जसरी म मेरो मुक्तिको आज हुँ रूपमा निश्चित, म पनि हुँ। वर्ष को अन्तिम हप्ता र 70th हप्ता सुरु गर्नु अघि येशूले आफ्नो मण्डलीको बांधन, र म यो अत्यधिक बताइएको लाग्छ कि तर्कको केही साझेदारी गर्न चाहन्छु।
र्याप्चर र येशूको देखिने फिर्ती
यूहन्ना 14: 1-3 - आफ्नो हृदय परेशान हुन दिनुहोस्। परमेश्वरको विश्वास र मलाई विश्वास गर्छन्। मेरो बुबाको घरमा धेरै कोठा छन्। यो त थिएनन् भने, म तपाईं को लागि ठाउँ तयार जाने भनेर भन्नुभयो होला? र म जाने र तपाईं को लागि ठाउँ तयार भने, म फर्केर आउन र म कहाँ हूँ तपाईं हुन सक्छ भनेर, आफैलाई तपाईं हुनेछ
1 थिस्सलोनिकी 4: 15-17 - हामी तिमीहरूलाई प्रभुको वचन द्वारा, जीवित छन् र प्रभुको आउँदै गर्न रहने भुसुक्क जो तिनीहरूलाई रोक्न हुँदैन भनेर हामी जो भन्छन्। एक जोर आदेश, प्रधान दूत एक आवाज र परमेश्वरको ट्रम्प, प्रभु आफूलाई स्वर्गबाट ​​धमकना तब लागि। र केवल ख्रीष्टमा मरेका उठ्नेछ। त्यसपछि जीवित छन् र रहनेछन् जो हामी हावा मा प्रभु भेट्न सँगै तिनीहरूलाई बादल मा पुगियो गरिनेछ। र त हामी कहिल्यै प्रभु हुनेछ
यू ppryckelsen येशूको देखिने फिर्ती लागि अर्को नाम छैन। के तपाईं येशू को फिर्ती उहाँको ठूलो कष्ट पछि देखिने फिर्ती मा र्याप्चर र अन्त सुरु चरणमा हुन्छ भनेर भन्न सक्छ।
सम्मेलन को र्याप्चर
यू ppryckelsen चेतावनी बिना हुन्छ कि अदृश्य घटना हो। छैन एकदम सही जब यो हुन्छ हामी अर्को शब्दमा थाहा छ, र हामी सावधान र प्रार्थनापूर्वक हुन भनिएको छ। हामी र्याप्चर बारेमा समय थाहा हुनेछ र यो अनुबंध सुरु गर्दा एक समझ, तर घण्टा र हामी बारे केहि थाहा छैन क्षण छ, र यो हुन्छ दिन सम्म लुकाइएको गरिनेछ।
येशूले ठाउँ मा हामीलाई भेट्न, र त्यसपछि हामीलाई उहाँले जहाँ हामीलाई हुन लागि, स्वर्ग फिर्ता लिन धरती आधा बाटो आउँछ। येशूले धरती गर्न र्याप्चर पछि जारी भए त त्यो हामीले यसको सट्टा छन् जहाँ हामीलाई लिएका थिए। तर यूहन्ना अनुसार, र उहाँले फिर्ता उहाँले आफ्नो स्वर्गीय राज्यमा आफ्नो पिताको घर छ जो, जहाँ हामीलाई प्राप्त गर्न आउँछ।
येशूले देखिने फिर्ती
जे Esu देखिने फिर्ती अदृश्य वा गोप्य आउन कुनै छ। सबै आँखा उहाँलाई हेर्न, र उहाँ स्वर्गमा को बादल मा पूर्ण दृश्यात्मक हुनेछ। दिनको समय त, हामी त्यो तुरुन्तै कष्ट को अन्त पछि हुनेछ, वा 3.5 वर्ष ठूलो समस्या पछि प्रारम्भिक थाहा छ, कुनै आश्चर्य पनि छ।
संकष्टकालको बाँच्न गर्ने केही मानिसहरू यो घटना साक्षी सक्षम हुनेछ।
प्रभुको आफ्नै शब्दहरू अनुसार
पी aulus यो छ कि जोड "प्रभुको वचन द्वारा उहाँले र्याप्चर र पुनरुत्थानको बारेमा सिकाउँछ जब"।
पहिलो, यो 1 थिस्सलोनिकी ई 51 पावलले द्वारा लेखिएको थियो, र समय बिन्दुमा लिखित पावलले यो पत्र लेख्दा अझै शायद छैन सुसमाचारका थियो छ। दोस्रो, तपाईं बस अन्य जीवित आउँछ गर्दा येशूले मरेका बाट उत्पन्न केही बताइएको जहाँ सुसमाचारका मा येशूको कुनै शिक्षा बादल उहाँलाई सामना गर्न गरिएका हुनेछ।
येशूले हामी OT मा देख्न सक्नुहुन्छ प्रतिज्ञा आधारित मरेका मात्र पुनरुत्थानको प्रचार गरे। त्यहाँ ठूलो कष्ट पछि पवित्र प्रतिज्ञा पुनरुत्थानको तुरुन्तै (दानियल 12: 2), र केवल मिलेनियम अघि। यो पुनरुत्थान भनिन्छ जीवन वा संन्यासी GT गर्न यसरी पर्छ जो पुनरुत्थानको छ।
1 कोरिन्थी 15: 51-52 - हेर, म एक रहस्य बताउन: हामी सबै निद्रामा छैन, तर हामी सबै, परिवर्तन गर्नेछ हुन, एक क्षण मा एक आँखा को झिम्काइ मा, पछिल्लो बिगुल मा। को बिगुल लागि आवाज पर्छ र मृत्युबाट incorruptible खडा गरिनेछ, र हामी परिवर्तन गरिनेछ।
डी एट उहाँले प्रत्यक्ष शब्दहरू वा प्रभुको प्रकाश मार्फत गरिएको छ रूपमा पल, अप्रत्यक्ष मण्डलीसित गर्न कि रहस्य एक conveys भन्ने हो।
पावलले यस conveys र प्रकट गरेको छ कहिल्यै गरिएको वा ज्ञात छ कि गोप्य, यो चुनिएको पुस्ता छैन मर्न भर्खरै हुनेछ, तर यो परिवर्तन र transfigured गरिनेछ अनुभव हुनेछ, र आदेश पूरा गर्न सँगै समात्नु गरिनेछ मरेका छ येशूले आकाश मा।
हामी त्यो हो जहाँ हुन चाहनुहुन्छ
यूहन्ना 14: 1-3 - "तपाईंको हृदय परेशान गरौं छैन परमेश्वरको विश्वास र मलाई विश्वास मेरो पिताको घरमा धेरै कोठा छन् यो त थिएनन् भने, म तपाईं भन्नुभयो थियो म एक ठाउँ तयार पार्न जान्छु भनेर।।। तपाईं को लागि? र म जाने र तपाईं को लागि ठाउँ तयार भने, म फेरि तपाईंलाई थाहा बाटो आउनेछ र म कहाँ हूँ तपाईं हुन सक्छ भनेर, आफैलाई लागि तपाईंलाई। र म जाने जहाँ, तपाईं भनेर थाह छ।। "
मा यूहन्नाको सुसमाचारले येशूले हामीलाई एक अद्वितीय प्रकाश दिन्छ। उहाँले कुनै अगमवक्ता पहिले थियो वा होनहार भएको कुरा कुरा छ। कतै हामी मसीहको पार्थिव यरूशलेमको संन्यासी भेला गर्न आउने थियो, तर बरु पढ्न सक्नुहुन्छ, उहाँले तिनीहरूलाई उहाँले टाढा जाने जहाँ एउटै ठाउँमा छ जो आफ्नो पिताको घर, लाग्न थियो।
उहाँले प्रतिज्ञा दिनुहुन्छ, यो को भनेर आधारमा छ " म फिर्ता आउन र म कहाँ हूँ तपाईं हुन सक्छ भनेर, आफैलाई तपाईं हुनेछ।" उहाँले संग यहूदी मुक्ति गर्न, वा, एक फिर्ती बारे कुरा गर्दै छ पृथ्वीमा आफ्नो राज्य स्थापना, वा जातिहरूलाई न्याय गर्न। यो एक शब्द मात्र आफ्नै बनाउने छ।
यूहन्ना 14: 1-3 र 1 बिहिबार 4: 13-18
डी हामी शब्द या वाक्यांश केही लगभग समान छन् जहाँ यी दुई पद तुलना गर्दा यहाँ अचम्मको समानताहरु छन्। तिनीहरूले आउन आदेश मा, एकै समयमा प्रत्येक अन्य पालन, र बाटो मा टुक्रा निर्माण गरिएको छ कि।
यूहन्ना 14: 1-3 1 बिहिबार 4: 13-18
v.1 चिन्तित v.13 पाइन
विश्वास v.1 v.14 के
v.1 परमेश्वर, मलाई येशू, परमेश्वरको v.14
V.2 तपाईं v.15 तपाईं बताउन भन्नुभयो
V.3 प्रभुको आउँदै v.15 फिर्ता आउन
V.3 ले आफ्नो V.17 अप छीन लिया
प्रभु भेट्न मलाई V.17 V.3
म कहाँ V.17 सधैं प्रभुको साथमा छु V.3 हुन।
यी पदहरू दुवै सान्त्वनादायी र प्रभु स्वर्गमा महिमा गर्न पृथ्वीबाट विश्वासीहरूलाई लिन आउने एक अद्वितीय तरिकामा हामीलाई देखाउँछ।
18 प्रि-trib argumenter
1 बस कुनै पुरानो नियमका वा नयाँ नियममा पदहरू चर्च संकष्टकालको अवधि मार्फत जानेछ, वा चर्च एटिक्राईष्ट विरुद्ध सामना गर्न अनुहार खडा गर्नुपर्छ भनेर सुझाव छ।
2. संकष्टमा "याकूबको समस्या" (Jer30: 7) भनिन्छ, तर "मण्डलीको वा चर्च दुःखको" भनिन्छ कहिल्यै छ।
3. गब्रिएल स्वर्गदूतले दानियललाई गर्न घोषणा 70 हप्ता तपाईंको मान्छे (यहूदीहरू) मा र तपाईंको पवित्र शहर (यरूशलेम) मा निर्धारित थिए। चर्च यहाँ उल्लेख गरिएको छैन। दान 9:24
4 सम्मेलन पहिलो 69 हप्तामा कुनै भाग थियो, र अन्तिम र 70th हप्ता भाग हुनेछैन।
5 प्रकाश र्याप्चर मा अध्याय4मा हुन्छ: कष्ट अवधि अध्याय 6-19 द्वारा वर्णन गरिएको छ जो 1। पहिलो छाप भङ्ग अघि मण्डलीको प्रतिनिधित्व 24 प्राचीनहरूले स्थानमा छ।
6 सम्मेलन प्रकाश को पहिलो तीन अध्याय बीस पटक उल्लेख गरिएको छ, तर अध्याय4र 19 को बीच उल्लेख कहिल्यै छ।
7 ठूलो कष्ट अवधि पनि "क्रोधको दिन" (Zeph 1:15) बाइबल मा भनिएको छ, तर येशूले क्रोध ग्रस्त हामीलाई नियुक्त गरेन। (1 बिहिबार 5: 9), तर (1 बिहिबार 1:10) "क्रोध" हामीलाई बुझाइएको
8 संकष्टमा समय बाइबलमा प्रभुको दिन (Zeph 1:15) भनिन्छ। तर 1 थिस्सलोनिकी 5: 2-3 प्रभु (संकष्टकालको) को दिन रात चोर रूपमा हुनेछ भनेर भन्छन्। मान्छे (बेग्लै विश्वास) भन्न जब, "शान्ति र सुरक्षा," त्यसपछि (बेग्लै विश्वास) विनाश संग रूपमा अचानक दुखाइ एक गर्भवती महिला मार्फत आउछ मारा, र तिनीहरूले (को बेग्लै विश्वास) उम्कन छैन। यो कष्ट को disbelievers आइपर्नेछन् भन्ने कुरा छ कि स्पष्ट छ, तर यो विश्वासी र सुरक्षित समावेश गर्दैन।
9 हामी र्याप्चर (1 थिस्सलोनिकी 4:18) को कुरा संग प्रत्येक अन्य सांत्वना हुनेछ। त्यहाँ चर्च भाग वा कष्ट domstid सबै मार्फत जानेछ भन्छन् कि शिक्षामा कुनै सान्त्वना छ।
10 येशूले चर्च संरक्षण, र चाहन्थे कि मा फिलाडेल्फिया चर्च प्रतिज्ञा "सारा संसार मा आउन र परीक्षण गर्न आफ्नो मान्छे ल्याउन पर्छ जो प्रलोभन, को घण्टा आउट उद्धार।" (प्रका 3:10) परमेश्वरको बाहिर विश्वासी मण्डलीको जोगाउने प्रतिज्ञा गर्नुभएको कष्ट अवधि।
बाढी अघि हनोक स्वर्ग पुगियो थियो र नूहसित जलप्रलयबाट मार्फत संरक्षित थियो जसरी 11, विधानसभा संकष्टकालको र इस्राएलका अवशिष्ट संकष्टकालको मार्फत संरक्षित गर्न अघि raptured गरिनेछ।
12 परमेश्वरले सदोम र गमोराको न्याय छैन लट शहर देखि टाढा थियो अघि सक्ने नै यसरी परमेश्वरले धार्मिक गएका अघि यस संसारमा न्याय गर्न सक्दैन। (1 उत्पत्ति 19:16)
उहाँले आग्रह गर्दा 13 येशूले कष्ट अवधि बताउनुभयो: "। सधैं Vaka र आउन र मानिसको पुत्र अघि खडा सबै कुराहरू भाग्न बलको लागि प्रार्थना" (लूका 21:36) उहाँले राख्न इच्छुक छैन येशूले केही माग्यो कुनै अर्थमा बनाउँछ।
14 मलाकी 3:18 प्रभु (आगमन मा) हामीलाई परमेश्वरको सेवा गर्ने एक र उहाँको सेवा गर्न बीच धार्मिक र दुष्ट बीच फरक देखाउन हुनेछ भन्छन्। पूर्व-trib प्रभु आफ्नो मण्डलीको, त्यसपछि हामी आउन धर्मी र अधर्मी बीचमा न्याय गर्न उहाँलाई साथ भेला गर्न आउँछ भन्ने विश्वास गर्छन्।
15 को र्याप्चर येशूले आउँछ लागि (: 16-17 1 थिस्सलोनिकी 4) उहाँले कष्ट को अन्त्यमा आउँदा आउँछ उहाँको चर्च संग आफ्नो मण्डलीको। (1 बिहिबार 3:13)।
16 येशूले आमन्त्रित कि सात चर्च गर्न पत्र मा "आत्मा मण्डलीलाई के भन्छ सुन।" तर ठूलो कष्ट मा, चर्च मा पवित्र आत्मा छेउमा बसे छ कि पछि तिनी यसो भन्छन्: "कान छ जसले, उहाँलाई सुन्न गरौं" (प्रकाश 13: 9) उहाँले त्यहाँ आत्मा सुन्न बोल्छ र कुनै चर्च छ जहाँ सभा, omits संकष्टकालको मार्फत जानुहोस्।
17 एटिक्राईष्ट को सन्तहरू संग युद्ध गर्न, र तिनीहरूलाई पराजित गर्ने शक्ति छ। (प्रका 13: 7)। तर यसलाई यहाँ भनिएको यो सहर हुन सक्दैन। येशू आफैले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ "helvets बंदरगाहों को शक्तिशाली मण्डलीलाई कहिल्यै हुनुपर्छ।" (मत्ती 16:18)
18 येशूले भन्न भएन: "जब यो भएको छ," त्यसपछि माथि सीधा र आफ्नो पूर्वसूचना लिफ्ट, बरु "यो सबै (को संकेत), हुन सुरु हुन्छ जब" यति माथि सीधा र आफ्नो पूर्वसूचना लिफ्ट, किनभने तपाईंको छुटकारा। (लूका 21:28)।
दुई साक्षी को
एस पहाडी म सँगै कुरा, दुई पदहरू, को जी.टी. र NT चयन, र त्यो चर्च छैन, म दुई निम्न पदहरू दर्शाउन चाहनु परमेश्वर, वा कष्ट को क्रोध मार्फत जाने पुष्टि:
1 थिस्सलोनिकी 1: 9-10 - द तिनीहरूले हामी तपाईं को प्राप्त थिए बारेमा कुरा र तपाईंले मूर्तिहरूबाट परमेश्वरको गरिएका कसरी जीवित र साँचो परमेश्वरको सेवा गर्न र आफ्नो पुत्रलाई स्वर्गबाट, जसलाई परमेश्वरले लागि प्रतीक्षा आउन क्रोध हामीलाई बुझाइएको छ जो मरेको येशूबाट खडा
यशैया 26: 19-21 - तर आफ्नो मरेको बस्नेछन्; आफ्नो शरीर उठ्नेछ। उठ र गाउन, तपाईंको शीत प्रकाश को एक शीत छ लागि भनेर, धूलो बस्ने तिमीहरू र पृथ्वी मृत बाहिर दिनेछु। मेरो मान्छे आउछन् र तपाईंको Chambers जान, तपाईं पछाडि ढोका बन्द। सम्म क्रोध द्वारा पारित गरेको छ छोटो क्षण आफैलाई लुकाउन। हेर लागि, परमप्रभुले आफ्नो iniquity लागि पृथ्वीको बासिन्दाहरू दण्ड आफ्नो स्थान बाहिर आउँछ। पृथ्वी आफ्नो रगत ऋण नंगे राख्नु हुनेछ र अब आफ्नो slain लुकाउनुहोस्।
वी मा यशैया देखि यस खण्डमा कहिल्यै अघि पूरा भएको छ कि छैन हेर्न सक्छन्। हामीलाई थाहा छ, जो संकष्टकालको पछि र अघि हुनेछ 2,: यो पनि येशूले प्रचार र दानियल दान 12 बताउँछ पुनरुत्थानको सहमत छैन।
यहाँ यशैया प्रभु पहिलो अघि र परमेश्वरको क्रोध र न्याय पृथ्वीमा बाहिर जान्छ अघि आफ्नो Chambers आफ्नो मान्छे भनिन्छ जब हुन्छ कि पुनरुत्थान को सट्टा बताइएको छ।
मेरो मान्छे आउछन्
"K जो साँच्चै" लोप "वा" अदृश्य बन्न "मतलब मेरो मान्छे, बारे", यूहन्नाको अनुभव गर्न एउटा अचम्मको समानान्तर प्रकाश अध्याय 4, उहाँले स्वर्गमा एउटा खुला ढोका देखें जहाँ मा थियो, र एकै समयमा रूपमा परमेश्वरको आवाज सुने एक बिगुल त्यस्तै भन्नुभयो: "यहाँ आऊ।" तत्काल परमेश्वरको पछि, चिसो यूहन्ना स्वर्गमा हेर देखि कष्ट पृथ्वीमा बाहिर प्ले उहाँले जहाँ परमेश्वरको सिंहासन, गर्न पुगियो बन्नेछ।
जन मा uppryckelsens दिन नै अनुभव हुनेछ यो चर्च प्रतिनिधित्व गर्दछ। आदेश मार्फत, प्रधान दूत एक आवाज र परमेश्वरको ट्रम्प, मण्डलीलाई स्वर्गमा मा समातिए गरिनेछ र कष्ट पृथ्वीमा फैलाउनु देख्नेछन्।
पृथ्वीको बासिन्दाहरू प्रयास र सजाय
प्रकाश 3:10 - तपाईं धीरज बारेमा मेरो वचन पालन गरेका छन् किनभने, म राख्न र जो सारा संसार मा आउन पर्छ र परीक्षण गर्न आफ्नो मान्छे ल्याउन, परीक्षाको घडी तपाईं सुरक्षित हुनेछ
जे esaja बताइएको "प्रभु आफ्नो iniquity लागि पृथ्वीको बासिन्दाहरू दण्ड आफ्नो ठाउँबाट निस्कने आउँछ।" त्यस्तै प्रकाश 3:10 प्रलोभनको सबै दुनिया मा आउनेछ जो (कष्ट), को घण्टा परीक्षण गर्न आफ्नो मान्छे राख्नु हो भनेर पुष्टि गर्छ।
संकष्टकालको उद्देश्य बारे दुवै यशैया र प्रकाश वार्ता दण्ड र प्रयास र परमेश्वरको क्रोध भनिन्छ केहि मार्फत किनभने आफ्नो पापको पृथ्वीको बासिन्दाहरू छ। यी दुवै पद हामी बाट, सुरक्षित द्वारा प्रभु उहाँको पिताको घर घर हामीलाई भनिएको छन् पुष्टि समान रिस, आफ्नो Chambers घर सम्म क्रोध द्वारा पारित गरेको छ।
मरुभूमि टापुमा एक मानिस
हे पु हामी प्रयोग गर्न सक्ने र एक मानिस मात्र बाइबल आफ्नो हातमा मरुभूमि टापुमा राखे, तर घोडे र सैद्धान्तिक विचार लागू। के निष्कर्षमा उहाँले र्याप्चर लागि समय बिन्दु आदर निष्कर्ष आएका थिए?
परमेश्वरले बाइबल प्रभुको दिन रूपमा वर्णन रूपमा एक भयानक domstid मार्फत आफ्नो क्रोध बगाउने द्वारा किनभने आफ्नो पापको पृथ्वी न्याय भनेर 9-13, र आमोस 5:18: पहिलो, उहाँले यशैया 13 सिकेका थिए।
यशैया 13: 9-13 - देशमा बर्बाद राख्नु र त्यहाँ बस्ने भएको पापी नाश गर्न क्रोध र भीषण रिस संग हेर, प्रभु को दिन आउँछ, भयानक। स्वर्गको तारा र तारामण्डल लागि थप यसको प्रकाश जहाज छैन। सूर्य गाढा rises र चन्द्र गरेको प्रकाश मा छैन। म संसारको यसको दुष्ट लागि, आफ्नो iniquity लागि दुष्ट दण्ड हुनेछ। म stoltas bravado बनाउन र tyrants गर्व तल दस्तक हुनेछ। म ठीक सुन, Ophir को सुन भन्दा बढी दुर्लभ एक मानिस भन्दा एक मानिस थप दुर्लभ गर्नेछ। त्यसैले म स्वर्गमा डर गर्नेछ, र Sway र, -By होस्टहरूको परमप्रभु रिसले यसको नींव गर्न हल्लाउनुहोस् आफ्नो बलिरहेको क्रोध को लागि पृथ्वी।
आमोस 5:18 - यहोवाको दिन खोजीमा गर्नेहरूलाई धिक्कार! तपाईं यसलाई लागि किन खोजीमा? प्रभुको दिन अन्धकार र प्रकाश छैन।
जी मत्ती अध्याय 24 मा eNom त्यसपछि पढ्न, त्यो sentencing समय प्रभु निष्कर्षमा नभएसम्म यसलाई कुनै मानव अस्तित्व हुनेछ भनेर गम्भीर हुन भनेर देख्न सक्थे। बरु, प्रभु शक्ति र यस पृथ्वीमा महिमा यस domstid समाप्त हुनेछ। उहाँले येशूको फिर्ती अझै भयो नहीं भनेर थाह थियो, त्यसैले उहाँ परमेश्वरको क्रोध भविष्यमा अझै पनि कहीं थियो भनी थाह थियो जब।
उहाँले 1 थिस्स 9-10 आउँदा त त्यो एक सफा कथन देख्न सक्थे। उहाँले हामीलाई बचाउँछ गर्ने येशूको बारेमा पढ्न र आउन क्रोध हामीलाई बुझाइएको।
1 थिस्सलोनिकी 1: 9-10 - द तिनीहरूले हामी तपाईं को प्राप्त थिए कसरी कुरा र तपाईंले मूर्तिहरूबाट परमेश्वरको गरिएका कसरी जीवित र साँचो परमेश्वरको सेवा गर्न र आफ्नो पुत्रलाई स्वर्गबाट, जसलाई परमेश्वरले लागि प्रतीक्षा , आउनुहोस् येशू क्रोध हामीलाई बुझाइएको छ जो गर्न मृत्युबाट ब्यूँताइनुभएको।
अंग्रेजी अनुवाद (रूपान्तरित): ..And उहाँले मृत्युबाट ब्यूँताउनुभयो कसलाई आफ्नो पुत्रलाई स्वर्गबाट, प्रतीक्षा गर्न - आगामी क्रोध हामीलाई छुटकारा गर्ने येशूको।
जी eNom उहाँले निम्न प्रश्नहरूको जवाफ दिन सक्छ बाइबल पद पढ्न "जो, के, कहाँ, कहिले र किन।" जो (येशू) के (छुटकारा र हामीलाई बचाउँछ गर्ने), जब (क्रोध को समय)। 1 थिस्सलोनिकी4थप पढेर: 15-17, उहाँले "सबैले" स्वर्गको बादल गर्न पृथ्वीबाट छ कि पढ्न सक्छ, र 1 थिस्सलोनिकी 5:9हामी पीडित किस्मत छन् पढ्दा किन reciprocated आग्रह गरियो परमेश्वरको क्रोध, तर येशू ख्रीष्ट मार्फत उद्धार प्राप्त गर्न।
1 थिस्सलोनिकी 5:9- हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट मार्फत उद्धार प्राप्त गर्न तर परमेश्वरले क्रोध ग्रस्त हामीलाई नियुक्त गर्नुभयो लागि
अंग्रेजी अनुवाद (KJV): परमेश्वरको क्रोध हामीलाई नियुक्त गर्न भएकोछ, तर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टले मुक्ति प्राप्त गर्न
वी उर उदाहरणका कि हामी परमेश्वरको क्रोधको नै समय-बिन्दु बारेमा सुरक्षित छन् हामी केही छैन रूपमा, देख्न सक्छ, उसले यसैले र्याप्चर सट्टा यसलाई प्रतिनिधित्व हुनेछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं। र्याप्चर प्रकाश अध्याय6मा आफ्नो सुरू प्राप्त गर्ने पृथ्वीमा परमेश्वरको क्रोध ट्रिगर गर्न alltstå हुनेछ।
उत्तर प्राय प्रश्न गर्न पोस्ट-trib
एम नियमित एड अक्सर तर्क र प्रश्न मान्छे देखि कष्ट अघि र्याप्चर विश्वास गर्छन् छैन। यहाँ तिनीहरूलाई केही हो:
"बाइबल त्यहाँ दुई advents हुनेछ भनेर सिकाउँछ छैन। येशूले दुई पटक हुनेछ भनेर तपाईं कसरी भन्न सक्नुहुन्छ? "
उत्तर: बस जस्तै नै बाटो मा, पुरानो नियमका (दुःख सेवक र राजा) मा मसीहको दुई फरक चित्र छन्, त्यहाँ येशूको फिर्ती को दुई फरक चित्र हो गाह्रो भेला छ। यी दुई दृश्यहरु र्याप्चर र येशूको देखिने फिर्ती छन्। तपाईं येशूको फिर्ती जहाँ र्याप्चर सुरु चरणमा गरेको छ, र येशूको भनेर भन्न सकिन्छ देखिने फिर्ती यो अन्त। यो केवल पूर्ण विभिन्न ठाउँमा वा घटनाहरू छ।
"येशूले र्याप्चर तुरुन्तै कष्ट पछि ठाउँ लिन भनेर (मत्ती 24: 29-31) भने। उहाँले आफ्नो चुनिएकाहरूका भेला गर्न स्वर्गदूतहरू पठाउँछ गर्दा"
उत्तर: रैप्चरको धेरै कारण मत्ती अध्याय 24 मा उत्पन्न गर्दैन:
को र्याप्चर मा विश्वासीहरूलाई महिमा शरीर एस्केन्सन गति मा बस येशूले हामीलाई बनाउँछ कि स्वर्गदूतहरूको सहायता बिना यो गर्न सक्छ पर्छ। किन हामी शरीर को महिमा गरिएका गर्दा, र्याप्चर मा स्वर्गदूतहरूको सहायता गर्नुपर्छ?
स्वर्गदूतहरू पनि यो समय बिन्दुमा सँगै orättfärdia बटोरता (मत्ती 13: 38-43, 49-50)
एक स्वर्गदूतहरू मत्ती 24 मा विश्वासीहरूलाई सङ्कलन upprycklsen छ मत्ती 13 त्यसै गरी पनि हुनुपर्छ छ भनेर भन्छन् भने। मत्ती 13 मा, हामी पहिलो धरती टाढा भङ्ग हुनेछ दुष्ट र धर्मी हुनुहुन्छ भनेर एकै समयमा हेर्नुहोस्।
स्वर्गदूतहरू सँगै धर्मी र अधर्मी येशूले न्याय गर्न 1000 साल राज्य अघि दुवै भेला गर्न पठाउनुभयो छन्। धार्मिक 1000 साल राज्यको हकदार नुन अनुमति गर्दा यी मान्छे, जहाँ दुष्ट आगोको कुण्डमा फ्याँकिएको छन् तिनीहरूको प्राकृतिक शरीर, छन्।
मत्ती 24 मा येशूको फिर्ती
मत्ती 24:31 - एक जोर बिगुल कल संग, उहाँले पठाउन पर्छ आफ्नो स्वर्गदूतहरू पठाउन र तिनीहरूले अन्य स्वर्गको एक अन्त देखि देखि चार कार्डिनल अंक आफ्नो चुन्नु भेला हुनेछ।
एम 24 येशूको देखिने इस्राएल र संसारको आउन वर्णन एक अध्याय छ। आफ्ना शत्रुलाई को न्याय, र मसीही राज्य स्थापना गर्न। अक्सर चयन पद 31, जो यो मण्डलीको छ दावा गर्न इशारा। म यो बारेमा चुन्नु यहूदीहरूले खण्ड छ कि एकदम स्पष्ट छ लाग्छ।
पनि मत्ती 24:31 को सम्बन्ध मा निम्न पदहरू ल्याउन प्रयास गर्नुहोस्:
यशैया 11:11 - अनि प्रभु फेरि त्यो समय मा हुनेछ निस्कने आफ्नो हात राख्नु, आफु को लागि आफ्नो मान्छे को शेष प्राप्त गर्न को द्वीपहरु अश्शूरका, मिश्र, Pathros, इथोपिया, Elam, Shinar, हमात उद्धार गरिएको छ के, र ।
यशैया 11: 12 उहाँले राष्ट्रका लागि ब्यानर उठाउनु र इस्राएलका महसुल भेला र चार कुनामा देखि यहूदाका dispersed हुनेछ।
ब्यानर र बिगुल
बी Anner र बिगुल मान्छे को कल अप प्रतिनिधित्व गर्छ। कुनै शङ्का तिनीहरूले बारेमा कुरा गर्दै छन् नै लत छ, र परमेश्वरको यशैयामार्फत घोषणा यसलाई इस्राएलका मानिसहरू र बोलाए छन् जो महिलाहरु छ कि। को चुन्नु संकष्टकालको बचे गर्ने विश्वासी यहूदीहरू हो, र समय छ, सबै पृथ्वीमा छरिएका छन्। सबै यहूदीहरू घर जाँदै, को GTS भविष्यसूचक शब्दहरू पूरा अनुरूप पनि छ जो। यो खण्डलाई मा चर्चको बारेमा कुरा छैन कि प्रमाण छ।
"पूर्व-trib केही सतावट मार्फत जान डराएका थिए जो द्वारा शुरू छ"
उत्तर: हामी दुःख कुरा गर्दा हामी ठूलो कष्ट (gr.Thlipsis Megas) मा सामना हामी संसारको (gr.thlipsis) मा सामना सामान्य दुःख र कष्ट बीच विशिष्ठ द्वारा सुरु हुनु पर्छ येशूले मत्ती 24 मा बताइएको छ, र दानियल अध्याय 12
पूर्व-trib सिद्धान्त भनेर विश्वासीहरू मा बाहिर जाने छैन सतावट उम्कन हुनेछ। येशूले हामी आफ्नो खातिर (यूहन्ना 15:18) को लागि यो संसारमा घृणा गरिनेछ भनेर भविष्यवाणी गरे। संसारमा साँचो विश्वासीहरूलाई र अधिकारीहरू, आफ्नै शरीर विरुद्ध आध्यात्मिक युद्धमा अनुभव र सुसमाचार लागि पीडित हुनेछ। दुःख को त्यो प्रकारको येशूले हामी मुक्त हुनेछ भनेर हामीलाई प्रतिज्ञा कहिल्यै। हामी कष्ट मा सामना गर्ने रिस केही फरक र शब्द हामी अनुभव कि पर्दैन वा मार्फत जाने हामीलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ भन्ने कुरा हो। (1 बिहिबार 5: 8)
": एटिक्राईष्ट देखिन्छ अघि 1-9 को र्याप्चर उत्पन्न भएन भनेर2थिस्सलोनिकी2मा पावल यसो भन्छन्"
उत्तर: पावलले प्रभु को दिन को सम्बन्ध मा र्याप्चर बताइएको, येशूको देखिने फिर्ती enstydig छैन। प्रभुको दिन 24 घण्टा betydningen मा एक दिन, बरु संसारमा बाहिर जान्छ कि न्यायको अवधि छैन। (छ 2:12, 13: 6, इजकिएल 13: 5, योएल 1:15 आमोस 5: 18,20)
थिस्सलोनिकीका चर्च डर र चिन्तित तिनीहरूले पहिले नै कष्ट अवधि भित्र आफूलाई फेला कि थिए। पावलले तिनीहरूलाई यस्तो आश्वासन दिन्छ र यो हुन्छ पहिले एटिक्राईष्ट पहिलो प्रकट हुनुपर्छ बताउँछ। एटिक्राईष्ट इजरायल आफ्नो करार वर्ष, वा कष्ट अन्तिम हप्ता सुरु सुरु गर्दा।
मान्छे कसरी पवित्र आत्मा को कष्ट मा सुरक्षित गर्न सकिन्छ पृथ्वीबाट गएको छ?
उत्तर: बसे मुक्तिको सम्भावना अब अवस्थित मतलब पवित्र आत्मा छेउमा छ त्यो छैन, तर पवित्र आत्मा हामी एक छाप एकदम चर्च उमेर लागि अद्वितीय छ रूपमा पवित्र आत्मा छ जहाँ मानव हृदयमा बास गर्नेछ।
पेन्तिकोसमा पवित्र आत्माको outpouring अघि मान्छे पनि सुरक्षित थियो, र पवित्र आत्मा मानिसहरूलाई देखियो। पवित्र आत्मा पेन्तिकोसमा खन्याइएको थियो जब हामी एक "दोस्रो" पवित्र पृथ्वीमा आत्मा थिएनन्। बस पुरानो नियममा जस्तै मान्छे पवित्र आत्मा को अतिरिक्त, माथिबाट आधार मा जस्तै तरिकामा काम गर्नेछ जो कष्ट समयमा सुरक्षित गरिनेछ।
पोस्ट-trib सिद्धान्त गर्न प्रश्नहरू
एस amtidigt पोस्ट-trib सिद्धान्त जवाफ वा उचित व्याख्या दिन गाह्रो छ भनेर केही अनुत्तरित प्रश्न पनि हो:
को र्याप्चर मा येशूको देखिने पहिलो आउँछ भने आएको, जो त्यसपछि सहस्राब्दी आबाद हुनेछ?
"तपाईं बस सुरक्षित ठान्छन् भने सहस्राब्दी भाग प्राप्त, र र्याप्चर मा पहिलो आउँछ येशूको देखिने सिद्धान्त मा सहस्राब्दी सबै मानिसहरू सदैव शरीर गरिएका गर्दा गर्नुपर्छ छन् आउँछन्। तर जो त्यसपछि, जब प्रजनन मात्र गर्न सकिन्छ प्राकृतिक शरीर मा मानिसहरूले "मिलेनियम आबाद हुनेछ?
उत्तर: यो कष्ट समयमा र्याप्चर पछि सुरक्षित थिए मानिसहरूले गरेको छ। मानिसहरू आफ्नो प्राकृतिक शरीर मा सहस्राब्दी मा जानुहोस्।
11-23 वा कुरा अध्याय 14: किन र्याप्चर प्रकाश 19 मा उल्लेख गरिएको छैन छ?
"प्रकाश अध्याय 19 मा, हामी येशूको देखिने फिर्ती को विवरण प्राप्त, तर यो पुनरुत्थान वा र्याप्चर न उल्लेख गरिएको छ। Zech 14: 1-7 पनि यो घटना वर्णन, तर यो कहाँ उल्लेख गरिएको छ। छैन यसलाई लाखौं पुनरुत्थान समावेश कि इतिहास सबैभन्दा ठूलो घटना को एक होइन प्रकाश अध्याय 19 वा कुरा अध्याय 14 मा न उल्लेख कि अनौठो छ? किन? "
उत्तर: किनभने यो केवल समय बिन्दुमा गरेको छैन रैप्चरको वा पुनरुत्थानको उल्लेख छैन।
जो पहिले संकलित हुनेछ, अन्यायपूर्ण (मत्ती 13: 30,41,49) वा धार्मिक? (1 थिस्स 4: 16-17)
दुवै 1 थिस्सलोनिकी र मत्ती 13 सम्बन्धित resurrections पहिलो ठाउँ लिन भनेर भन्छन्। 1 थिस्सलोनिकी बताउँछ मण्डलीको uppståendelsen पहिलो आउँछ, तर मत्ती 13 पहिलो अधर्मी पृथ्वीबाट लिएको देखे। दुवै समूह दिन हटाउन पहिलो हुन सक्दैन?
उत्तर: त्यहाँ बस साथ उत्पन्न छैन भनेर दुई अलग घटनाहरू छन् ।
को र्याप्चर स्थान लिएको छ भने पनि: सुरक्षित कि र्याप्चर (ख्रीष्टको अदालत) मा crowns संग पुरस्कृत गरिनेछ तथ्यलाई कसरी 24 एल्डरहरूले पहिले नै तिनीहरूलाई (4-10 प्रकाश 4) छ कि यो छ?
उत्तर: पहिलो छाप भाँचिएको छ अघि र्याप्चर लिएको ठाउँ हुनुपर्छ।
भेडा र बाख्राको किन र्याप्चर पहिले नै भएको ती को कष्ट पछि विभाजित बन्ने? (मत्ती 25: 31-33)
उत्तर: संग र्याप्चर येशूको देखिने फिर्ती मा उत्पन्न भएन, त्यसैले भेडा र बाख्राको (संकष्टकालको मानिसहरू जीवित) मिलेनियम अघि अलग गर्छन्।
जहाँ सबै देखि "नगरिएका" मिलेनियम को अन्त मा फेला हुनेछ? (प्रका 20: 7-10)
उत्तर: त्यहाँ हजार वर्षीय शासनको दौडान जन्म थिए मानिसहरू हुन्। तिनीहरूले प्राकृतिक शरीर मा सहस्राब्दी प्रविष्ट भएकाहरूलाई को सन्तान छन्।
यो यति भनेर एटिक्राईष्ट अगाडि छैन आउन सक्नुहुन्छ रोकिराखेको छ भनेर कसले हो?
उत्तर: चर्च मा पवित्र आत्मा एटिक्राईष्ट गर्न सबैभन्दा ठूलो अवरोध भनेकै छैन अगाडि आउन सक्छ।
उहाँले स्वर्गमा विश्वासीहरूलाई लागि ठाउँ तयार हुनेछ, र त्यसपछि उहाँ जहाँ हामीलाई लिन फर्कन 1-3: येशूले यूहन्ना 14 मा प्रतिज्ञा गर्नुभयो। पूर्व-trib येशूले आफ्नो मण्डलीको साथ त्यहाँ पृथ्वीमा फर्कन हुनेछ दाबी। किन येशूले स्वर्गमा हाम्रो लागि ठाउँ तयार हुनेछ र त्यसपछि हामीलाई त्यहाँ लिन?
उत्तर: पोस्ट-trib सिद्धान्त व्याख्या गर्न धेरै गाह्रो छ यूहन्ना 14: 1-3
नासरतको येशूको घोषणा
लूका 4:। 18-19 - "उहाँले मलाई गरिब सुसमाचार प्रचार अभिषिक्त छ किनभने प्रभुको आत्मा, मलाई मा छ उहाँ त्यस गर्न कैदीहरूलाई र दृष्टि को रिकभरी गर्न स्वतन्त्रता घोषणा गर्न मलाई पठाउनुभएको छ, को दिन स्वतन्त्रता थिचोमिचो र प्रभुको स्वीकार्य वर्ष घोषणा
ई 1-2 र यी शब्दहरू साँचो आएका थिए कि घोषणा: येशू मरुभूमिमा परीक्षा थियो पछि, उहाँले यशैया 61 बाट पढ्न जहाँ नासरत, आए। याद गर्न कुरा येशूले यशैयाको सम्पूर्ण भविष्यवाणी पूरा बिना मिड-वाक्य रोक्छ छ।
येशूले पद को बीचमा रोक्छ कारण यो पदको पहिलो भाग उहाँको आगमनमा र गर्न आफ्नो पार्थिव सेवकाईको संग छ भन्ने छ। चर्च पृथ्वीबाट गएको छ पछि भविष्यवाणी दोस्रो भाग मात्र पूरा हुनेछ।
इजरायल र चर्च
प्रेरित 15: 13-18 - "भाइहरू, मलाई सुन्न परमेश्वरको पहिलो उहाँले राष्ट्रहरूमा आफ्नो नामको लागि मानिसहरू जित्यो निश्चित गरे कसरी शिमोन वर्णन छ यो भन्छन् जो अगमवक्ताहरूको शब्दहरू, अनुरूप छ: त्यसपछि म फिर्ता हुनेछ।। र दाऊदको Fallen वासस्थान पुनर्निर्माण। म पुनर्निर्माण हुनेछ यसको भग्नावशेष, र म यसलाई सेट हुनेछ,
डी एट चर्च वर्ष को 70th र अन्तिम हप्ता मा raptured गरिने अन्य Theological कारणहरू छन्।
को 70th हप्ता को लागि प्राथमिक कारण पनि छ हामी दानियल 9:24 मा देख्न कि इस्राएललाई प्रतिज्ञा पूरा गर्न छ भने, त्यसपछि मण्डलीको पहिले रहनेछैन। याकूबले प्रेरित 15 मा, क्रमिक पृथ्वीको सभा समय पछि, प्रभु आफ्नो ध्यान बारी र इस्राएलका यसको कार्यक्रम जारी भनेर पुष्टि गर्छ। र्याप्चर प्रभु येशूको देखिने फिर्ती भन्दा छुट्टै समय बिन्दुमा हुनेछ इस्राएल र मण्डली लागि विभिन्न कार्यक्रम छ।
कष्ट अर्को शब्दमा, दुई साझेदारी। आंशिक इस्राएलका शुद्ध गर्न, र दोस्रो, नष्ट र नास्तिक राष्ट्रका संग बनाउन। (यर्मि 30: 1-11)। मण्डलीको यी उद्देश्यका साथ होइन।
को बिगुल 7
प्रकाश 11:15 - सातौं स्वर्गदूतले आफ्नो बिगुल उडायो । त्यसपछि जसले यसो भने आकाश बलियो आवाज मा सुने थियो: "। संसारको राज्य अब हाम्रा प्रभु र आफ्नो ख्रीष्टको पर्छ, र उहाँले कहिल्यै र कहिल्यै लागि शासन गर्नेछ"
ई N केही र्याप्चर र अन्तिम बिगुल मा हुन्छ कि पुनरुत्थान हामी कष्ट मा सामना गर्ने 7th र अन्तिम बिगुल जस्तै हो भन्छन्। तर हामी अन्तिम बिगुल पुनरुत्थानको स्वामित्वको संग, प्रकाश 11:15 मा सात बिगुल भ्रममा हुँदैन।
पहिलो, त्यहाँ हामी प्रकाश मा सामना सात तुरही गर्न विपरीत मा विषय र परमेश्वरको बिगुल मुक्तिको एक बिगुल हुँदा यी दुई तुरही मा प्रभाव दुवै मा फरक छ यो संसारको न्याय छ। परमेश्वरको ट्रम्प पुनरुत्थानको एक व्यक्तिको पेशा, र परमेश्वरको मान्छे भेला छ।
यो प्रभु प्रकाश मा बिगुल मा उड्ने, बरु एउटा दूत छैन। को स्वर्गदूतले बिगुल उड्ने बेला, यो ठूलो कष्ट सुरु, र अन्तिम 3.5 वर्ष थालेका हुन सक्छ कि एक संकेत हो। र अन्तमा, परमेश्वरको बिगुल सुनिन्छ गर्दा त यो केवल एक प्रमुख घटना गर्दा सातौं बिगुल विज्ञप्ति विभिन्न घटनाहरू transmutes।
एम बाफ मान्छे प्रतिबद्ध र कष्ट येशूले देखिने फिर्ती को अन्त मा ठाँउ लिन्छ जो सीमित र विशेष 24 घण्टा, दिन रूपमा प्रभुको दिन बुझाउँछ। यसरी प्रभुको दिन र र्याप्चर पर्याय हो र एक मा बाहिर जान्छ मतलब।
तर प्रभुको दिन उल्लेख जो केही bivelverser को एक समीक्षा यसलाई केवल एक दिन उल्लेख छैन, कि तर संकष्टमा येशूले देखिने फिर्ती र दुवै मिलेनियम कवर न्यायको समयमा देखाउँछ।
2 पत्रुस 3: 10-23 - यहाँ प्रभुको दिन येशूको देखिने फिर्ती उल्लेख गर्न सक्दैन, त्यसपछि हामी दिन स्वर्गीय शरीर भंग गरिने थाहा छ, र हामी नयाँ स्वर्ग र साम्राज्यको 1000 वर्ष पछि पहिलो स्थानमा नयाँ पृथ्वी प्राप्त।
प्रकाश 20:4- अनि म thrones देखे, र तिनीहरूले न्याय गर्न अख्तियार दिइएको थियो मा बसे। र म तिनीहरू येशूको testified थियो किनभने beheaded गर्ने थियो गरिएको र परमेश्वरको वचन र जनावरको र आफ्नो छवि उपासना थिएन र मा निधारमा वा हात आफ्नो चिन्ह प्राप्त प्राण देखे। तिनीहरूले बस्ने र एक हजार वर्ष ख्रीष्टसित शासन गरे। तर मरेको बाँकी हजार वर्ष समाप्त थिए सम्म फेरि बस्थे। यो पहिलो पुनरुत्थान छ।
डीप्रकाश 20 मा पहिलो पुनरुत्थान:4पनि धेरै चर्चा फिर्ता र निस्कने भएको छ भन्ने कुरा छ, र म हामी यो पढ्दा बाइबल वचन नै को लागि कुरा ठान्छन्। हामी पुनरुत्थान बताइएको कि पद मा देख्न सक्नुहुन्छ, र यो पहिलो पुनरुत्थान छ। त्यसपछि हामी हेर्न सक्नुहुन्छ, र कष्ट पछि शहीदको पुनरुत्थानको बारेमा कुरा त्यहाँ छ। तर यो पहिलो पुनरुत्थान मात्र कष्ट देखि शहीदहरूको हुन्छन् त भन्ने हो? होइन, को पाठ्यक्रम छैन।
डी पहिलो पुनरुत्थान पुनरुत्थानको प्रकार को प्रकारको छ के बढि छ। हामी त्यहाँ resurrections दुई प्रकार हो कि देख्न सक्छौं। परमेश्वरको अनन्त जीवन, र परमेश्वरको बिना सदाको लागि दोस्रो पुनरुत्थान संग पहिलो। परमेश्वरको अनन्त अलग छ उत्तरार्द्ध पुनरुत्थानको, सबै बनेको सबै समय अवधि देखि मृत बाधा र साम्राज्यको 1000 वर्ष पछि ठाउँ लिन्छ। (प्रका 20: 5)
परमेश्वरको अनन्त जीवन बराबर छ जो पहिलो पुनरुत्थान विभिन्न चरणहरु मा स्थान लिन्छ। को NT मा, हामी सबै वर्ग "पहिलो पुनरुत्थान" अन्तर्गत आउने विभिन्न resurrections हेर्नुहोस्।
तेस्रो दिन मा 1 येशूको पुनरुत्थानको। येशूको मुक्ति दुखाइ किनभने सबै होहल्ला लागि टोली छ। उहाँले लगभग 2000 वर्ष पहिले होस्ट सबै पाप मिलाप थियो भने, हामी मृत देखि पुनरुत्थान थियो थिएन। येशूको पुनरुत्थान मेरो पुनरुत्थानको छ।
2. हिब्रू 11:35 tid.- जीएल नियममा केही मानिसहरू पुनर्जीवित
येशूको मृत्यु र पुनरुत्थान संग जडान देखा पर्यो 3rd जीएल नियमका देखि विश्वासीहरूलाई। मत्ती 27: 52-53
अन्तिम अघि 4th मसीही सभा र्याप्चर र इस्राएल र यरूशलेममा लागि वर्षको 70 हप्ता हुन्छ।
संकष्टकालको अन्त्यमा दुई साक्षी को5पुनर्जीवनको - 11:12 अप
बस इस्राएलका राज्यको पुनर्स्थापना अघि ठाउँ लिन्छ जो जीएल नियमका विश्वासीहरूलाई र कष्ट को शहीदहरूको6पुनरुत्थानको। - दान 12:13, यूहन्ना 11:24, 20: 4
एम संकष्टकालको समयमा र येशूको फिर्ती संग संचार मा ठाउँ लिन यो सम्मेलन को र्याप्चर बीच एक अस्थायी खाली लागि आवश्यक छ भनेर हामीलाई देखाउँछ कि घटना को वाष्प, र येशू देखिने फिर्ती। सुझाव छ कि यो छ घटनाहरू केही:
2 कोरिन्थी 5:10 - हामी सबै प्रत्येक उहाँले यो जीवन मा गरेको छ के, राम्रो वा खराब प्राप्त हुन सक्छ कि, ख्रीष्टको न्यायआसनसामु देखा पर्छ लागि
जी uds शब्द ख्रीष्टको न्यायआसनसामु हामी सबै एक दिन खडा र हाम्रो कामहरू लागि räkenskab गर्नेछ भनेर हामीलाई सिकाउँछ। को रिडिम लागि हो र त्यो एक अदालतले साम्राज्यको 1000 वर्ष पछि ठूलो सेतो सिंहासन मा न्याय संग भ्रमित गर्न। यो अदालत लागि ग्रीक शब्द "Bema" छ, र यसैले "Beema न्याय" भनिन्छ।
1 कोरिन्थी 4:5- तल्लो त्यसैले कुनै न्याय prematurely, प्रभु आउँछ अघि। उहाँले अन्धकार लुकाउँछ रूपमा प्रकाश र मनको विचार र मनसाय प्रकट गर्नुपर्छ, र त्यसपछि प्रत्येक परमेश्वरको आफ्नो प्रशंसा पाउनेछ
यो अदालत तुरुन्तै जो सभा पृथ्वीमा ख्रीष्टसित रिटर्न जब तिनीहरूले पहिले नै आफ्नो इनाम modtaga ख्रीष्टको न्यायआसनसामु भएको भन्ने हो, upprycklsen बाँधिएको मा लिन्छ।
एन Ågot यो अदालत तत्काल मा स्थान लिन र्याप्चर सम्म गाँठ कि bekräfter रूपमा पूर्ण बल सभा प्रतिनिधित्व 24 प्राचीन, छन्। तिनीहरूले टाउको मा दिर्हाम को, परमेश्वरको सिंहासन वरिपरि ठाउँमा छन्, र येशू प्रकाश अध्याय6मा पहिलो छाप खण्डन कि पहिले, संकष्टकालको समयमा प्रभु सेवा गर्न तयार
24 एल्डरहरूले मण्डलीको प्रतिनिधित्व भने, यो दुई कुरा हो। र, र पहिलो जूरीको फैसला अघि र पहिलो घोडा उद्धार गरिनेछ अघि र्याप्चर र 70th årsveckans शुरुवात बीच आवश्यक समय मा, मण्डलीको पहिले नै स्वर्गीय मा स्थानमा छ।
राष्ट्रहरूले र अन्यजाति को न्याय
डी यसलाई र्याप्चर र येशूको देखिने फिर्ती बीच एक अस्थायी खाली लागि भए अन्यजातिहरूको को Omen असम्भव हुनेछ। कसरी अरू दुवै आफ्नो प्राकृतिक शरीर मा अझै पनि छन् जो असुरक्षित, विभाजित गर्न सकिन्छ सुरक्षित हुनेछ र विश्वासी पहिले नै जरैसमेत उखेलिने र शरीर को महिमा गरिएका थिए भने?
को र्याप्चर संकष्टकालको पछि हुन्छ भने बस मिलेनियम अघि मान्छे विभाजन कुनै आवश्यकता पाउन। येशूले जैतुन डाँडामा मा खुट्टा सेट गर्दा हामी पहिले देखि नै र्याप्चर जडानमा एक uppdelining हुनेथियो।
मिलेनियम को जनसंख्या
एम EOPLE संकष्टकालको समयमा सुरक्षित छन् जो मिलेनियम आफ्नो प्राकृतिक शरीर जानेछ। यी मान्छे, काम गर्नेछ घरहरू बच्चाहरु निर्माण र छ। हामी सहस्राब्दी जान अघि, त्यहाँ फेरि धेरै मानिसहरू पृथ्वीमा संकष्टकालको अन्तमा विपरीत, जब मानिस Ophir को सुन भन्दा बढी दुर्लभ हुनेछ? (छ 13: 9-12)
मा जहाँ यहूदी र अन्यजाति भएका छन् उमेर एक शरीर इजरायल संग कार्यक्रम जारी राख्न प्रभु गर्न समय खाली आवश्यक। वर्ष को 70th र अन्तिम हप्ता प्रभु फेरि यहूदीहरूले र Israeli राष्ट्र यसको ध्यान राख्नु हुनेछ जब समय छ।
पृथ्वीमा församlingenstid अन्त बाइबलीय भविष्यवाणीहरू मात्र होइन तर र्याप्चर र येशूको देखिने फिर्ती बीच एक आवश्यक खाली को अभिव्यक्ति पूरा। दुवै ख्रीष्ट 24 प्राचीन, राष्ट्रका न्याय, मिलेनियम र इस्राएलका लागि प्रभु कार्यक्रम जनसंख्याको न्यायआसनसामु छ, र यो सुझाव।
वी पर्खने समय बस्ने मा। तबसम्म र आशाले मा प्रभु चाँडै हामीलाई घर उहाँलाई कल। हुनेछ म एकदम हामी प्रभुको चिसो, स्वर्गीय बिगुल र एउटा दूत पुकारा अनुभव गर्न अनुग्रह हुनेछ भनेर चुनिएको पुस्ता हो कि मेरो विश्वास दृढ छु।
मण्डलीको पेन्तिकोसमा आत्मा परमेश्वरको Outpouring मा यसको सुरुवात भयो, र मण्डलीको र्याप्चर संग समाप्त हुनेछ। यसलाई चाँडै हाम्रो छुटकारा आउँदै लागि, हाम्रो टाउको उठाउन उच्च समय छ।
त्यहाँ पुरानो नियमको वा नयाँ नियममा बस कुनै पदहरू चर्च संकष्टकालको अवधि मार्फत जानेछ, वा चर्च एटिक्राईष्ट विरुद्ध सामना गर्न अनुहार खडा गर्नुपर्छ भनेर सुझाव छ।
कष्ट "याकूबको समस्या" (Jer30: 7) भनिन्छ, तर "मण्डलीको वा चर्च दुःखको" भनिन्छ कहिल्यै छ।
गब्रिएल स्वर्गदूतले दानियललाई गर्न घोषणा 70 हप्ता तपाईंको मान्छे (यहूदीहरू) मा र तपाईंको पवित्र शहर (यरूशलेम) मा निर्धारित थिए। चर्च यहाँ उल्लेख गरिएको छैन। दान 9:24
चर्च पहिलो 69 हप्तामा कुनै भाग थियो, र अन्तिम र 70th हप्ता भाग हुनेछैन।
प्रकाश र्याप्चर अध्याय4मा हुन्छ: कष्ट अवधि अध्याय 6-19 द्वारा वर्णन गरिएको छ जो 1। पहिलो छाप भङ्ग अघि मण्डलीको प्रतिनिधित्व 24 प्राचीनहरूले स्थानमा छ।
यस इलाकाका प्रकाश को पहिलो तीन अध्याय बीस पटक उल्लेख गरिएको छ, तर अध्याय4र 19 को बीच उल्लेख कहिल्यै छ।
कष्ट अवधि पनि "क्रोधको दिन" भनिएको छ (Zeph 1:15) बाइबल मा, तर येशूले क्रोध ग्रस्त हामीलाई नियुक्त गरेन। (1 बिहिबार 5: 9), तर (1 बिहिबार 1:10) "क्रोध" हामीलाई बुझाइएको
कष्ट अवधि बाइबलमा प्रभुको दिन (Zeph 1:15) भनिन्छ। तर 1 थिस्सलोनिकी 5: 2-3 प्रभु (संकष्टकालको) को दिन रात चोर रूपमा हुनेछ भनेर भन्छन्। मान्छे (बेग्लै विश्वास) भन्न जब, "शान्ति र सुरक्षा," त्यसपछि (बेग्लै विश्वास) विनाश संग रूपमा अचानक दुखाइ एक गर्भवती महिला मार्फत आउछ मारा, र तिनीहरूले (को बेग्लै विश्वास) उम्कन छैन। यो कष्ट को disbelievers आइपर्नेछन् भन्ने कुरा छ कि स्पष्ट छ, तर यो विश्वासी र सुरक्षित समावेश गर्दैन।
हामी र्याप्चर (1 थिस्सलोनिकी 4:18) को कुरा संग प्रत्येक अन्य सांत्वना हुनेछ। त्यहाँ चर्च भाग वा कष्ट domstid सबै मार्फत जानेछ भन्छन् कि शिक्षामा कुनै सान्त्वना छ।
येशूले चर्च संरक्षण, र चाहन्थे कि मा फिलाडेल्फिया चर्च प्रतिज्ञा "सारा संसार मा आउन र परीक्षण गर्न आफ्नो मान्छे ल्याउन पर्छ जो प्रलोभन, को घण्टा आउट उद्धार।" (प्रका 3:10) परमेश्वरले कष्ट अवधि बाहिर विश्वासी मण्डलीको जोगाउने प्रतिज्ञा गर्नुभएको ।
हनोक बाढी अघि स्वर्ग पुगियो थियो र नूहसित जलप्रलयबाट मार्फत संरक्षित थियो जस्तै संकष्टकालको र इस्राएलका अवशिष्ट संकष्टकालको मार्फत संरक्षित गर्न अघि विधानसभा raptured गरिनेछ।
धार्मिक गएको छ परमेश्वरको सदोम र गमोराको न्याय छैन लट शहर देखि टाढा थियो अघि सक्ने एउटै बाटो मा, परमेश्वरले यस संसारको न्याय गर्न सक्दैन। (1 उत्पत्ति 19:16)
उहाँले आग्रह गर्दा येशूले कष्ट अवधि बताउनुभयो: "। सधैं Vaka र आउन र मानिसको पुत्र अघि खडा सबै कुराहरू भाग्न बलको लागि प्रार्थना" (लूका 21:36) उहाँले राख्न इच्छुक छैन येशूले केही माग्यो कुनै अर्थमा बनाउँछ।
मलाकी 3:18 प्रभु (आगमन मा) हामीलाई परमेश्वरको सेवा गर्ने एक र उहाँको सेवा गर्न बीच धार्मिक र दुष्ट बीच फरक देखाउन हुनेछ भन्छन्। पूर्व-trib प्रभु आफ्नो मण्डलीको, त्यसपछि हामी आउन धर्मी र अधर्मी बीचमा न्याय गर्न उहाँलाई साथ भेला गर्न आउँछ भन्ने विश्वास गर्छन्।
को र्याप्चर मा येशूले आउँछ लागि (: 16-17 1 थिस्सलोनिकी 4) उहाँले कष्ट को अन्त्यमा आउँदा आउँछ उहाँको चर्च संग आफ्नो मण्डलीको। (1 बिहिबार 3:13)।
येशूले आमन्त्रित कि सात चर्च गर्न पत्र मा "आत्मा मण्डलीलाई के भन्छ सुन्न।" तर ठूलो कष्ट मा, चर्च मा पवित्र आत्मा छेउमा बसे छ कि पछि तिनी यसो भन्छन्: "कान छ जसले, उहाँलाई सुन्न गरौं" (प्रकाश 13: 9) उहाँले त्यहाँ आत्मा सुन्न बोल्छ र कुनै चर्च छ जहाँ सभा, omits संकष्टकालको मार्फत जानुहोस्।
एटिक्राईष्ट को सन्तहरू संग युद्ध गर्न, र तिनीहरूलाई पराजित गर्ने शक्ति छ। (प्रका 13: 7)। तर यसलाई यहाँ भनिएको यो सहर हुन सक्दैन। येशू आफैले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ "helvets बंदरगाहों को शक्तिशाली मण्डलीलाई कहिल्यै हुनुपर्छ।" (मत्ती 16:18)
प्रकाश 20:4- अनि म thrones देखे, र तिनीहरूले न्याय गर्न अख्तियार दिइएको थियो मा बसे। र म तिनीहरू येशूको testified थिए किनभने beheaded गर्ने थियो गरिएको र परमेश्वरको वचन र जनावरको र आफ्नो छवि उपासना थिएन र मा निधारमा वा हात आफ्नो चिन्ह प्राप्त प्राण देखे। तिनीहरूले बस्ने र एक हजार वर्ष ख्रीष्टसित शासन गरे। तर मरेको बाँकी हजार वर्ष समाप्त थिए सम्म फेरि बस्थे। यो पहिलो पुनरुत्थान छ।
डी प्रकाश 20 मा पहिलो पुनरुत्थान:4पनि धेरै चर्चा फिर्ता र निस्कने भएको छ भन्ने कुरा छ, र म हामी यो पढ्दा बाइबल वचन नै को लागि कुरा ठान्छन्। हामी पुनरुत्थान बताइएको कि पद मा देख्न सक्नुहुन्छ, र यो पहिलो पुनरुत्थान छ। त्यसपछि हामी हेर्न सक्नुहुन्छ, र कष्ट पछि शहीदको पुनरुत्थानको बारेमा कुरा त्यहाँ छ। तर यो पहिलो पुनरुत्थान मात्र कष्ट देखि शहीदहरूको हुन्छन् त भन्ने हो? होइन, को पाठ्यक्रम छैन।
तेस्रो दिन येशूको पुनरुत्थानको। येशूको मुक्ति दुखाइ किनभने सबै होहल्ला लागि टोली छ। उहाँले लगभग 2000 वर्ष पहिले होस्ट सबै पाप मिलाप थियो भने, हामी मृत देखि पुनरुत्थान थियो थिएन। येशूको पुनरुत्थान मेरो पुनरुत्थानको छ।
जीएल नियममा केही मानिसहरू पुनर्जीवित हिब्रू 11:35 येशूको मृत्यु र पुनरुत्थान संग जडान देखा पर्यो जीएल नियमका देखि विश्वासीहरूलाई tid.-। मत्ती 27: 52-53
अन्तिम अघि मसीही सभा र्याप्चर र इस्राएल र यरूशलेममा लागि वर्षको 70 हप्ता हुन्छ।
संकष्टकालको अन्त्यमा दुई साक्षी को पुनरुत्थानको - 11:12 अप
को जीएल नियमका विश्वासीहरूको बौरिउठाइ र बस इस्राएलका राज्यको पुनर्स्थापना अघि ठाउँ लिन्छ जो कष्ट, को शहीदको। - दान 12:13, यूहन्ना 11:24, 20: 4
डी एट यो श्रृंखला भाग चार छ - म पहिले निम्न पोस्ट लिखित छन् जो कष्ट, अघि येशूको फिर्ती:
Counterarguments ओग मुद्दाहरू
ई संकष्टकालको वा वर्ष को पछिल्लो सप्ताह अघि मण्डलीको र्याप्चर कि - - प्रभावित जो 1800 देखि प्रसिद्ध Margeret म्याकडोनाल्ड भविष्यवाणी देखि आंशिक पूर्व-tribs इतिहास छ हामीले पूर्व-trib सिद्धान्त कुरा गर्दा अक्सर छलफल छन् भनेर मुद्दाहरूको NE आफ्नो धर्मशास्त्र मा जन Darby।
किनभने हामी त नयाँ सिद्धान्त रूपमा प्रस्तुत भएको थियो जो, र जसले पहिले चर्च इतिहास सिकाउनुभएको छैन गरिएको पूर्व-trib सिद्धान्त, कुरा गर्दा तिनीहरूले अक्सर प्रति तर्कको रूपमा प्रयोग मलाई लाग्छ दुवै अंक रोचक छन्। यो पोस्ट यी आपत्ति र प्रश्नहरूमा आधारित हुनेछ।
सबै भन्दा साधारण प्रति-तर्क
ई पूर्व-trib सिद्धान्त यसरी छ भन्दा साधारण argment को NE "यो प्रत्ययनीय हुन लागि यो धेरै नयाँ सिद्धान्त हो।" तर यो तर्क संग धेरै समस्या छन्। पहिलो यो बाइबल कि अन्त समय भविष्यवाणीहरूको समझ यी भविष्यवाणी घटनाहरू ठाउँ लिन भनेर समय अघि पहिचान वा प्रकट गर्दै छन्, सिकाउँछ भन्ने तथ्यलाई बेवास्ता छ।
दानियल अन्त समय खुलासा केही भविष्यवाणीहरू पुगेपछि उहाँले तिनीहरूलाई बुझेनन् कि प्रभु प्रतिक्रिया। प्रभु दानियल "यी शब्दहरू लुकेका र समय को अन्त सम्म छाप रहने छन्।" भनेर जवाफ दिए (दान 12: 9)
भविष्यसूचक वचन समझ
एन अर्को शब्दमा, हामी त हामी पनि भविष्यसूचक वचन उचित समझ प्राप्त, बाइबलीय भविष्यवाणी सर्तहरू पूरा प्रभुको वचन हेर्न छ।
यो चर्च को इतिहास गोग को राजकुमार एक दिन मुस्लिम देशहरूमा एक गठबन्धनको साथ इजरायल आक्रमण गर्नेछ बताइएको जो इजकिएल 48 मा भविष्यवाणी बारेमा प्रश्न गरिएको छ कि आश्चर्य छैन। धेरै हजार वर्षसम्म इस्राएलका अवस्थित र भविष्यवाणी अवस्थित कि गर्दैन, सिर्जना गरेको भ्रम देश मा आक्रमण वार्ता कि गरेनन्।
अन्य भविष्यवाणीहरू हाम्रो दुवै इतिहासमा तर पनि हामी हाल शताब्दीयौंदेखि मा अनुभव गरेका छन् कि प्राविधिक विकास, अघि बस्ने मानिसहरूलाई रहस्य भएको हुनुपर्छ भन्ने कुरा जोडिएको छन्। एक प्रकाश अध्याय 11, जहाँ आफ्नो मृत्यु र पुनरुत्थानको दुवै, सारा संसार द्वारा साक्षी गर्न दुई साक्षी कसरी व्याख्या सक्छ? वा जीवित आउँछ र सेखी शब्दहरू बोल्छ कि जनावरको छवि?
हामी यसको पूरा समय जाँदा अर्को शब्दमा, भविष्यसूचक वचन सही समझ छ गर्नेछ।
बाइबल भविष्यवाणी Spiritualising
डी एट भविष्यसूचक वचन भागहरु, हामी यसको पूरा हेर्न सम्म व्याख्या गर्न लुकेका र कठिन भएको छ कि वास्तवमा चर्च इतिहास धेरै विशेषता छ भन्ने कुरा छ।
सा.यु. 430 मा। चर्च बुबा अगस्टिनको पुस्तक श्रृंखला "परमेश्वरको शहर", आफ्नो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण को एक र inflytelsesrika काम गर्दछ मानिन्छ जो लेखे। अगस्टिनको spiritualized बाइबल भविष्यवाणी र सहस्राब्दी (मिलेनियम) पहिले नै थालेका र येशूको दोस्रो आगमनमा सम्म जारी थियो थिए तर्क।
बाइबलीय भविष्यवाणीहरूमा, अर्को शब्दमा बुझे थियो गर्न वा शाब्दिक व्याख्या। यो चर्च को इतिहास र अर्को हजार वर्षसम्म तिनीहरूलाई förtolkade बाटो चिनो थिए कि बाइबलीय भविष्यवाणीहरू यस spiritualization थियो।
प्रारम्भिक चर्च पुर्खाहरूले
एम हामी एक हामी फेरि हेर्न र तिनीहरूलाई शाब्दिक व्याख्या गर्न थाले जहाँ बाइबलीय भविष्यवाणी "पुनरुत्थान" पायो अघि एक, यो प्रेरितहरूको साथै, त्यसैले पनि पूर्व-trib सिद्धान्तलाई आधार छ जो उनको शिक्षा, को निर्माण ब्लक को प्रारम्भिक पिता थियो तैपनि चर्च को इतिहास देखाउँछ । यो पनि लगभग सबै प्रारम्भिक चर्च पुर्खाहरूले premillennialism प्रचार गर्ने एक तथ्य छ।
जस्टिन Martyr निकै चर्च गरेको धर्मशास्त्र तैयार गर्न मदत जो (पनि जस्टिन, दार्शनिक 110-165 e.Kr रूपमा चिनिने), पनि त्यो जो कोहीले केहि प्रचार भने, उहाँले एक heretic थियो सुझाव दिए कि हालसम्म भयो। (1)
बाइबलीय भविष्यवाणी को पुनरुत्थान
ई हामी सुधार पायो मा युरोप मा मध्य युग को आध्यात्मिक अन्धकारको धेरै वर्ष पछि, र बिस्तारै हामी förtolkningen शाब्दिक थियो जहाँ बाइबलीय भविष्यवाणी को पुनरुत्थान हेर्न थाले।
यो "पुनरुद्धार" को Puritans बीचमा गम्भीर थाले, को र्याप्चर समझ छिटो नेतृत्व जो 1560s, वरिपरि बेलायतमा कि देखा एक reformatory आन्दोलन येशूको देखिने आउन एक अलग घटना थियो।
आफ्नो नेता थियो जो एक प्युरिटानहरूको चर्च, मैसाचुसेट्स आध्यात्मिक जीवनमा ठूलो प्रभाव थियो जसले ओमान र विद्वान को संन्यासी "आगो को अन्तिम खण्डमा भाग्न आकाशमा समात्नु" थिए तर्क "Mather वृद्धि"। (2)
एक ऐतिहासिक विकास
फा N अर्डर पूर्व-trib सिद्धान्त एक "नया सिद्धान्त" र केवल यूहन्ना Darby शिक्षा आधारित छ कि खण्डन गर्न, निम्न एक utplock एक ऐतिहासिक विकास मण्डली पिता र आफ्नो शिक्षामा पूर्व-trib विचार व्यक्त गरेका छन् जो मानिसहरू द्वारा कथन छ चर्च इतिहास द्वारा।
यसको मतलब मानिसहरू पूर्व-trib सिद्धान्त सिद्धान्त को 1800 को अघि प्रचार छैन संकष्टकालको अघि, वा येशूको फिर्ती, यो बस छैन साँचो हो कि भन्न जब। यो शिक्षा यूहन्ना Darby, यहाँ मानिसहरू र चर्च पुर्खाहरूले यी विचार uttered को केही उदाहरण हुन् लामो अघि अस्तित्व भनी देखाउने:
Clement, 23 को पहिलो Epistle, वर्ष 96 ई वरिपरि लेखिएको थियो - फिलिप्पी4रूपमा Clement हुन सक्छ:3रोममा चर्च मा एक नेता रूपमा बुझाउँछ। " एक सत्यको, चाँडै र अचानक उहाँको पूरा गर्नेछ गरिनेछ , धर्मशास्त्रमा लेखिएको साथै, यसो भन्दै साक्षी भालु रूपमा" Seedily आउनेछ, र tarry छैन ", र" प्रभु अचानक, उहाँको मन्दिरमा आउनेछन् लागि पनि पवित्र जसलाई तिमीहरू हेर्न "।
Clement को दोस्रो Epistle मा, हामी पढ्न: " हामी प्रभुको देखापर्दा दिन थाहा किनभने प्रेम र धार्मिकता परमेश्वरको राज्य अपेक्षा हामीलाई हरेक घण्टा गरौं, ।"
Irenaeus 130-202 ई - अनि त्यहाँ अघि, - आफ्नो treatise मा "विरुद्ध Heresies 5:29" लेख्छन् अन्त मा चर्च अचानक यसबाट समात्नु गरिनेछ, यो भने, "त्यहाँ कष्ट हुनेछ जस्तै शुरुवात देखि भएको छैन रूपमा, न सोध्न गर्नेछैनन्" ।
को Didache, 70-180 ई - अध्याय 16, धारा 1: आफ्नो जीवन भन्दा सचेत हुनुहोस्; आफ्नो दीपक छैन निभाउँछ गर्न, वा तपाईंको कम्मर ungired, तर, तयार होस् तपाईं कुन हाम्रो प्रभु आउनेछ घडी थाह लागि होइन। "
Tertullian 155-245 ई - तर एक अमरीकी छिटो-आउँदै हाम्रा प्रभु को आगमन छ के ! अब सबै स्वामित्वमा, अब अत्यधिक, एक विजयोल्लास एक उच्च अब "
"तपाईं परमेश्वरको धन्यवाद दिन नगर्नुहोस्, तपाईं आफैलाई बधाई छैन,: Cyprian, 200-258 विज्ञापन, जसमा उहाँले अन्त पटक र ठूलो कष्ट वर्णन" Cyprian को ग्रंथ "मा निम्न लेखे एक प्रारम्भिक प्रस्थान तपाईंलाई लगिएको छन् र आसन्न छन् त्यो shipwrecks र प्रकोप छुटकारा ? हामीलाई कुन हामीलाई प्रत्येक हामीलाई hense snatches कुन आफ्नै घर, गर्न प्रदान दिन अभिवादन गरौं, र हामीलाई संसारको पासोहरू मुक्त।
Hermas को गोठाला (फस्टाए 140 ई) को एपोस्टोलिक पिता को एक मानिन्छ थियो ख्रीष्टियान लेखक पनि थिए। महासङ्कष्टको बारेमा निम्न यस्तो लेखे: " तपाईं आफूलाई अब तयार भने, र आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले पश्चात्ताप र प्रभु बारी, तपाईं यसलाई भाग्न सम्भव हुनेछ " (6)
Victorinus (राम्रो वर्ष 270 विज्ञापनमा ज्ञात र 303 ई मृत्यु) प्रकाश पुस्तकका मा टीकाओं लेखे, र 6:14 अप बारेमा निम्न लेखे - "अनि एउटा मुठा अप रोल्ड छ रूपमा आकर्षित गरे संग स्वर्गमा। को स्वर्ग लागि चर्च लगिएको गरिनेछ त्यो, दूर रोल्ड छ। "हरेक पर्वत र स्थानहरू fromtheir हटाइएको टापुहरूमा अनि घनिष्ठ अन्तिम सतावट मा सबै तर स्थानहरू fromtheir प्रस्थान; कि, त्यो राम्रो, सतावट बच्न खोजिरहेका हटाइनेछ छ।
· Ephrem सिरियाली (306-373 ई) - " लागि सबै संन्यासी र परमेश्वरको Elect भेला, आउन छ, र प्रभु लगियो छन् भनेर संकष्टमा पहिला तिनीहरूले overwhelm छ त्यो भ्रम हेर्न नत्र किनभने हाम्रो पाप "(को अन्तिम टाइम्स, एटिक्राईष्ट र विश्व को अन्त मा को विश्व, Ephrem को सिरियाको, 373 AD (7)
जन केल्विन - चर्च सुधारवादी को 1500s मा बस्ने। " हरेक दिन उहाँलाई आशा तयार हुनुहोस्, वा बरु हरेक क्षण उहाँलाई revieve लागि, आफूलाई तयार पकड" "उहाँले उहाँले हामीलाई n सम्म फिर्ता हुनेछ त्यो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, हामीले गर्नुपर्छ हरेक क्षण मा।" "आज हामी बुझ्न चेतावनी हुनुपर्छ ख्रीष्टको आसन्न फिर्ती। "
": मार्टिन लुथर रूपमा निम्नानुसार कुरा म त्यो कुन हो सबै चिन्ह, havealready देखा अन्तिम दिन लिनुअघि गर्न विश्वास गर्छन्। हामीलाई त्यो ख्रीष्टको आउनुहुने टाढा बन्द छ लाग्छ छैन गरौं ; हामीलाई उठाएर पूर्वसूचना संग हेरौं; हाम्रो उद्धारक गरेको तिर्सना र हँसिलो मन संग आउँदै आशा गरौं। "
आफ्नो पुस्तकमा, "अन्त टाइम्स भविष्यवाणीको बुझ्ने पावलले एन Benware, प्रशंसित त्यहाँ जो येशूको देखिने फिर्ती अलग छ कि एक र्याप्चर सिकाउन सुरु भयो 1600 र 1700s मा धेरै थिए। (3)
पत्रुस Jurie, आफ्नो पुस्तक सिकाइएको ख्रीष्टको सबै सन्तहरू बांधन र आरमागेडोन अघि स्वर्ग फर्कन हावा मा आउनेछ भनेर 1687 मा "चर्च को छुटकारा पुग्दै"। उहाँले एक गोप्य र्याप्चर प्रभु महिमा र शक्ति गरेको आउँदै पहिला बताउनुभयो।
दुवै फिलिप Doddridge गरेको र NT (1738 र 1748) मा जन गिल टिप्पणीहरू को र्याप्चर र प्रभु फर्कन imminenta कि सर्तहरू प्रयोग गरेर।
एक Babtist नेता जन्म र उहाँले eschatology सिकाइएको रूपमा पूर्व-trib विचार को मोर्गन अभिव्यक्ति दिनुभएको 1740 मा 1761. मा संयुक्त राज्य अमेरिका जाने अघि वेल्स सेवा थियो मोर्गन एडवर्ड्स।
जेम्स Mcknight (1763) र थोमस स्कट (1792) धर्मी परमेश्वरको न्याय भन्दा थियो जब सम्म उनि सुरक्षा मा हुनेछ जहाँ स्वर्गमा, लगिनेछ भनेर सिकाउनुभयो (9)
जन Darby - 1800-1882
जे ohn Darby लण्डन जन्म, र उहाँले प्रणालीबद्ध उहाँले विषयमा अध्ययन पछि नै राख्नु रूपमा, पूर्व-trib सिद्धान्त मा एक ठूलो प्रभाव पार्न गर्ने एक थियो।
Darby त्यहाँ इस्राएल र मण्डली बीच स्पष्ट भिन्नता हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा, र उहाँले प्रभु केही antecedent वर्ण, बिना कुनै पनि समयमा फिर्ता आउन सक्नुहुन्छ भन्ने हो जो येशूको imminenta 'फिर्ती, को विश्वस्त भए। 1827 मा, त्यो नयाँ Theological सिस्टम "dispensationalism" को रूपमा जानिन्छ चिनारी भनेर केही मौलिक सिद्धान्त विकास भएको थियो।
Margeret MacDonald भविष्यवाणी
एन Ågot स्पर्श गर्न महत्त्वपूर्ण छ र धेरै चर्चा र मिस समझ को संविधान छ, Darby शिक्षामा र धर्मशास्त्र आकारको छ जो कि मानिन्छ छ Margeret MacDonald भविष्यवाणी ठीक छ। विचार "को अकल्पनीय पूर्व-Trib मूल 1973 मा डेव Macpherson द्वारा 70s पहिले नै प्रदर्शन भएको थियो (5)
डेव Macpherson गलत छ पूर्व-trib सिद्धान्त लागि संविधान छ तर्क धेरै विशेषता भनेर राय थियो।
Margeret, त्यसपछि 15 वर्ष पुरानो, स्कटल्याण्ड मा एक charismatic प्रार्थना बैठक मा भाग थियो - 1830. त्यहाँ मा, त्यो भविष्यवाणी र त्यो र्याप्चर संकष्टकालको पहिले ठाउँ लिन भनेर घोषणा जसमा एक भविष्यवाणी दिइएको थियो।
जे आफ्नो संपूर्णता मा भविष्यवाणी गर्न एजी लिंक यो तपाईं आफैलाई यो न्याय गर्न सक्नुहुन्छ। दुर्भाग्यवश, पाठ स्वीडिश मा अनुवाद भएको छैन:
यहाँ जो म रोचक छ कि पाठ हाइलाइट गर्नुभएको भविष्यवाणी एउटा अंश हो:
" एक awfully खतरनाक स्थितिमा राम्रो को SAW मान्छे मा, जाल र entanglements, प्रयास गर्न बारेमा, र धेरै घेरिएको धोका गर्न बारेमा र अवस्थामा। अब दुष्ट सम्भव भए धेरै चुन्नु धोका हुनेछ त्यसैले, सबै शक्ति र संकेत र झूट विचित्रताहरू संग प्रकट हुनेछ। - यो हामीलाई प्रयास गर्न छ कुन आगोको परीक्षण छ। - यो पर्जिङ र येशूको शरीर को असली सदस्यहरूको शुद्ध लागि हुनेछ; तर ओह यो आगोको परीक्षण हुनेछ। हरेक प्राणी धेरै केन्द्र हल्लाइन्छ गरिनेछ। शत्रु हामी विश्वास गरेका हल्लाउ प्रयास गर्नेछ - तर वास्तविक विश्वासको परीक्षण र प्रशंसा र महिमा आदर पाउन हुनेछ। के परमेश्वरको छ खडा हुनेछ तर केही छैन। को Stony-जमीन सुनेर प्रकट हुने - म प्रायः रात saidthat धेरै इच्छा मोम चिसो प्रेम, र अब गलत ख्रीष्टको भयानक दृष्टि यो पृथ्वीमा देखेको गरिनेछ देखि, विफल पार्न। र हामीलाई जीवित ख्रीष्टले तर केही बहकाउन शत्रु को यो भयानक प्रयास पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ - वा अधर्म सबै deceivableness उहाँले काम गर्नेछ छ - उहाँले हरेक कामको लागि परमेश्वरको सत्य हरेक भाग र एक अनुकरण लागि प्रति-पार्टी willhave आत्मा। आत्मा र त्यो purified हुन सक्छ र भरिएको परमेश्वरको संग, चर्च मा खन्याइएको गरिनेछ गर्नुपर्छ - परमेश्वरको आत्मा गर्दछ र बस अनुपात मा,
यो विशेष कुन माध्यम ती कसले मानिसको पुत्र अघि खडा योग्य गणना गरिनेछ पारित गर्न हो परीक्षण, को प्रकृति। त्यहाँ बाहिरी परीक्षण हुनेछन् पनि, तर 'Principally प्रलोभनको tis। यो आत्मा को outpouring द्वारा मा ल्याइएको हो, र आत्मा खन्याइएको छ रूपमा अनुपात मा सही वृद्धि हुनेछ। चर्च को परीक्षण एटिक्राईष्ट हो। यसलाई हामी राखिएको गरिनेछ त्यो आत्मा भरिएको भइरहेको हो। अन्त उद्धरण।
आपत्ति र counterarguments
हे पु तपाईं यो भविष्यवाणी को अर्थ बुझ्न सक्छौं, तपाईं यसलाई Margeret देखि यो भविष्यवाणी सन्दर्भमा एकदम स्पष्ट counterarguments छ भनेर बुझ्न, र बाटो मा जन Darby गरेको धर्मशास्त्र प्रभावित हुनेछ:
पहिले, कि भविष्यवाणी र यूहन्ना Darby गरेको प्रारम्भिक पुस्तकहरू बीच अवस्थित फरक छ। भविष्यवाणी वर्ष 1830 मा आयो, तर पहिले नै धेरै वर्षअघि Darby संकष्टकालको अघि प्रारम्भिक र्याप्चर बारेमा पुस्तक लेखे। यो भविष्यवाणी द्वारा रंग गरिएको थियो Darby गर्न यसरी असम्भव छ।
कष्ट शुद्ध आगो
फा कान दोश्रो, यो छ कि यो असंभव भविष्यवाणी को धेरै पदार्थ हो। तपाईंलाई रुचि भने, म पढ्न र लेखिएको छ के बुझ्न सक्छौं, तब वहाँ भविष्यवाणीमा केही Margeret न सोचा वा एक पूर्व-trib व्याख्या भविष्यवाणी सुझाव हो। Margeret "भविष्यवाणी" निम्न सहित:
"यसले हामीलाई प्रयास गर्न छ कुन आगोको परीक्षण छ। - यो पर्जिङ र येशूको शरीर वास्तविक सदस्यहरूको शुद्ध लागि हुनेछ; तर ओह यो आगोको परीक्षण हुनेछ
यो विशेष प्रकृति कुन माध्यम ती कसले मानिसको पुत्र अघि खडा योग्य गणना गरिनेछ पारित गर्न हो परीक्षण।
चर्च को परीक्षण एटिक्राईष्ट हो। यसलाई हामी राखिएको गरिनेछ त्यो "आत्मा भरिएको भइरहेको हो
Margeret कष्ट, वा परीक्षण समय मण्डलीको सफा छ, र कष्ट सभा एटिक्राईष्ट देखि आउनेछ मार्फत जान हुनेछ कि लेख्छन् गर्दा, त्यसपछि यो कष्ट अघि येशूको फिर्ती गर्न केही छ कि स्पष्ट पोस्ट-trib विचार तर केही छ गर्न।
तेस्रो, भविष्यवाणी साँच्चै सान्दर्भिक। यो मुद्दा सिद्धान्त बाइबलीय वा छैन कि छ महत्त्वपूर्ण छ, र यो परमेश्वरको वचन निर्णय गर्न अर्को शब्दमा, छ।
र्याप्चर छ "आसन्न" वा सम्बन्धित
ई हामी र्याप्चर कुरा गर्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग को पूर्वोत्तर, यसलाई जसको अर्थ यो सम्बन्धित छ, र केहि तपाईं कुनै पनि समयमा हुन आशा थियो "आसन्न," छ भन्ने छ।
एउटा घटना वा अवस्था उत्पन्न गर्न बारेमा हो भनेर - शब्द "आसन्न" को अर्थ "गुणस्तर वा उत्पन्न गर्न बारेमा हुनुको अवस्था" छ। त्यसैले हामी प्रभु "imminenta" वा अन्त समय भविष्यवाणीहरू जडानमा सम्बन्धित फिर्ती को कुरा गर्दा, त्यसैले यसलाई बस चर्च येशूको फिर्ती कुनै पनि antecedent वर्ण, बिना कुनै पनि समयमा देख्न सक्छन् भन्ने हो।
"प्रतीक्षा" शब्द यस बाइबल पदमा जसको अर्थ शब्द "anamenein" बाट अनुवाद गरिएको छ "कसैले आइपुग्नका लागि प्रतीक्षा गर्न।" यो प्रतीक्षामा छ जो व्यक्ति को "सक्रिय" मनोवृत्ति र भूमिका देखाउँछ।
र्याप्चर - एक अहस्ताक्षरित घटना
डी मण्डलीको र्याप्चर गर्न एट तरिका मात्र "आसन्न" र अहस्ताक्षरित हुन सक्छ, यो कष्ट वा वर्ष को पछिल्लो हप्ता पहिले ठाउँ लिन पर्छ भन्ने छ। अर्को शब्दमा, विधानसभा यसलाई अघि हुनेछ यो घटना ठाउँ लिन सक्छ कि सजग हुनुपर्छ भन्ने र्याप्चर, वा केही लिनुअघि हुनेछ भन्ने कुनै भविष्यसूचक संकेत।
चर्च केही साइन लागि प्रतीक्षा भने, त्यसैले त्यहाँ हुनेछ छैन, वा एउटा आवश्यकता हुन "निरन्तर प्रभुको फिर्ती लागि प्रतीक्षा गर्नुहोस्।"
टी बिरामी भएको र्याप्चर विपरीत येशूको देखिने फिर्ती "आसन्न" छ, त्यसपछि त्यहाँ केही प्रमाण वा घटनाहरू पूर्व येशूलाई जैतुन डाँडामा आफ्नो खुट्टा राख्न सक्छ हुनुपर्छ।
पहिलो, इजरायल हुन आफ्नो देशमा फिर्ता गर्नुपर्छ। एटिक्राईष्ट अगाडि कदम हुनुपर्छ, र हामी उजाड को abomination र जनावरको अनुभव छ। दुई अगमवक्ताहरू पनि 3.5 वर्ष समयमा अगाडि र भविष्यवाणी आउन पर्छ, र परमेश्वरको न्याय र क्रोध यो पृथ्वीमा खन्याइएको हुनुपर्छ। अन्तमा, हरेक राष्ट्र इजरायल विरुद्ध चालु गर्नुपर्छ र बाइबल आरमागेडोन भनिएको रूपमा हामीले यसलाई प्राप्त हुनेछ।
समर्थन शब्दहरू कमी
डी हामी सभा र्याप्चर कुरा गर्दा महत्त्वपूर्ण छ भनेर एट, तपाईं बस कुल कमी समर्थन शब्दहरू उपलब्ध, जो गरिरहन गर्नेहरूका लागि अनन्त जीवनको प्रतिज्ञा वा प्रतिज्ञा अधिरोहण र कष्ट दुःख समयमा आफ्नो जीवन दिन छ कि छ एटिक्राईष्ट गरेको सत्तारूढ समयमा शक्ति।
यो चर्च संकष्टकालको अवधि पार गर्न किस्मत थियो कि बाटो हुनेछ, प्रभु स्पष्ट तयार र यस बारे आफ्नो मण्डलीको चेतावनी थियो।
शब्द हामीलाई यस्तो आग्रह गर्छ
जी uds शब्द जो त्यसैले कुनै पनि antecedent क्यारेक्टर बिना एक साँचो घटना छ येशूको फिर्ती, को स्थिर आशाले छ लगातार हामीलाई भनिएको छ। यहाँ दुवै इशारा र हाम्रा प्रभु येशू स्थिर आशाले बस्न पर्छ चर्च आफ्नो मान्छे आउन भनेर हामीलाई देखाउन छन् पदहरू केही उदाहरण हुन्:
रोमी 13: 11-12 - तिमीहरू समय दुःखकष्ट, घडी आएको छ कि तपाईं निद्राबाट माथि उठाउनका लागि लागि के थाहा रूपमा, धेरै अधिक लिनुहोस् भनेर सबै पालन गर्छन्। अब हाम्रो मुक्तिको nearer हामी विश्वास गर्न आउँदा भन्दा छ। रात दिन नजिकै छ, टाढा खर्च गरिएको छ। त्यसकारण अन्धकारको काम बन्द डाली र प्रकाश को हतियार राख्न गरौं।
1 कोरिन्थी 1:7- भनी तिमीहरू त म हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रकाश लागि पर्खनुहोस्, कुनै उपहार मा पछि छन्।
फाइल 3:20 - स्वर्गमा हामी हाम्रो नागरिकता हुनेछ, र त्यहाँ हामी प्रतीक्षा र मुक्तिदाताको रूपमा प्रभु येशू ख्रीष्टको।
फिलिप्पी 4:5- आफ्नो gentleness सबै मानिसहरूलाई थाह होस्। प्रभु नजिकै छ!
1 थिस्सलोनिकी 1:10 - र आगामी क्रोध हामीलाई बचाउँछ जसले मृत्युबाट ब्यूँताउनुभयो, जसलाई आफ्नो पुत्रलाई स्वर्गबाट, येशू, प्रतीक्षा गर्नुहोस्।
जस्तालाई 2:13 - हामी अनमोल आशा र महिमाको देखिने ठूलो परमेश्वर र हाम्रो मुक्तिदाता येशू ख्रीष्ट को प्रतीक्षा गर्दा।
हिब्रू 9:28 - र उसलाई पर्खिरहेका छन् गर्नेहरूलाई सुरक्षित गर्न तर पाप सहन गर्न, बाहिर दोस्रो पटक प्रदर्शित हुनेछ।
हिब्रू 10: 37 - अहिले सम्म छोटो सानो हुँदा लागि, उहाँले जो आउन छ, र उहाँले ढिलाइ छैन।
याकूब 5:7- प्रभु नआउञ्जेल, प्रतीक्षा धैर्य त्यसैले भाइहरू।
याकूब 5: 8 - तिमीहरू पनि टिकाउ हुनुहोस् र प्रभुको आउँदै नजिकै छ लागि, आफ्नो हृदय बलियो बनाउँछ।
1 पत्रुस 4:7- सबै कुराको अन्त नजिकै छ।
यहूदा 1:21 - जबकि तपाईं अनन्त जीवन दिनुहुनेछ आफ्नो कृपा हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रतीक्षा, परमेश्वरको प्रेममा आफूलाई राख्नुहोस्।
3:11 अप - म चाँडै हुनेछ। कुनै एक आफ्नो मुकुट हुनेछ भनेर तपाईं के छ पकड।
प्रकाश 22:7- "अनि म चाँडै आउन हेर।
प्रकाश 22:20 - यी कुराहरू पुष्टि गर्छ जसले "। हो, म चाँडै आउन", भन्छन् आमिन, आउनुहोस्, प्रभु येशू!
त्यसैले यो हामीलाई सभा हुनुपर्छ भन्ने आशाले देखाउँछ कि बाइबल मा पदहरू केही थियो। प्रभुको फिर्ती सम्बन्धित र सभा को कुरा भनेर शब्द सधैं तयार गर्न आवश्यक छ। तिनीहरूले पूर्व संकेत बिना प्रभुको फिर्ती कुरा, र तिनीहरूले कष्ट तिनीहरूलाई सम्बन्धी बिना सान्त्वना र प्रोत्साहन प्रदान गर्नुहोस्।
Maranatha - हाम्रो प्रभु आए
1 कोरिन्थी 16:22 - भने कसैले परमप्रभु प्रेम गर्दैन, त्यो श्रापित गरिनेछ। Marana tha।
ई येशूको फिर्ती स्थिर आशाले बस्थे प्रारम्भिक मण्डलीको लागि बलियो तर्कको NE आपसमा अभिवादन गर्ने तरिका हो र पावलले पत्र मध्ये प्रयोग: Marana'ta।
शब्द Marana'ta अरमाइक छ र अर्थ "तपाईं छन् हाम्रा प्रभु, आउनुहोस्!" यो सभा इच्छा अभिव्यक्ति र प्रभु कुनै पनि समय आउन सक्छ भन्ने बुझाइ थियो। त्यसैले पावलले 1 मा बन्द अभिवादन लेख्छन् जब कोरिन्थी 16, उहाँले कसैले परमप्रभु प्रेम छैन भने, त्यो "अभिशाप" हुनेछ भनेर भन्छन्। शब्द क्रोधित अर्थ, र त्यसपछि "Marana tha," बाट श्राप प्रभुको आउँदै।
सम्मेलन प्रभु आउनेछ भनेर एक आशाले छ भने, तिनीहरूले एक प्रार्थना अनुरोध र दुवै येशूको फिर्ती लागि एक कल छ यो अभिवादन, प्रयोग गरेका थिए।
पावलले प्रभु लागि पर्खेको
हामी जो हामी बाँच्न समय व्याख्या कुरा गर्दा, र हामी प्रभुको फिर्ती अनुभव हुनेछ कि पुस्ता हो भन्ने विश्वास गर्छन्, यो हामी कष्ट भविष्यसूचक वर्ण तुलना किनभने छ। किनभने संकेत हामी प्रभुको दिन आउँदै छ भनेर गर्न सक्नुहुन्छ, र जन्म pangs वृद्धि।
अर्को शब्दमा, आन्तरिक र बाह्य संकेत मा जो 70th र वर्ष को अन्तिम हप्ता आउँदै छ पनि मण्डलीको र्याप्चर संकेत, र यसरी।
को एपोस्टोलिक पिता
जे Esse वन रजत, आफ्नो पुस्तकमा लेखे "प्रभुको फर्काउनुहोस् एपोस्टोलिक पिता को यस्तो लेखे:" तिनीहरूले आफ्नो समय मा प्रभुको फिर्ती अपेक्षा। तिनीहरूले प्रभु एक सावधान मनोवृत्ति छ तिनीहरूलाई सिकाउनुभयो थियो रूपमा समय, सम्बन्धित थियो लाग्यो। (13)
जन एफ Walvoord, मसीही theologian यसरी सार: "पूर्व-trib को केन्द्रीय तत्व जांघों, प्रभु imminenta को अर्थात् यो सिद्धान्त र सम्बन्धित फिर्ती प्रारम्भिक चर्च मा एक प्रमुख भूमिका छ, को लागि आ प्रभुको स्थिर आशाले मा बस्ने आफ्नो विधानसभा। (12)
एच istorien भविष्यसूचक दर्शनको ठूलो अभाव, वा सुधार नभएसम्म लगभग 1,000 वर्षसम्म भविष्यसूचक वचन को spiritualization, बाबजुद यति चर्च इतिहास छ कि प्रारम्भिक चर्च र प्रारम्भिक पिता येशूको आ को स्थिर आशाले थियो भनेर हामीलाई देखाउँछ।
मिलेनियम शाब्दिक लगभग एफिससका, 431 विज्ञापनमा एक दुनियावी परिषद को परिषद पछि गायब अघि येशूको फिर्ती हुनेछ भन्ने हो जो पूर्व-millennialism, यो निर्णय भएको थियो, र यो रूपमा पाषंड मानिन्छ। यसलाई हामी कसरी भविष्यसूचक वचन फेरि जीवित गरेको भए देख्न सक्ने सुधार समयमा पछि थियो।
पूर्व-trib सिद्धान्त अरूलाई बीच, यूहन्ना Darby, तर मार्टिन लुथर यस बारे प्रकाश प्राप्त अघि "औचित्य विश्वास द्वारा" एक साँचो शिक्षा थियो कि दावी रूपमा सिद्धान्त, त्यो समय अघि अवस्थित छैन भन्न द्वारा, 1800 मा systematized थियो। स्पष्ट विशेष तरिकामा 1500s अघि "औचित्य विश्वास द्वारा" प्रचार गर्ने, तर प्रभु प्रयोग मार्टिन लुथर मानिसहरूलाई ज्योति यो सत्य ल्याउन। यस्तै उहाँले र्याप्चर र येशूको फिर्ती को मामला मा जन Darby संग गरे।
प्रभुको फिर्ती लागि हामी पर्खिरहेका छन्
पी हामी प्रभुको आउँदै जसै कि शब्द हामीलाई भनिएको recis। विशेष वर्ण लागि हामी प्रतीक्षा छैनन् वा एक विशेष घटना कि र्याप्चर जोडिएको छ उत्पन्न गर्नेछ। येशूले प्रभुको हाम्रो लागि छ कि सल्लाह र प्रोत्साहन पनि छ जो कुनै पनि समय, आउन सक्छ। येशूले कुनै पनि समय आउन फिर्ता गर्न सक्ने स्थिर आशाले।
यो थिस्सलोनिकीका चर्च पावलले सान्त्वना थियो, र भर्खरै यो हाम्रो लागि एक सान्त्वना छ जस्तो। उहाँलाई उद्धार गर्न, आउनुहोस् र आउन क्रोध हामीलाई सुरक्षित गर्न लागि हामी पर्खिरहेका छन् (1 थिस्सलोनिकी 1:10)
"प्रारम्भिक चर्चका फादरहरूले"
पावलले Boyer, जब समय कुनै थप गरिनेछ:, पृष्ठ 75th: आधुनिक अमेरिकी संस्कृति (Belkndap प्रेस, 1992 क्याम्ब्रिज, एमए) मा भविष्यवाणी विश्वास
पावलले एन Benware, बुझ्नका अन्त्य टाइम्स भविष्यवाणी, 1955 पृष्ठ 197-198)
टमी आइस, "मोर्गन एडवर्ड्स: एक पूर्व-Darby Rapturist," रूढिवादी Theological Jounal, 1997 पृष्ठ 4-12।
डेव Macpherson, द अकल्पनीय पूर्व-Trib मूल, 1973
Hermas को गोठाला, Hermas को Sherherd को complte लेखोटहरू एक प्रतिलिपि इन्टरनेटमा पाउन सकिन्छ।
"सेन्ट इन्टरनेटमा क्याथोलिक विश्वकोश मा Ephraem '
Crutchfield "अनमोल आशा र एपोस्टोलिक पिता मा संकष्टमा, पृष्ठ 88-101
पावलले एन Benware, बुझ्नका अन्त्य टाइम्स भविष्यवाणी, 1995 पृष्ठ 10-12
Clement को पहिलो Epistle, 23 (बारेमा 96 ई लिखित)
जन एफ Walsvoord, द र्याप्चर प्रश्न संशोधित र बढेको संस्करण, Zondervan, ग्रैंड, 1979, 51st
यिशैको रजत वन, द प्रभुहरूका रिटर्न, न्यूयोर्क 1914, 62-63
घडी 'पृष्ठ 221-222 बाट राखिएको
डी एट यो वर्ष को अन्तिम हप्ता सम्म परमेश्वरको दुलही र मण्डलीको अगाडि एक र्याप्चर लागि एक रक्षा छ जो श्रृंखला "संकष्टकालको अघि येशूको फिर्ती," को पाँचौ भाग हो, र संकष्टमा यसको सुरु हुन्छ।
को र्याप्चर NT र सभा रहस्य गर्न कुराहरू एउटै हो हुनत, त्यसैले हामी अझै पनि GT तस्बिरहरू र प्रतीक मार्फत रातो मुद्दा हेर्न सक्छन्। यो पोस्ट हनोक, लट, Rebecca र इसहाक, रूथ, राहाब, र दानियल र प्रभु संकष्टकालको र सभा सम्बन्धित छ कसरी देखाउँछ कि कथाहरू मा एउटा सुरुवात विन्दु लाग्छ। हामी हनोक को कथा chronologically एक सुरु:
1 उत्पत्ति 5:24 - अनि हनोक यस प्रकारले परमेश्वरले उहाँलाई लगे लागि, उहाँले थिएन, परमेश्वरको हिंडे।
ई NOK थुप्रै तरिकामा पुरानो testamentlig सभा को प्रि-शट, जन्म दुवै नै एक allusion हुन सक्छ जो, तर पनि समय-बिन्दु लागि मण्डलीको र्याप्चर लागि छ।
अनुहार मृत्यु बिना
हिब्रू 11:5- द्वारा विश्वास हनोक मृत्यु सामना बिना लगिएको थियो। र तिनीहरूले परमेश्वरले आफूलाई उसलाई लिएका थिए किनभने, उसलाई फेला फेला परेन।
ई NOK परमेश्वरले आफूलाई उसलाई लिएका थिए लागि मृत्यु टेस्टिङ बिना पक्रेको थियो। एउटै अद्भुत प्रतिज्ञा भएका मण्डलीमा एक शानदार भूमिका मोडेल हनोक कहाँ छ।
एक दिन चुनिएको पुस्ता, प्रभुको निम्ति समात्नु गर्न सकिन्छ, तर मृत्यु सामना गर्न, र, अझै पनि जीवित छन् र रहने हामी, आकाश मा उहाँलाई भेट्न प्रभु नियुक्ति मा समातिए गर्न पहिले सुतेका भएकाहरूलाई संग।
डी एट बाढी आउनुअघि नूहको दिनमा बस्ने मान्छे को तीन अलग अलग प्रकार थिए। यो बाढी सबै perished जहाँ प्रभु, वचन अस्वीकार गर्ने बेग्लै विश्वास थियो। यो नूह र जलप्रलय मार्फत संरक्षित थिए जो आफ्नो परिवार थियो, र यो बाढी आए अघि प्रभुको निम्ति समात्नु थियो हनोक थियो।
आफ्नै तरिकामा प्रत्येक ती मानिसहरू आज हामी हाम्रो समय तुलना गर्न सक्ने तीन अलग अलग विभाग प्रतिनिधित्व गर्छ। बस नै तरिकामा हामी दिन मानिसहरूलाई हामी कष्ट तिर सार्दा र समय समाप्त हुँदा तीन प्रकारका हेर्नुहोस्।
मा हिंडे जो मान्छे
एम नूहको दिनको बाढी मा perished गर्ने änniskorna आफ्नो येशु मा छैन लिएका छन् जसले बेग्लै विश्वास, प्रतिनिधित्व गर्दछ। ती मानिसहरू कष्ट जानेछ, र परमेश्वरको क्रोध उजागर गर्न। संकष्टकालको पश्चाताप नगर्ने ती येशूले न्याय गरिनेछ अनि आगोको आगोको कुण्डमा फालिनेछ।
Noa इजरायल छ
एन OA इस्राएलका शेष प्रभु 1000 वर्ष रैह आफ्नो भाकल पूरा हुनेछ भनेर बुझाउँछ। नूह यसरी इस्राएलका एक निश्चित तरिका मा कष्ट समयमा सुरक्षित गरिने को चुनिएको छ। संकष्टकालको मा 3.5 वर्ष यहूदीहरूले जहाँ प्रभु एटिक्राईष्ट र सताउन लागि तिनीहरूलाई सुरक्षा हुनेछ मरुभूमि मा भाग्न विश्वास हुनेछ। नूह बाढी मार्फत संरक्षित थियो र त्यहाँ पनि हुन यहूदी मान्छे को एक भाग हुनेछ।
हनोक मण्डलीको चित्र छ
ई NOK उहाँले समातिए र बाढी आउनुअघि परमेश्वरको लगियो हुन्छ जब जलप्रलय र परमेश्वरको न्यायको भाग थिए जो मण्डली को एक तस्वीर छ।
प्रभु संसारको न्याय गर्दा एक समय मा हनोक बस्थे। पाप गरेको लक्ष्य थियो, पनि नूहको दिनमा पाप मा परमेश्वरको न्याय आए र उहाँले जलप्रलयको पठाइएको, तर त्यसपछि हनोक पहिले नै प्रभु गर्न समात्नु थियो। बाढी छ परमेश्वरको क्रोध को तस्वीर पृथ्वीमा पठाउने र अन्त समयमा दुष्ट मान्छे - आउन क्रोध (1 थिस्सलोनिकी 1:10)। बस हनोक रूपमा पनि विधानसभा यसको vredenstid पृथ्वीमा बाहिर जान्छ अघि raptured गर्न हुनेछ।
2 पत्रुस 2: 6-9 - सदोम र गमोराका शहर उहाँले विनाश निन्दा गर्नुभयो। उहाँले खरानी तिनीहरूलाई राख्नु र दुष्ट गर्न हुनेछ के उदाहरणको रूपमा दिनुभयो। तर दुष्ट dissolute जीवन द्वारा सास्ती थियो धार्मिक लट, सुरक्षित गरियो। - धर्मी मानिस तिनीहरूमध्ये अर्थात् बस्थे र दिन भएपछि दिन, उहाँको धार्मिक प्राण मा देखेर र तिनीहरूले गरे खराब सुनेपछि द्वारा सास्ती थियो। - प्रभु परीक्षाको बाहिर ईश्वरीय छुटकारा कसरी र अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी राख्न र न्याय दिन सम्म तिनीहरूलाई सजाय जान्दिनँ। अंग्रेजी अनुवाद: प्रलोभनको देखि ईश्वरीय उद्धार गर्न
एन पत्रुस लेख्छन् र आफ्नो पत्र मध्ये चर्च, उहाँले एक प्रोटोटाइप रूपमा लट को उदाहरण प्रयोग सिकाउँछ छ, र हामीलाई बाटो एक व्यावहारिक उदाहरण दिन्छ प्रभु आफ्नो मान्छे समय र ठाउँ यो परमेश्वरको इन्साफ गर्न आउँछ र परीक्षण को समय जब देखि बचाउँछ कि ( परीक्षण देखि - ENG अनुवाद)।
अब्राहाम प्रभु सम्झाउँछ
1 उत्पत्ति 18: 23-25 ​​- अनि अब्राहाम नजिक र भन्नुभयो, "तपाईं दुष्ट संग धार्मिक नाश सायद त्यहाँ पचास शहर भित्र असल तपाईं पनि नष्ट दिनुहुन्छ र छैनन् भन्ने पचास धर्मी लागि ठाउँ छोडूँगा?। त्यहाँ? यो टाढा बन्द गर्न केहि जस्तो, दुष्ट संग धार्मिक मर दिनु, उहाँले सबै पृथ्वी न्यायाधीश नहीं हुनेछ गर्छन्। यो त दुष्ट संग बस सामेल थियो गर्न। टाढा बन्द यसलाई हुन के सही छ ? '
एक Braham प्रभु सदोम र गमोराको आफ्ना तर्क को सम्झना, यो दुष्ट साथ धार्मिक नष्ट गर्न आफ्नो प्रकृति विपरीत छ।
हामीलाई लट को उदाहरण दिएर, लट अस्थायी उदाहरणका थिएन, तर परमेश्वरको पक्ष बाट एक सामान्य सिद्धान्त, प्रभु सधैं "परीक्षाको बाहिर ईश्वरीय बचाउँछ" भनेर देखाउन पत्रुसको सिकाउँछ
प्रभु लट शहर देखि टाढा लाग्छ
डी प्रभु रूपमा एट, शहर बाहिर जाने न्याय देखि लट सुरक्षित सदोम उहाँलाई शारीरिक सार्न थियो। प्रभु बस शहर न्याय गर्न सकिएन छैन र लट शहरमा शारीरिक थियो त लामो कुरा गर्छन्।
धेरै परमेश्वरको इन्साफ बाहिर जान्छ कि पहिले समय र ठाउँ बाट लिएको छ जो मण्डली को एक तस्वीर छ। यसलाई प्रभुको प्रकृतिका अन्य शब्दहरू मा दुष्ट साथ धार्मिक न्याय गर्न होइन, छ।
Rebecca र इसहाक
1 उत्पत्ति 17:4- "हेर्नुहोस्, यो मेरो करार तपाईं संग छ: तपाईं धेरै जातिका पिता हुनेछ।
1 उत्पत्ति 17:6- म तिमीलाई धेरै उर्वर बनाउन हुनेछ, र राष्ट्रका तपाईंबाट आएको, र राजाहरू तपाईं आउन पर्छ।
मा Saks जन्म, अब्राहामलाई परमेश्वरको प्रतिज्ञा एक पूरा भएको थियो। प्रभु अब्राहाम सारा संग एक छोरा प्रतिज्ञा, र अब्राहाम एउटा ठूलो जाति र इसहाक मार्फत धेरै जातिका बुबा बन्न थियो।
प्रभु अब्राहामको हृदय परीक्षण
एन सारा नब्बे वर्ष पुरानो छ, जन्म दिन, त्यो उनको छोरा उनको बुढेसकालमा, बस मार्गमा प्रभु अब्राहाम र सारा प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो प्रतिज्ञा गर्नुभयो। इसहाक त्यसपछि प्रभु उहाँको करार र उहाँको प्रतिज्ञा पूरा भनेर, आफ्नो मात्र सन्तान थियो।
केही समय पछि अब्राहामको हृदयको प्रभु प्रयास र तीन दिन 'यात्रा बलिदान, दूर जान उहाँलाई सोध्न। वेदी जलेको भेटी इसहाक आफ्नो मात्र र प्रिय छोरा हुनेछ।
इसहाक ख्रीष्टको तस्वीर
एन अब्राहाम प्रभु आज्ञाकारी छ, त्यसैले सम्पूर्ण घटना परमेश्वरको केही 2,000 वर्षपछि क्रूसमा गरे के को छाया छ, र त्यहाँ इसहाक येशू ख्रीष्टको स्पष्ट चित्र हो भन्ने इतिहास धेरै छ:
प्रभु अब्राहाम पहिले नै दुई छोरा समयमा थियो तापनि, इसहाक अब्राहामको "मात्र छोरा" भनिन्छ। एउटै तरिकामा येशूले परमेश्वरको मात्र छोरा छ। (1 उत्पत्ति 22: 2)
इसहाक येशूले कलवारी उचाइ मा बलिदान ठाउँमा मा बलिदान थियो। (1 MOS 22:14)
बलिदानको ठाउँमा यात्रा येशू तीन दिन र रात लागि गम्भीर थियो जस्तै तीन दिन लाग्यो। (1 उत्पत्ति 22: 4)
इसहाक पट्टी नै भएको जलेको येशूले पार गर्न आफ्नो क्रस अन्तिम सडक लगे जस्तै ठाउँमा भेटी अप लागि काठ। (1 उत्पत्ति 22: 6)
अब्राहाम र इसहाकको बुबा र छोरा सम्झौता थिए समान तरिका मा, सँगै र कन्सर्ट मा हिंडे। (1 उत्पत्ति 22: 8)
इसहाक यसरी येशूको स्पष्ट चित्र, र कलवारी को क्रूसमा भयो कि काम हो। अब्राहाम अवस्थाको प्रभुमा पूर्ण भरोसा र इसहाक सिकार पछि फेरि फेरि भनेर परमेश्वरले विश्वास गरे।
दासले एलीएजर - पवित्र आत्मा को तस्वीर
1 उत्पत्ति 15: 2-3 - तर अब्रामले भने; "प्रभु, प्रभु, के तिमी मलाई दिनुहुन्छ? । देखेर म टाढा अपुताली जानुहोस्, र मेरो घर को हकदार दमीशक एलीएजर छ "अब्रामले थप भन्नुभयो; "हेर्नुहोस्, म कुनै पनि सन्तानको उत्पादन छैन। मेरो घर को एक मलाई अधिकार पाउनेछन्। "
एस इसहाक एक दुलही खोज्न गर्दा unifier अब्राहाम एक आफ्नै परिवार बीच, इसहाक लागि दुलही खोज्न आफ्नो Housekeeping, एलीएजरले आफ्नो पुरानो दास पठाउँछ। कतै अध्याय 22 मा सम्पूर्ण कहानी मा, हामी दासको नाम हेर्नुहोस्। तर 1 प्रस्थान अध्याय 15 मा:2हामी अब्राहामको जेठो दास नाम भनेर एलीएजर र सुरुमा अब्राहामको घरमा हकदार थियो सिक्न।
यूहन्ना 15: 26-27, हामी पवित्र आत्मा बारेमा धेरै कुराहरू सिक्न। उहाँले पिताको भाग छैन, र ख्रीष्टको पुष्टि गर्छ। उहाँले पनि हाम्रो सहायक र सत्यको आत्मा हुनुहुन्छ।
दासले एलीएजर पवित्र आत्मा को तस्वीर छ। उहाँले अब्राहाम द्वारा पठाइएको थियो। उहाँले अज्ञात थियो र आफूलाई बारेमा कुरा थिएन, तर Rebecca, इसहाक लागि भविष्यमा दुलही लागि testified। त्यस्तै बोल्ने, पवित्र आत्मा छैन आफूलाई बारेमा छ, तर इशारा र चर्च येशूको बारेमा गवाही। एलीएजर जो हाम्रो जीवनमा पवित्र आत्मा गरेको outpouring को तस्वीर हुन सक्छ पानी राम्रो, मा Rebecca पूरा। नाम एलीएजर पवित्र आत्मा "सान्त्वनादाता" जस्तै हो।
Rebecca - ख्रीष्टको दुलही
पी इसहाक ख्रीष्टको तस्वीर छ, र दास एलीएजर पवित्र आत्मा को तस्वीर छ भनेर नै बाटो, Rebecca मण्डली ख्रीष्टको दुलही को एक प्रकार छ।
Rebecca त्यसपछि बेबिलोनिया मा राख्नु जो अब्राहाम, जस्तै शहर आउँछ। बेबिलोनको पनि चर्च इच्छा छ र बाहिर लिइएको यस संसारमा, एक तस्वीर छ। Rebecca पनि अब्राहामको एक नातेदार छ, र आध्यात्मिक बोल्ने, अब्राहामको बीउ, सबै मसीहीहरूले जस्तै हो। (रोम 4:16)
त्यो जो पवित्र आत्मा नै बाटो मा, सभा आफ्नो इच्छा अनुसार गौरव, उहाँलाई पूरा गर्दा पनि Rebecca एलीएजर को उपहार प्राप्त गर्नुहोस्। Rebecca दासले कुरा गर्दा, त्यो घर चल्छ र हामीलाई त्यो देखेका र अनुभव छ सबै बताउँछ। विधानसभा गरेको कार्य बाहिर जाने र "सुसमाचार" कुरा र प्रभु हाम्रो जीवनमा गरेको सबै पुष्टि हो।
रात देखि उद्धार
टी jänaren एलीएजर Rebecca बसोबास जहाँ शहर मा राम्रो तरिकाले गर्न साँझ आएको। रात विकार, संकष्टकालको तस्वीर र प्रभुको दिन हो जो अराजकता र अन्योल, जहाँ रात आउँदै छ, प्रतिनिधित्व गर्छ।
हामीले 1 उत्पत्ति 24:63, इसहाक साँझ पूरा जहाँ आफ्नो भविष्य दुलही मा नै बाटो मा हेर्नुहोस्। उहाँले उनको प्राप्त हुनेछ, र उहाँले Rebecca इसहाकको पत्नी हुन्छ जहाँ आफ्नो आमाको पाल, मा उनको ल्याउँछ।
ख्रीष्टको शुद्ध कुमारी
वी Rebecca कुनै एक नजिक जो आएका थिए एक जवान केटी, (1 puree 22:16) हो भनेर जान्न। त्यसै गरी, ख्रीष्टको शुद्ध कुमारी रूपमा मण्डली र एउटा मानिसलाई betrothed।
कथा, एक puree 24 को अन्त्यमा: 62-67, हामी इसहाक (दूल्हा) रात (संकष्टकालको) अघि, साँझ गर्न फर्काउछ हेर्न र एलीएजर (पवित्र आत्मा) पूरा गर्न (को र्याप्चर) Rebecca (दुलही) ल्याउन बारेमा छ इसहाक पहिलो पटक सामना गर्न सामना। त्यसै गरी, पवित्र आत्मा, मण्डलीको, साँझ, यसको रात र कष्ट सुरु गर्नु अघि uproot गर्न, र हामी हेर्न र पहिलो पटक प्रभु हाम्रो दुलहा भेट्न प्राप्त हुनेछ।
यहोशू 1:।2- "मेरो दास मोशाले मरिसकेको छ अब म इस्राएलका सन्तानहरू दिन जो भूमिमा उत्पन्न, अधिक जोर्डन जाने, तपाईं र यो सबै मान्छे,।
एच राहाब को istorien बारेमा 500 वर्ष धेरै यो अवधिमा इस्राएललाई भएको छ, उत्पत्ति अध्याय 1 24 ऐतिहासिक मा इसहाक र Rebecca पछि सेट गरिएको छ।
इजरायल प्रभु चमत्कारपूर्ण ढङ्गमा कसरी छुटकारा मिश्रको दासत्वबाट को अवधि अनुभव छ, र त्यसपछि र मोशाले दासत्वबाट बाहिर मान्छे सुरक्षित गरियो। यहूदी मान्छे 40 वर्ष मरुभूमिमा अलमलिएको पछि, शत्रु पराजित र परमेश्वरको प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो कि प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा भूमि लिन मान्छे नेतृत्व गर्ने अप यहोशूले प्रभु, यात्रा।
यरीहो दुई जासुसहरूलाई
Jos 2:9- "म प्रभु तपाईं यो भूमि दिनुभएको छ भनेर थाहा र तपाईं को आतंक हामीलाई पतित छ, र सबै बासिन्दाहरू लागि डर।
मा इजरायल यरीहो ओगटेको कि efore, दुई जासुसहरूलाई देशमा र यरीहो शहर बाहिर जासुसी गर्न पठाए। जासुसहरूलाई खोजी र कसले मानिसहरू लागि देख थिए शहर मान्छे को लागि दुई जासुसहरूलाई लुकाउँछे गर्ने वेश्या राहाब, संग शरण खोजिरहेका थिए।
राहाब आफ्नो विश्वास र स्काउट्स लागि आफ्नो विश्वस्तता, इस्राएलका परमेश्वरले तिनीहरूलाई भूमि दिनुभएको छ profess। स्काउट्स उनको र इस्राएलका शहर ओगटेको दिन उनको परिवारको लागि दुवै, सुरक्षा को एक प्रतिज्ञा उनको दिन किन त्यो सोध्छन्।
न्याय देखि उद्धार
ई विन्डो मा TT रातो स्ट्रिङ, जहाँ राहाब र उनको परिवार जम्मा भए यो थियो कि साइन हुनेछ। को Israeli सैनिकहरू स्ट्रिङ देखे, डाउनलोड र जासुसहरूलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो जस्तै विनाश तिनीहरूलाई राहाब र उनको परिवार सुरक्षित गरियो।
मण्डलीको एक तस्वीर
एस Kokan राहाब मण्डलीको चित्र छ। त्यो मूर्तिपूजक, वेश्या र पापी इस्राएलका परमेश्वरले आफ्नो विश्वास confesses गर्ने छ। उनको मुक्तिको लागि कारण छ जो यहूदी मान्छे, लागि महसुस गर्दा त्यो, फिक्री गर्नुहुन्छ।
यरीहो तिनीहरूलाई लागि सुरक्षित छ जो यस संसारमा, एक तस्वीर छ। राहाब (विधानसभा) शहर नाश र जलाइएको (संकष्टकालको) भनेर पहिले, यरीहो (विश्व) हटाइएको छ
आर यु टी पुस्तक भनिन्छ "छुटकारा प्रेम कथा," र नाओमी, किनभने इस्राएलका मा अनिकाल आफ्नो भूमि गुमाउनु गर्ने बेतलेहेममा देखि एक यहूदी महिला बारे छ, र त्यसपछि मोआब (जोर्डन) गर्न भाग्न बाध्य।
त्यसको केही समयपछि उनको पति मृत्यु र उनको विदेश मा एक्लै र गरिब छोड्छ। अनिकालको पालो पछि नाओमी उनको छोरी रूथ, उनको कहिल्यै छोड्न sworn छ जो संग बेतलेहेममा फर्के। रूथ पनि हत्या गर्ने रूथ छोराहरू मध्ये एक विवाह गरेकी एक मोआबी स्त्री छ। दुवै बेतलेहेममा फिर्ता हुँदा, त्यसैले एक प्रमुख यहूदी मानिस, बोअज, रूथ प्रेम बन्ने र उनको विवाह।
छुटकारा र विवाह को व्यवस्था गरेर हामी त्यो हराएको थियो नाओमी दुवै र रूथ मोचन, र नाओमी आफ्नो भूमि फिर्ता प्राप्त अनुभव।
एच रूथको istorien जन्म, मुक्ति र छुटकारा को एउटा अचम्मको कथा छ, तर पनि मण्डली र कष्ट एक प्रतीकात्मक तस्बिर दिन्छ।
नाओमी इस्राएलका तस्वीर छ, र रूथ förlösaren संग विवाह भएको छ heathen सभा को तस्वीर छ, यहूदी मानिस बोअज, मसीहको तस्वीर छ जो। नाओमी इस्राएलका 2000 वर्ष पहिले उनको देश बहिष्कार थियो जस्तै किनभने अनिकाल को आफ्नो देश भाग्नुपरेको थियो। यस इलाकाका इजरायल (रोमी 11:25) को प्रभावित भाग मा सख्त गर्दा, यहूदीहरूले विश्वास द्वारा मसीह को भाग थियो।
बाटो मा इजरायल (नाओमी) उद्धार, त्यसैले मसीहको मूर्तिपूजक विवाह (रूथ) लिन। बोअज redeems र तिनीहरूले मा हो अवस्थामा रूथ र नाओमी दुवै बचाउँछ, र अन्तमा स्थापना इजरायल (नाओमी) पूर्णतया।
संकष्टकालको देखि उद्धार
एस amtidigt त रूथ, प्रभु बचाउँछ कि कष्ट उम्कन चर्च को एक तस्वीर को कथा छ।
हामी यो साक्षी भनेर अध्याय तीन तीन परिस्थिति पाउन। पहिलो, रूथ तल जान्छ tröskeplatsen उनको आमाले सोध्नुभयो रूपमा। दोस्रो, बोअज उठेँ र मा रूथ फेला मध्यरात समय त्यो उसलाई शरण खोजे गर्दा। तेस्रो, रूथ अनुमति पायो को cloak Boas अन्तर्गत लुकाउन उनको आफ्ना स्कर्ट फैलाउन गर्ने, र बोअज उनको उद्धारकर्ता यो रात भयो।
Tröskeplatsen - कष्ट एक तस्वीर
टी röskeplatsen अतिरिक्त र NT दुवै मा धेरै ठाउँमा न्याय र हामीले सामना कष्ट को तस्वीर छ (आमोस 1:3यशैया 21:10, 41: 14-16, प्रकाश 14: 19-20)।
रात र बिहान पनि संकष्टमा, न्यायको र पुनर्स्थापना दुवै को तस्वीर छ। कुनै मानिस काम गर्न सक्छन् जहाँ (यूहन्ना 11: 9) येशूले आ रात को बोल्नुभएको छ, र पावलले यस्तो चेतावनी दिन्छ न्यायको समय रात मा चोर रूपमा आउनेछ छ जो प्रभुको दिन, (1 थिस्सलोनिकी 5: 2)।
Boas सुरक्षा मेन्टल समयमा
रूथ 3:9- "के तपाईं हुन्" उहाँले सोध्नुभयो। त्यो जवाफ दिनुभयो: "म रूथ हुँ, तपाईंको maidservant। आफ्नो maidservant तपाइँको manteflik फैलाउन तिमी मेरो उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ लागि।
आर बाहिर रात थियो सम्म आफ्नो खुट्टा मा cloak Boas अन्तर्गत लुकाउन थियो र यसलाई फेरि बिहान थियो।
एउटै तरिकामा, प्रभु रक्षा र अन्धकार dissipated र बिहान dawns सम्म क्रोध, अर्को रात को समयमा आफ्नो मण्डलीको लुकाउन हुनेछ। संकष्टकालको समयमा विधानसभा ठाँउ, प्रभुको मेन्टल, स्वर्गीय यरूशलेममा अन्तर्गत हुन, र आकाशीय Chambers को संरक्षण अन्तर्गत हुनेछ।
मेरो मान्छे आउछन् र तपाईंको Chambers जान
यशैया 26: 17-21 - यो हे प्रभु, तिमीलाई हाम्रो साथ छ त त्यो, जन्म दिन, र आफ्नो दुखाइ रुनु बारेमा हुँदा एक गर्भवती महिला squirm रूपमा। हामी गर्भधारण र writhed, तर हामी हावा जन्म दिए। हामी देशमा मुक्ति कमाएका छैन, र कुनै एक पृथ्वीमा जन्म हुन्छ। तर आफ्नो मृत्यु बस्नेछन्; आफ्नो शरीर उठ्नेछ। उठ र गाउन, तपाईंको शीत प्रकाश को एक शीत छ लागि भनेर, धूलो बस्ने तिमीहरू र पृथ्वी मृत बाहिर दिनेछु। मेरो मान्छे आउछन् र तपाईंको Chambers जान, तपाईं पछाडि ढोका बन्द। सम्म क्रोध द्वारा पारित गरेको छ छोटो क्षण आफैलाई लुकाउन। हेर लागि, परमप्रभुले आफ्नो iniquity लागि पृथ्वीको बासिन्दाहरू दण्ड आफ्नो स्थान बाहिर आउँछ। पृथ्वी आफ्नो रगत ऋण नंगे राख्नु हुनेछ र अब आफ्नो slain लुकाउनुहोस्।
डी एट यशैया यस अध्याय जसले लुकाउन र पृथ्वीमा सेट समय क्रोध संग जडान आफ्नो Chambers तिनीहरूलाई सुरक्षित गर्नेछ जो आफ्नो मान्छे, बोलाउन हुनेछ प्रभु साक्षी भनेर अचम्मको पद हुन्छन्।
हामी यशैया देखि यस खण्डमा कहिल्यै अघि पूरा भएको छ कि छैन हेर्न सक्छन्। यो पनि येशूको प्रचार कि पुनरुत्थान सहमत छैन, र दानियल दान 12 यसो भन्छ: 2, हामीलाई थाहा छ, जो संकष्टकालको पछि र अघि हुनेछ। यहाँ यशैया प्रभु आफ्नो Chambers मा उहाँको मान्छे भनिएको गर्दा र पहिले र परमेश्वरको क्रोध पहिले र इन्साफ पृथ्वीमा बाहिर जान्छ पहिलो हुन्छ कि पुनरुत्थान को सट्टा बताइएको छ।
बच्चा संग एक महिला रूपमा
प्रकाश 12: 1-6 - एक ठूलो चिन्ह स्वर्गमा देखा: उनको पाइतालामुनि चन्द्र र उनको टाउको मा बाह्र ताराहरू मुकुट संग, संग सूर्य ढाकिएको एक महिला। त्यो गर्भवती छ र र वितरण गर्न pained कराए।
पी यशैया जस्तै बाटो, यूहन्ना अन्त समय जडानमा एक महिला गर्भवती र travail छ देख्नुहुन्छ। चर्च बाइबल मा जन्म दिने एक महिला रूपमा प्रस्तुत कहिल्यै छ, तर यो अर्कोतर्फ, इजरायल बनाउँछ। महिला संकष्टकालको समयमा येशूको समय दुवै मसीही यहूदीहरू र मसीही यहूदीहरूको एउटा तस्वीर छ।
इजरायल उनले 1000 साल राज्यमा जान्छ अघि मार्फत जाने छ तीन जन्मेका छ। यी जन्मेका सबै तीन यशैया अध्याय 66 मा वर्णन गरिएको:
यशैया 66: 7-8 - सियोन कसैले travail ज्ञात छ अघि, त्यो बच्चा (येशू) जन्म दिन्छ। pangs उनको मा आउन अघि, त्यो एक पुरुष बच्चा जन्म दिनुभएको छ। जो यस्तो कुरा? यो जस्तै केहि देखेको छ जो सुने छ? एक देशमा एक दिन (1948) मा जीवन आउन सक्छ, वा Sion आफ्ना छोराछोरीलाई जन्म दिन किनभने श्रम दुखाइ सुरु पहिले नै गर्दा जाति, एकैचोटि (इस्राएलका मुक्तिको) जन्मन?
त्यसैले, इजरायल अनुभव गर्नेछन्, र समय को क्रोध अघि, प्रभु मरेका खडा छन् दिनेछ, र उहाँले आफ्नो Chambers मा लुकाउन, आफूलाई आफ्नो मान्छे कल हुनेछ travail जडानमा।
जन मा uppryckandets दिन नै अनुभव हुनेछ यो चर्च प्रतिनिधित्व गर्दछ। आदेश मार्फत, प्रधान दूत एक आवाज र परमेश्वरको ट्रम्प, मण्डलीलाई स्वर्गमा मा समातिए गरिनेछ र कष्ट पृथ्वीमा फैलाउनु देख्नेछन्।
एच दानियल बारेमा istorien र आगोको भट्टीमा मा तीन पुरुष, संकष्टकालको र भविष्यमा पूरा को स्पष्ट चित्र देखाउँछ कि पुरानो नियमका को कथाहरू मध्ये एक हो।
दानियल eschatology, सपना, दर्शन मा steeped छ र के गर्न समय को अन्त के भएको छ। विस्तृत दानियल लिएर धेरै लामो समय बादल मडारिरहेको छ, संकष्टकालको वर्णन, दुवै पछाडि र समय मा फर्वार्ड छ प्रकाश पुस्तकका, विपरीत।
दानियल - मण्डलीको एक तस्वीर
एच दानियल र तिनका तीन साथीहरू, को बारे istorien बेबिलोनी कैद, बेबिलोनी राजा समयमा सबै चार सेवा जहाँ सुरुमा ठाउँ लिन्छ।
बस यूसुफ रूपमा दानियलले मात्र राजा उसलाई खडा गर्ने स्थितिमा उच्च हुन्छ। प्रकाश मा, चर्च पनि यस पृथ्वीमा पुजारीहरू र राजाको रूपमा सेवा गर्न सेट गरिएको छ। मिलेनियम मा सम्पन्न गरिनेछ भन्ने कुरा। यसरी, यो दानियल मण्डलीको चित्र छ।
एटिक्राईष्ट को प्रोटोटाइप
K एटिक्राईष्ट को स्पष्ट उदाहरण हो जो युवा नबूकदनेसरले, माथि बाबेलको Dura को सादा मा सुनको मूर्ति धारण थियो। यो मुर्ति उच्च साठी हात र छ व्यापक हात, 666th छ एटिक्राईष्ट भाषण गर्ने तुलना गर्न सकिन्छ छ, नोट
तल गिर र आज्ञा उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई लागि परिणाम आगोको भट्टीमा हालियो गरिने थियो जहाँ यो मूर्ति सेट, उपासना गर्न नबूकदनेसरले जबरजस्ती सबैलाई। बलिरहेको आगोको भट्टी परमेश्वरको क्रोध को तस्वीर र कष्ट मा ठूलो दुःख छ।
आगोको भट्टीमा हालियो।
मलाकी 4: 1 - हेर, दिन आउँछ, यो दन्किरहेको रूपमा बल्छ।
एस adrak, Meshach र Abednego नबूकदनेसरको मुर्ति दण्डवत इन्कार गरे र तिनीहरूले आगोको भट्टीमा हालियो।
राजा आगोको भट्टी सात पटक तपाईं कहिल्यै यो हुन देखेका छौँ भन्दा hotter गरम पर्छ भनेर आज्ञा, र त्यहाँ पूर्णता बोली को तस्वीर छ। प्रभु आगोको भट्टीमा मा Shadrach, Meshach र Abednego सुरक्षित गर्ने आफ्ना दूत पठाउनुभयो, र तिनीहरूले कुनै पनि क्षति वा आगो को प्रभाव बिना बाहिर आए।
दानियल कहाँ छ
एम जहाँ दानियल कहीं छ एक यो कथा को प्रश्न पनि जन्म देती छ। उहाँले मुर्ति गर्न गोडा झुके गर्नेहरूलाई थियो? उहाँले किन उपस्थित थिएन, र किन उहाँले पनि आगोको भट्टीमा हालियो थिएन?
हामी दानियल नबूकदनेसरको मुर्ति गर्न गोडा झुके छैन भनेर एकदम निश्चित हुन सक्छ। जहाँ सबैलाई मुर्ति उपासना थियो दानियल बस प्रस्तुत गरिएको थिएन, वा दुःख को बलिरहेको आगोको भट्टी मा। परमेश्वरले "उहाँलाई लगिएको।" थियो
बी राजा रूपमा eskrivningen थियो आगोको भट्टीमा यी मानिसहरू त्यहाँ तीन यहूदी पुरुषहरूले (दान 3:12) थिए थियो। तीन यहूदी मानिसहरूले चुन्नु इस्राएलका एक तस्वीर, अर्को शब्दमा छ, र दानियल मण्डलीको चित्र छ।
दानियल (विधानसभा), प्रिय (दानियल 10:11), आफ्नो तीन मित्र (इजरायल अवशेषहरु), मध्य र trängslen मार्फत संरक्षित छ, यो आगोको भट्टीमा (कष्ट) आउँदा समय र ठाउँ बाट संरक्षित गरिएको छ।
जी eNom यी हनोक, लट, Rebecca र इसहाक, रूथ, राहाब र दानियलले कथा, हामी ढाँचा र रातो मुद्दा हेर्न सक्छन्।
हामी Housekeeping गर्न झल्काउँछ कि प्रतीकात्मक घटनाहरू र अंक हेर्न, सभा समय हामी बाँचिरहेका छौं। हामी प्रभु जो उहाँले इस्राएलका गर्छ मण्डली, संग नै तरिकामा बताउन गर्दैन देख्न सक्छौं। दुवै समूह मुक्ति प्रभु एक अद्वितीय योजना, उहाँले पूरा हुनेछ जो छ। प्रभु इस्राएलका उहाँले मार्फत आफ्नो करार र प्रतिज्ञा पूरा हुनेछ जो एटिक्राईष्ट र कष्ट लागि यात्रा सुरक्षित गर्नेछ।
उहाँको मण्डलीको लागि परमेश्वरको योजना
पी नै बाटो मा, प्रभु पनि आफ्नो शरीर र दुलही, परमेश्वरको चर्च आफ्नो योजना पूरा गर्नको लागि। कष्ट त येशूले पुन: प्राप्त र त्यसपछि अघि दुलही हटाउने परमेश्वरको इन्साफ पृथ्वीमा बाहिर जाने भनेर, प्रभुको दुलही लागि चाहनुभएको छैन।
यो कष्ट र न्याय अन्तिम आउँदा चर्च समय र स्थान बाट सुरक्षित छ। अनमोल आशा, हाम्रो परमेश्वर र प्रभु येशू ख्रीष्ट, जो न्याय हामीलाई सुरक्षित हुनेछ।
कृपया भ्रमण Miakel Walfridssons ब्लग: